မရေးတော့ဘူးလို့လည်း ခဏခဏဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ မရေးဖြစ်အောင်လည်း ကိုယ့်စိတ်ကို ထိန်းထား ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ဘယ်လောက်ထိန်းထိန်း ကျွန်တော့်ရဲ့ သန္ဓေဗီဇကိုက မကောင်းတဲ့အတွက် ဘယ်လို မှ ထိန်းမရတော့ဘဲ ဒီစာကို ရေးဖြစ်သွားတာပါ။
ဒီစာကိုရေးဖြစ်တဲ့အတွက် ရှိပြီးသားမိတ်ဆွေတွေ ဆုံးရှုံးကုန်မှာ ဖြစ်သလို မိတ်ဆွေအဖြစ် မရှိသေးတဲ့ သူတွေလည်း ရန်သူအဖြစ်ရောက်သွားမှာ သေချာပါတယ်။ နဂိုကတည်းက ကျွန်တော့် အပေါ် ခါးခါး သီးသီးမုန်း နေတဲ့ လူတွေကတော့ မျက်နှာကို မကြည့်ချင်လောက်အောင် အသံကို မကြားချင် လောက်အောင် ရွံရှာစက်ဆုပ်သွားမှာ သေချာပါတယ်။
ဘာအကြောင်းကြောင့် အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားရမှာလဲလို့ မေးခဲ့ရင် ကျွန်တော်ရေးမယ့်အကြောင်း က မြန်မာ တစ်ပြည်လုံးက ပရိသတ်တွေ သည်းသည်းလှုပ်ချစ်နေကြတဲ့ အားပေးနေကြတဲ့ နိုင်ငံ ကျော်အနုပညာရှင် ပြေတီဦး နဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင် တို့ရဲ့ အကြောင်းပါ။
ကျွန်တော် က မနာလိုလိ်ု့ မရှုစိမ့်လို့ မုဒိတာမပွားနိုင်လို့ ဒီလိုမျိုးရေးတာလို့ သတ်မှတ်မှာ သေချာ ပါတယ်။ သူတို့ဇနီးမောင်နှံအပေါ်မှာ အချစ်ကြီး ချစ်နေတဲ့ ပရိသတ် တွေလည်း ကျွန်တော့်အပေါ် အမုန်းကြီး မုန်းသွားမှာ သေချာပါတယ်။
တကယ်တော့ ပြေတီဦးနဲ့ကျွန်တော်ဟာ အင်မတန်မှ ချစ်ခင်ရင်နှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းအရင်း ကြီးတွေပါပဲ။ သုညအောက် ရောက်နေတဲ့ ဘသတွေကို အတူတူဖြတ်သန်းရင်း လည်ပင်းဖက် ပေါင်းလာကြတဲ့ ညီအစ်ကို သူငယ်ချင်းတွေပါ။ အခုအချိန်ထိလည်း သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြားမှာ အမုန်း ပွားစရာတစ်စက်မှ မရှိ သလို ပြဿနာလည်း နည်းနည်းလေးတောင် မရှိပါဘူး။
ဒါဆိုရင် ဒီစာမရေးဘဲ မင်းတို့သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း လူချင်းတွေ့ပြီး ပြောလိုက်ပါလားလို့ စာဖတ် ပရိသတ်ကြီးက ပြောချင်ကောင်းပြောချင်ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့် ကျွန်တော် ဒီစာကို ရေးရသလဲ ဆိုရင်...
ဒီစာထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာဟာ ပြေတီဦးတစ်ယောက်တည်းနဲ့ ပတ်သက်နေတာ မ ဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ စာနယ်ဇင်းလောကမှာ အင်မတန်မှကို ထိပ်ဆုံးရောက်နေတဲ့ ဆရာ ဦးဝင်းငြိမ်းနဲ့ ဆရာ ဦးမြတ်ခိုင် တို့ နှစ်ယောက်လည်း ပါဝင်ပတ်သက်နေလို့ပါ။
ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုလောကမှာ အင်မတန်မှကို အောင်မြင်ကျော်ကြားပြီး ဇာတ်ကားကောင်း ပေါင်းများစွာ တပည့်တပန်း ပေါင်းများစွာကို ရိုက်ကူးမွေးထုတ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံကျော်စူပါဒါရိုက်တာ မောင်မျိုးမင်း (ရင်တွင်းဖြစ်) လည်း ပါနေလို့ပါ။
ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်သူလောကမှာ အင်မတန်မှ လုပ်သက်ရှည်တဲ့ အတွေ့အကြုံပေါင်း မြောက်များစွာ ရှိတဲ့ မင်းသားပေါင်းများစွာနဲ့ အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ထုတ်လုပ်သူ ကိုဝင်းကြည်လည်း ပါ ၀င် နေလို့ပါ။
အဲဒီတော့ ဒီအကြောင်းအရာတွေကို စာတစ်စောင်ပေတစ်ဖွဲ့ မရေးဘဲ သူတို့တစ်ယောက် ချင်းစီကို သွားပြီး စကားတွေပြော ဆွေးနွေးငြင်းခုံနေကြမယ်ဆိုရင် သူတို့ရောကျွန်တော်ပါ အချိန် ကုန် အလုပ်ပျက် ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် ဒီစာစုကို မိတ်ဆွေအပျက်ခံ ရန်သူအပွားခံပြီး ကျွန်တော် ရေးလိုက်တာပါ။
ဒီစာစုကို ရေးဖြစ်စေတဲ့ နောက်တစ်ချက်ကတော့ အခုအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည် ဟာ အပြောင်းအလဲ တွေများစွာနဲ့ အကောင်းဘတ်ကို ဦးတည်နေတဲ့ အချိန်အခါ ဖြစ်ပါတယ်။
အဖွဲ့အစည်း တွေ၊ ပါတီတွေ၊ ဖောင်ဒေးရှင်းတွေကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခွင့် ပေးနေတဲ့ အချိန်လည်း ဖြစ် ပါတယ်။
အဲဒီတော့ ဖောင်ဒေးရှင်းတွေဆိုတာ သိပ်မကြာခင်ကာလမှာ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ထပ်ပေါ် လာတော့မှာပါ။ အဲဒီ ပေါ်လာတဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်းတွေက နိုင်ငံတော်ရဲ့ မျိုးဆက်လူငယ်တွေရဲ့ ဘ၀ ကို မြှင့်တင်ပေးဖို့ ဆိုတဲ့စိတ် နဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လို့ အခုပြေတီဦး ဦးဆောင်ပြီး နိုင်ငံကျော် စာနယ် ဇင်းဆရာကြီးများ ဒါရိုက်တာကြီးများ လုပ်ကြတဲ့ပွဲမျိုးကို အမှန်လို့ထင်ပြီး ဆက်လုပ်နေကြမယ်ဆို ရင်....
ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်လောင်းတွေဟာ မျက်လွှာလေးချ ခေါင်း လေးငုံ့ပြီး ဘယ်သူက များ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုပြောလိုက်လေမလဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ တထိတ်ထိတ် နေရမှာ သေချာပါတယ်။
ကျွန်တော် ရေးချင်တဲ့ ပြောချင်တဲ့ အဓိကအကြောင်းကို သွားပါတော့မယ်။
ဘယ်လူမျိုး ဘယ်တိုင်းပြည်မှာမဆို လှူတာတန်းတာ ပေးတာကမ်းတာ ထောက်ပံ့တာဟာ ကောင်းမွန် တဲ့ အလုပ် လို့ သတ်မှတ်ထားကြတာပါ။ ဘာသာမရွေး လူမျိုးမရွေးပေါ့။
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ပြေတီဦးလုပ်တဲ့ ပြေတီဦးဖောင်ဒေးရှင်းဆိုတဲ့ အလုပ်ဟာလည်း အင်မတန်မှ သန့်စင် မွန်မြတ်တဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှု အလုပ်တစ်ခုပါ။
တစ်ခုလို့သာဆိုပေမယ့် အဲဒီတစ်ခုက တော်တော်အရေးကြီးတဲ့ တစ်ခုပါ။ အဲဒီတစ်ခု ကြောင့် ကျွန်တော် ဒီစာစုကို ရေးဖြစ်တာပါ။
အဲဒီတစ်ခုက ဘာလဲဆိုရင် ပြေတီဦးဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ အလှူငွေပေးအပ်တဲ့ နေရာမှာ ကလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြုမူလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ပါပဲ။ ပြေတီဦးဖောင်ဒေးရှင်းက ကူ ညီထောက်ပံ့ပြီး ပညာဒါန ပေးနေတဲ့ ကလေးတွေဟာ နောင်တစ်ချိန်မှာ သမားဂိုဏ်းဝင် ဆရာဝန် ဖြစ်လာမယ့် လူတွေပါ။
သူတို့ရဲ့ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး ဆရာ၊ ဆရာမအခေါ်ခံရမယ့်လူတွေပါ။
သာမန် ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားတွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။
တကယ်လို့ သာမန်ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားတွေ ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း ကျွန်တောကတော့ ဒီစာ ကို ရေးမှာပါ။
ဆရာဝန်လောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အင်ဂျင်နီယာလောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆိုက်ကားသမားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရေ လှည်းသမား ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အုတ်ရွက်တဲ့ လူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဂျာနယ်ရောင်းတဲ့ သူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အသက်ဆယ့်ရှစ်နှစ် မပြည့် မချင်း လူငယ် တွေပါပဲ။
အဲဒီလူငယ်တွေဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ သူတို့မှာ တောက်ပတဲ့ အနာ ဂတ်တွေ ကိုယ်စီ ရှိ်ကြပါတယ်။ လှပတဲ့ အိပ်မက်တွေလည်း ကိုယ်စီကိုယ်ငှ ရှိနေတတ်ကြပါတယ်။
သူတို့ရဲ့အနာဂတ်၊ သူတို့ရဲ့အိပ်မက်ဟာ သူတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်း ဖြစ်မလာနိုင်ဘူး လို့ ဘယ်သူ ကမှ ပြောလို့မရနိုင်ပါဘူး။
တောက်ပ တဲ့ အနာဂတ်၊ လှပတဲ့အိပ်မက်၊ တက်ကြွတဲ့ခြေလှမ်းတွေ ကိုယ်စီကိုယ်စီ ရှိနေ ကြတဲ့ လူငယ် တွေရဲ့ဘ၀ကို အားငယ်စိတ်ဝင်အောင်၊ သိမ်ငယ်စိတ်ဝင်အောင်၊ အညွှန့်ချိုးခံရတဲ့ စိတ်မျိုး ၀င်လာအောင်၊ လုပ်တဲ့အပြုအမူမှန်သမျှ လုပ်တဲ့သူမှန်သမျှကို ကျွန်တော်ကတော့ ပြင်း ပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက် ရှုတ်ချပါတယ်။ လူငယ်ဆိုတာ တိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့ အနာဂတ်အတွက် အရေးပါတဲ့ သူတွေပါ။
ပြေတီဦး ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းက တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ အခမ်းအနားကို ကန်တော်ကြီးဝန်း အတွင်းရှုိ ကရ၀ိတ် ဟိုတယ် မှာ (၃၀.၁၁.၂၀၁၁)နေ့က ခမ်းခမ်းနားနား ကျင်းပသွားပါတယ်။ ဂုဏ်သရေရှိ လူကြီး လူကောင်းပေါင်း များစွာလည်း တက်ရောက် အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။
ပြေတီဦးက ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ကလေးတွေကို အလှူငွေပေးအပ်နေတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ၊ ဆင်းရဲ နွမ်းပါးတဲ့ ကလေးတွေက သူတို့ရထားတဲ့ ထောက်ပံ့ကြေးလေးတွေကို ကိုင်ပြီး ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကို အလယ်မှာ ထားပြီး ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ။
ဆရာဝန်မလောင်းတွေက ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ဒူးထောက်ထိုင်၊ ဆရာဝန်လောင်းလေးတွေက ကုလားထိုင် တွေရဲ့နောက်မှာ မတ်တပ်ရပ် အလယ်က ကုလားထိုင်တွေပေါ်မှာတော့ ပြေတီဦးရယ်၊ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ရယ် စာနယ်ဇင်းဆရာနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဆရာမြတ်ခိုင်နဲ့ ဆရာဦးဝင်းငြိမ်းရယ်၊ ဒါရိုက်တာ ကြီးဖြစ်တဲ့ ဒါရိုက်တာမောင်မျိုးမင်း ရယ်၊ စီးပွားရေးသမားဖြစ်တဲ့ ထုတ်လုပ်သူ ကိုဝင်းကြည်ရယ် ခုံတွေပေါ်မှာ ခန့်ခန့်ကြီး ထိုင်လို့ပေါ့။ ကျန်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက် ကိုတော့ ကျွန်တော် မသိပါဘူး။
နောက်တစ်ပုံကတော့ ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်က ခုံပေါ်မှာထိုင်ပြီး ဆရာဝန်လောင်း ငယ်ကလေး တွေက လက်ဆယ်ဖြာ ထိပ်မှာမိုးပြီး ရှိခိုးနေတဲ့ ဓါတ်ပုံပါ။ ပေါ်ပြူလာဂျာနယ်မှာ ပါပါ တယ်။
ဂျာနယ်တွေမှာ ပါတဲ့ အဲဒီဓါတ်ပုံတွေကို ကျွန်တော်သေသေချာချာ ကြည့်ပါတယ်။
ကြည့်တာ မှ နှစ်ရက်သုံးရက်ကို ကြည့်တာပါ။
အဲဒီလိုကြည့်ရင်း ကြည့်ရင်းကနေ ဒီစာရေးဖို့ဖြစ်လာတာပါ။ အဲဒီဓါတ်ပုံတွေမှာပါတဲ့ လူငယ်တွေ အားလုံး လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဟက်ဟက်ပက်ပက် ၀မ်းပမ်းတသာ ဘယ်သူမှ ပြုံးမနေကြ ပါဘူး။
အခြေအနေ နဲ့ သူတို့ပြုမူဆက်ဆံခံရတာကလည်း ပြုံးချင်စရာမကောင်းသလို၊ ပျော်ဖို့လည်း ကောင်းမှမကောင်းတာ။ ဂျာနယ်တွေမှာ ဖော်ပြတဲ့ဓါတ်ပုံတွေကို စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီး သိအောင် ကျွန်တော်ကူးယူဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူတို့လိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကလေးတွေရဲ့ မျက်နှာလေးတွေကို ဖျက်ထားပါ တယ်။
အပေါ်မှာ ရေးခဲ့သလိုပေါ့ လှူတယ် တန်းတယ် ပေးတယ် ကမ်းတယ်ဆိုတာဟာ အင်မတန် ကောင်းမွန်တဲ့ ကိစ္စ တစ်ခုပါ။ လှူဒါန်းထောက်ပံ့တတ်ဖို့တော့ လိုတာပေါ့။
ပြေတီဦး ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းက ထောက်ပံ့တဲ့ ကလေးတွေကို ပညာသင်ကြေး ပေးတဲ့ အခါမှာ သူတို့ ကော်မတီဝင် တွေစုပြီး တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ အိမ်မှာ ပေးလို့ရော မရနိုင်ဘူး လား။
ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း လူတွေအများကြီးမရှိတဲ့နေရာ ဓါတ်ပုံကင်မရာတွေ မရှိတဲ့နေရာ၊ ရုပ်သံလိုင်း တွေရဲ့ ကင်မရာတွေမရှိတဲ့ နေရာမှာ ပေးရင်ရှေုာ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလား။ ပေးလို့ မရဘူးလား။
ကလေးတွေ နဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး နွေးနွေးထွေးထွေး ဆက်ဆံချင်တယ်ဆိုရင်လည်း အဲဒီတစ် နှစ်ပြည့် အခမ်းအနားမှာ ကလေးတွေကို ဖိတ်ပြီး သီးသန့်ဝိုင်းနှစ်ဝိုင်းပေးထားလိုက်ရင် ရပါပြီ။ ရောက်လာကြတဲ့ မင်းသား မင်းသမီးတွေကို သူတို့ကြည့်ပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပျော်နိုင်ကြမှာပေါ့။
ခုတော့ ပြေတီဦးနဲ့ သူတို့ရဲ့ ကော်မတီဝင်တွေ ဦးဆောင်ပြီး စီစဉ်လိုက်တဲ့ အစီအစဉ်တွေ ကြောင့် ကလေး တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာအပျော်တွေ ခမ်းခြောက်ကုန်ပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ တောက်ပတြံ အနာဂတ် ဟာလည်း ခေါင်ညွှန့်အချိုးခံလိုက်ရသလိုပါပဲ။
ကရ၀ိတ်ခန်းမပေါ်သို့ ပြေတီဦးလှမ်းတက်လာတဲ့ခံစားချက်ဟာ အောင်မြင်မှုတွေ၊ ယုံ ကြည်မှုတွေ၊ ကျေနပ်မှု တွေ၊ ပျော်ရွင်မှုတွေ၊ အားရမှုတွေပါ။
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ပြည်သူချစ်တဲ့နိုင်ငံကျော်မင်းသား တစ်ယောက်က မရှိနွမ်းပါးတဲ့ ကလေး တွေကို ထောက်ပံ့ငွေ ပေးအပ်ရမှာလေ။ ကင်မရာမီးတွေက တစ်ဖျပ်ဖျပ်၊ ရုပ်သံကင်မရှုာ တွေက တလှုပ်လှုပ်၊ ဂုဏ်သရေရှိ လူကြီးလူကောင်းတွေကလည်း တစ်ပြုံးပြုံးပေါ့။
တစ်ဖက်က ထောက်ပံ့ကြေးယူမယ့်ကလေးရဲ့ နေရာကနေ ၀င်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ခံစား ကြည့်ကြ ရအောင် ပါ။
စင်ပေါ် ကို တက်လာတဲ့ သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာ အားငယ်စိတ်၊ သိမ်ငယ်စိတ်၊ ရှက်စိတ်၊ ကြောက် ရွံ့စိတ် တွေ နဲ့ ပါ။ ဘယ်လူငယ်တစ်ယောက်ကမှ အဲဒီလိုတက်ယူရတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက် ပျော်ရွင်ခြင်း ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး ဆိ်ုတာ သေချာပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် လူတွေအများကြီးရဲ့ကြားထဲမှာ ပွဲကိုလာတဲ့ လူတွေအားလုံး ၀ိုင်း ကြည့်နေတဲ့ မျက်လုံးတွေရဲ့ရှေ့မှာ ပြေတီဦးကမ်းပေးတဲ့လက်ထဲက သူယူရမယ့်အရာဟာ သူ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့ ချီးမြင့်တဲ့ ဆုကြေးငွေ မဟုတ်ဘဲ သူ့မိဘတွေက ဆင်းရဲလွန်းလို့ သူ့ကို ကျောင်း ဆက်ထားမပေးနိုင်တဲ့အတွက် ထောက်ပံ့ကြေး ကို သူယူနေရတာပါ။
သူယူရတဲ့နေရာ က ကင်မရာမီးတွေ တစ်ဖျပ်ဖျပ်၊ ရုပ်သံကင်မရာတွေ တစ်လှုပ်လှုပ် ၊ ဂုဏ် သရေရှိ လူကြီးလူကောင်း တွေကလည်း တစ်ပြုံးပြုံးနဲ့ နေရာလေ။
ကျွန်တော် ကျွန်မတို့ဟာ ပြေတီဦးပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်း က ထောက်ပံ့တဲ့ငွေနဲ့ ကျောင်း တက်နေရတဲ့ သူတွေပါ ဆိုတာကို လူတွေသိသွားအောင် လူတွေမြင်သွားအောင် အလုပ်ခံလိုက်ရ တာနဲ့ အတူတူပါပဲ၊ တက္ကသိုလ် ၀င်တန်း မအောင်ခင်တစ်ချိန်လုံး သူတို့တွေဟာ သူတို့တက်ရောက် ပညာသင်ကြားရတဲ့ စာသင်ခန်း ရဲ့ကျောင်းထဲမှာ ပညာဂုဏ်နဲ့ လင်းလက်ခဲ့တဲ့ လူတွေချည်းပါပဲ။
သူတို့ကို ကြည့်တဲ့မျက်လုံးတွေဟာ အားကျမှု၊ ဂုဏ်ယူမှု၊ အထင်ကြီးမှုတွေနဲ့ အကြည့်ခံခဲ့ ရမှာပါ။ ထောက်ပံ့ငွေ ပေးအပ်တဲ့ အခမ်းအနားက မျက်လုံးတွေနဲ့ တခြားစီပေါ့။
အဲဒီအခမ်းအနား မှာ အဲဒီလိုပေးပြီး ပေးတဲ့ပုံတွေကို ဂျာနယ်ရဲ့ စာမျက်နှာထဲမှာ ပုံအကြီးကြီး နဲ့ ထပ်ပြီး ဖော်ပြလိုက်တာဟာ သူတို့လေးတွေရဲ့ အနာဂတ် ညှိုးနွမ်းသွားအောင် သူတ်ို့လေး တွေရဲ့ရင်ထဲမှာ သိမ်ငယ်စိတ် တွေ ၀င်သွားအောင် လုပ်လိုက်သလိုပါပဲ။
ဒီလုပ်ရပ် ဟာ ကျွန်တော်ရေးပြတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မျိုး သက်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာ ပြေတီဦးက မသိဘူး ဆိုရင်တောင်မှ သူ့ရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းကော်မတီမှာပါတဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေ သိသင့်ပါတယ်။ သိဖို့ လည်း ကောင်းပါတယ်။ သားသမီးချင်းလည်း စာနာကြည့်သင့်ပါတယ်။
တကယ်ဆိုရင် ထောက်ပံ့ကြေးထူရတယ်ဆိုကတည်းက အဲဒီကလေးနဲ့ အဲဒီကလေးရဲ့ မိဘတွေဟာ အင်မတန် မှကို ဆင်းရဲနွမ်းပါးလွန်းလို့ဆိုတာ သေချာပါတယ်
ဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့ကြားက သူတို့ရဲ့ရင်သွေး သားသမီးလေးတွေကို မရှိရှိတဲ့ကြားက ဆယ် တန်းအောင်တဲ့ အထိ ကြိုးစားရုန်းကန်ပြီး ထားပေးခဲ့ကြရတာပါ။
ဆေးကျောင်းဆက်မထားနိုင်လို့ အားငယ်နေကြတဲ့အချိန်နဲ့ ပြေတီဦးပညာဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ ထောက်ပံ့ မှုကြောင့် သူတို့သားသမီးလေးတွေ ဆေးကျောင်းဆက်တက်ခွင့် ရပြီလို့ သိတဲ့အချိန်မှာ သူတို့တွေရဲ့ရင်ထဲ အရမ်း ပျော်သွားမှာ သေချာပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ပွဲရဲ့ အစီအစဉ်တွေကို ဂျာနယ်တွေထဲမှာ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ ဝေေ၀ဆာဆာ ဖော်ပြလိုက်လို့ သူတ်ို့နေတဲ့ မြို့နယ်တွေအထိ ရောက်သွားပြီး သူတို့ များ ကြည့် လိုက်ရမယ် ဆိုရင် လူငယ်တွေရဲ့ မိဘတွေ ပျော်နိုင်ပါ့မလား။
သူတို့ သားသမီးပုံပါတဲ့ ဂျာနယ်ကြီးကို လက်ကကိုင်ပြီး
ပြုံးပျော်ကြည်နူးပြီး ဆွေမျိုးတွေ၊ မိတ်ဆွေတွေကို လိုက်ပြနိုင်ပါ့မလား။
ကျွန်တော်ရေးပြတာတွေကို စာဖတ်သူ သေသေချာချာ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ စာဖတ်သူကိုယ်တိုင်
အဲဒီကလေးတွေရဲ့ မိဘနေရာမှာ ၀င်ခံစားကြည့်လိုက်ပါ။
လှူတာတန်းတာ ပေးတာကမ်းတာ ထောက်ပံ့တာဟာ အင်မတန်မှ ကောင်းပါတယ်လို့ ကျွန်တော် ရေးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်သူ့ငယ်ချင်း ပြေတီဦးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကလည်း အင်မတန်မှ ကို မွန်မြတ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူနဲ့ သူ့ကော်မတီရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကလော့ သူတို့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ ကလေး တွေရဲ့ အနာဂတ် နဲ့ အညွန့်တွေကို ဆုပ်နယ်ချေမွ ဖျက်ဆီးပစ်နေသလိုပါပဲ။
လူငယ်ဆိုတာ အညွန့်တစ်လူလူနဲ့ အရွယ်ပါ။
ပိုပြီးဆိုးတာက ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက် ကိုယ့်ရဲ့သိမ်ငယ်တဲ့ အချက် ကိုယ့်ရဲ့ညံ့တဲ့အချက် ကို တခြားသူ သိမှာ အင်မတန်မှ စိုးရိမ်ပါတယ်။
အဲဒီနေ့က ထောက်ပံ့ကြေးလက်ခံရယူသွားတဲ့ ကလေးတွေဟာ သူတို့ပုံပါတဲ့ ဂျာနယ် ကြီးကို လက်ကကိုင်ပြီး သူတို့တက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေတဲ့ ကျောင်းမှာ သူတို့သူငယ်ချင်း တွေရဲ့ကြားမှာ
ဒါ ငါ့ပုံလေလို့ ၀မ်းသားပျော်မြူးပြီး လိုက်ပြနေလိမ့်မယ်လို့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်ထင်ပါသ လား။ ကျွန်တော်ကတော့ လိုက်ပြမယ် မဟုတ်ဘူးဆိုတာ တစ်ထစ်ချယုံကြည်ပါတယ်။
ကူညီထောက်ပံ့တဲ့နေရာမှာ စေတနာရှင်းရှင်းနဲ့ ထောက်ပံ့ကူညီပေးအပ်လိုက်ပါ။ လူသိဖို့ မသိဖို့က အဓိက မကျပါဘူး။
ကိုယ့်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုကို ကိုယ်ကလူတွေကို သိစေချင်ပေမယ့် အထောက်အပံ့ခံရတဲ့ ကလေးတွေက လူတွေ ကို သိစေချင်သလား။ မသိစေချင်ဘူးလား။ ဆိုတာ မသေချာသလို သူတို့ ရဲ့မျက်နှာလေးတွေကို လူတွေ မြင်စေချင်သလား။ မမြင်စေချင်ဘူးလားဆိုတာလည်း ထောက်ပံ့သူ တွေ မသိနိုင်ပါဘူး။
ကိုယ့်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုကို လူတွေသိစေဖို့အတွက် စီစဉ်ဖန်တီးလိုက်တဲ့အခမ်းအနား တစ်ခု ဟာ လင်းလက် တောက်ပ တဲ့ အနာဂတ်တွေ ကိုယ်စီရှိနေတဲ့ လူငယ်တွေကို သိမ်ငယ်စိတ်ဝင် အောင် လုပ်ပစ် လိုက်တာမျိုး ညစ်နွမ်းသွားစေတာမျိုး မဖြစ်ရင် ပိုကောင်းတာပေါ့။
ဆရာဦးမြတ်ခိုင်တို့ ဆရာဦးဝင်းငြိမ်းတို့ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ တကယ့်ကို နာမည် ကျော် စာနယ်ဇင်း ဆရာတွေပါ။
စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ် က်ို သူတို့ကောင်းကောင်း သိကြတာပေါ့။ စာနယ်ဇင်းတစ်ခုခုရဲ့ စာမျက်နှာပေါ်မှာ သတင်းဓါတ်ပုံ တစ်ခုခု ကို ဖော်ပြတော့မယ်ဆိုရင် အဲဒီသတင်းဓါတ်ပုံဟာ ကာ ယကံရှင်ကို ကောင်းကျိုးဖြစ်စေသလား၊ ဆိုးကျိုးဖြစ်စေသလားဆိုတာ အရင်ဆုံး စဉ်းစာရမှာပါ။
သူတို့ထည့်လိုက်တဲ့ ဓါတ်ပုံထဲမှာ ကာယကံရှင်ပေါင်း ၃၂ ယောက်ပါပါတယ်။ အဲဒီ ၃၂ ယောက် ထဲမှာမှသူတို့ ထည့်လိုက်တဲ့ ဓါတ်ပုံကြောင့် အကျိုးရှိစေတာ ၂ ယောက်တည်းပါ။
ဘယ်သူတွေလဲ ဆိုတော့ ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်ပါ
သူတို့ရဲ့ အလှူဒါနကို သူတို့ကို ချစ်ခင်အားပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီး မြင်ခွင့်ရတဲ့အတွက် သူတို့ နှစ်ယောက် အတွက် အကျိုးရှိတာပေါ့။
ဒါပေမယ့် ဒီဘက်က အယောက်သုံးဆယ်နေရာမှာ ၀င်ပြီး စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်ပါ။ အဲ ဒီသတင်း ဓါတ်ပုံပါသွားတဲ့အတွက် အဲဒီလူငယ အယောက်သုံးဆယ်ရယ်၊ အဲဒီ အယောက်သုံးဆယ့် ရဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမ မိဘဆွေမျိုး အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေရယ်ဟာ ဂုဏ်တက်သွားမလား၊ စိတ်ချမ်း သာသွားမလား ဆိုတာ လူသားချင်း ကိုယ်ချင်းစာနာတတ်တဲ့ စိတ်ရှိမယ်ဆိုရင် အလွယ်တကူနဲ့ စဉ်းစာကြည့်ပြီး အဖြေကို သိနိုင် ပါတယ်။
ဒါရိုက်တာမောင်မျိုးမင်းဆိုရင်လည်း လူတွေရဲ့စိတ်ကို ပေါ်လွင်အောင် ရိုက်တဲ့နေရာမှာ အင်မတန်မှကို တော်တဲ့ တတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပါ။ သူ့မှာလည်း သားသမီးသုံးဦးရှိပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့အတွက် ကလေးတွေရဲ့စိတ်၊ လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ကို ပိုသိတာပေါ့။
ကိုဝင်းကြည်ကိုတော့ထားလိုက်ပါ။ သူကတော့ စီးပွားရေးလောက်ပဲသိတာလေ။
လှူဒါန်းထောက်ပံ့ပေးအပ်တဲ့ ဒီလိုပွဲမျိုးကို ဒီလိုပုံသဏ္ဍာန်မျိုးနဲ့ ပေးအပ်ထောက်ပံ့လိုက်ရင် အထောက်အပံ့ ခံ လူငယ်တွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဘာတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာ ပြေတီဦးရယ်၊ စာနယ်ဇင်း ဆရာနှစ်ယောက် ရယ် ဒါရိုက်တာတို့ရယ်ဟာ ကိုယ်ချင်းစာတတ်တဲ့စိတ်နဲ့ ဘက်ပြောင်း စဉ်းစားကြည့်မယ် ဆိုရင် အလွယ်တကူ သိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီစာကို မရေးရရင် မနေနိုင်လွန်းလို့ကို ရေးတာပါ။
မိုက်မဲလွန်းလို့ရေးတာလို့ ပြောရင်လည်း ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ရေးသင့်တယ်ထင်လို့ ကျွန်တော် ရေးတာပါ။
လာကြဦးမှာပါ။ လူငယ်တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်းတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု၊ တစ်ခုပြီး တစ်ခု၊ မိ်ုးဦးကျမှာ ပေါက်လာတဲ့ မှိုပွင့်တွေလိုပေါ့။
အဲဒီဖောင်ဒေးရှင်း တွေအကုန်လုံးဟာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ လူငယ်တွေကို ပညာသင်ကြား ဖို့အတွက် ထောက်ပံ့ ငွေတွေ ပေးမယ်။
ထောက်ပံ့ငွေပေးတဲ့ အခမ်းအနားကိုလည်း ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ခမ်းခမ်းနားနား လုပ်မယ်။
ပြီးတော့ ဓါတ်ပုံတွေရိုက်မယ်၊ ရိုက်ထားတဲ့ သတင်းဓါတ်ပုံတွေကို စာနယ်ဇင်းဆရာများက ဂျာနယ် စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ ဝေေ၀ဆာဆာနဲ့ ဖော်ပြကြဦးမယ်ဆိုရင် ထောက်ပံ့ကြေးကို လက်လံ ရယူရမယ့် ကလေး တွေရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို စာဖတ်သူမှန်း ကြည့်လို့ရပါတယ်။
တစ်စုံတစ်ယောက်ကပြောလို့ ဒီစာစုကို ပြေတီဦးသော်လည်းကောင်း၊ ဦးမြတ်ခိုင် သော် လည်းကောင်း၊ ဦးဝင်းငြိမ်း သော်လည်းကောင်း၊ ဦးမျိုးမင်းသော်လည်းကောင်း ဖတ်မိခဲ့ရင် ကျွန်တော် အပေါ်မှာ ပြောစရာတွေ ရေးစရာတွေ ချေပစရာတွေ ရှိလာကြမှာပါ။
ဖုန်မထပါဘူး၊ မလိုအပ်ပါဘူး၊ ပွဲဆူအောင် သက်သက်လုပ်တာလို့ ယူဆပြီး ဘာမှမပြော ကြ၊ မရေးကြ ရင်တော့ သူတို့ရော ကျွန်တော်ရော အလုပ်မပိုတော့ဘူးပေါ့။
ဘယ်သူ့ကိုမှ အမုန်းပွားပြီး ဒီစာစုကို ကျွန်တော်ရေး.တာမဟုတ်ပါဘူး။ လူငယ်တွေကို တကယ် ချစ်တယ်ဆိုရင် လူငယ်တွေရဲ့ အနာဂတ်လှပအောင် ထောက်ပံ့ကူညီပေးချင်တယ်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ နှလုံးသား တွေကို မြင်အောင်ကြည့်တတ်ကြဖို့ သူတို့နေရာက နေ၀င်ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ခံစား ချက်ကို ခံစား နားလည် တတ်အောင်လို့ ကျွန်တော်ရေးတာပါ။
ဖောင်ဒေးရှင်းမလုပ်ဘဲ အသင်းအဖွဲ့မထောင်ဘဲ ဂျာနယ်တွေထဲကိုမထည့်ဘဲ လူငယ်တွေ ကိုရော လူကြီး တွေကိုရော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကိုရော ထောက်ပံ့ကူညီ စောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ သူတွေ ကျွန်တော် တို့ရဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ အများကြီးရှိပါတယ်။
ထောက်ပံ့တယ် လှူတယ်ဆိုတာ ကောင်းပါတယ်။
အထူးသဖြင့် တောက်ပတဲ့ အနာဂတ်ကိုယ်စီရှိတဲ့ လူငယ်တွေကို လှူဒါန်းထောက်ပံ့တာ ဟာ အင်မတန် ကောင်းမွန် တဲ့ အစီအစဉ်ပါ။
ဒါပေမယ့် လှူတတ်ဖို့တော့ လိုတာပေါ့။
ဒီစာစုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရေးသားခဲ့သမျှ အစကနေအဆုံးအထိက ကျွန်တော့်ရင်ထဲက ဆန္ဒ အမှန်ပါ။
ဒီစာစု ကိုဖတ်ပြီး စိတ်ထဲမှာ တစ်ခုခုခံစားသွားရလို့ ကျွန်တော့ဘက်ကို တုန့်ပြန်ချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိတဲ့ ဘယ်လို လူမျိုးမဆို ကျွန်တော့်ကို တုန့်ပြန်ဖြေရှင်းလို့ ရပါတယ်။
ဘယ်လို ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးနဲ့ပဲ တုန့်ပြန်တုန့်ပြန်၊ ဖြေရှင်းဖြေရှင်း ကျွန်တော့်ဘက်ကတော့ အားလုံးအတွက် အဆင်သင့် ပါပဲ။
(လျှပ်တစ်ပြက်ဂျာနယ်၊ အတွဲ (၃)၊အမှတ်(၆၅) ၂၀၁၁ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ (၂)ရက်နေ့ထုတ်သော ဂျာနယ် ပေါ်ပြူလာဂျာနယ် အတွဲ (၁၅) အမှတ် (၄၉) မှ သတင်းဓါတ်ပုံ များ ထုတ်နှုတ် တင်ပြ အပ် ပါသည်)
သရပါ မဂ္ဂဇင်း ဇန်နဝါရီ ၂ဝ၁၂
အင်း... စဉ်းတော့ စဉ်းစားစရာပဲ... သူလည်း သူ့ရဲ့ ထောင့်ကနေ ရေးပြီး ချရေးတာပဲ...။
မှန်တယ်။ ဒါမလုပ်သင့်ဘူး။ ဂုဏ်ပကာသနကျော်ဇောမှုကို ရှေ့တန်းတင်လွန်းတယ်။ အလျှုရှင်တွေက မသိနားမလည်ခဲ့ရင်တောင် အဓိက တရားခံက စာနယ်ဇင်း ဂျာနယ်လစ်တွေရဲ့ အပစ်ပါ။ အဲ့ဒီပေးအပ်ပွဲမှာ ခမ်းမကြီးအတွင်းက ကြွရောက်လာတဲ့ လူလောက်ပဲသိရပေမယ့် ခုလိုဓာတ်ပုံနဲ့တကွဖော်ပြလိုက်တော့ တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအထိ ပျံ့နှံသွားပြီ ။နာမည်ကျော်ကြားလိုမှု တခုကြောင့် အခုခါါဆိုရင် ကလေးတွေမှာ အလိုလို သိမ်ငယ်စိတ်နဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာ ဖြစ်ခဲ့ရပြီ။ :(
ခက်တာပဲ၊ ကလေးတွေ ထိုင်ရှိခိုးရတာတော့ လွန်လွန်းပါတယ်။ ဘယ်သူက စီစဉ်ပေးတာပါလိမ့်နော်။ သူတို့လုပ်ပုံက စေတနာရှိလို့ လှူတာထက် ပေါ်ပြူလာဖြစ်အောင် လုပ်နေသလိုပဲ။
သိပ်ကောင်းတဲ့စာပါ။ မိဘမဲ့ကလေးကျောင်းတွေမှာ အလှုရှင်ရှိလို့ ထမင်းစားခါးနီးတိုင်း လက်အုပ်ချီရ။ ဆုတောင်းရတာတွေကိုမြင်ရတိုင်း ရင်ထဲမချိဘူး။
အခုလို ထိုင်ရှစ်ခိုးရတယ်ဆိုတော့... အစတည်းက သိမ်ငယ်နေတဲ့ ကလေးတွေရင်ထဲ ဘယ်လောက်တောင် ခံစားရမှာပါလိမ့်။း(
ကျေးဇူးရှင်ကြီးတွေနေရာကို လိုချင်လွန်းတယ်လို့ တစ်ဖက်သားတွေကိုလည်း မပြောချင်ပါဘူး။
ကျေးဇူးကြွေးနဲ့ တစ်သက်လုံးမျက်နှာငုံ့နေရမယ့် ကလေးတွေနေရာက ခံစားရလွန်းလို့ပါ။
ကျေးဇူးဆိုတာ ခေါင်းငုံ့ခံပြီး အညွန့်ချိုးခံပြီးမှ ဆပ်ရတဲ့အရာ မဟုတ်ဘူး..! ပြေတီဦး ဖောင်ဒေးရှင်း ဖြစ်ပေါ်လာတာ ဝမ်းသာပါတယ် ကျွန်တော်သာ အဲဒီကလေးတစ်ဦးဦးရဲ့ အုပ်ထိန်းသူ ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကလေးရဲ့ ကျဆင်းသွားနိုင်တဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ အဲ့ဒီထောက်ပံ့မှုကို ပြန်အပ်ခဲ့မယ်။ ဖောင်ဒေးရှင်း တည်ထောင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို မမေ့ပါနဲ့ ပြေတီဦး..! ဘက်ပေါင်းစုံက ကလေးတွေအတွက်ပဲ ဖြစ်သင့်တယ်..!
ဒီအခမ်းအနားမှာ ဒီလို ထိုင်ရှိခိုးရမယ်လို့ ဘယ်သူကများ ညွှန်ကြားထားတာပါလိမ့်။ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ မိဘလဲ မဟုတ်။ ဆရာသမားလဲ မဟုတ်။
ရုပ်ရှင်အနုပညာသမားတွေမို့ သက်သာတယ်မှတ်။ ဇာတ်သဘင်သည်တွေဆိုလို့ကတော့ ရွာဘက် လာကရင် ခဲပျံ တုတ်ပျံတွေ မိပြီသာမှတ်။း)
ဖတ်ရင်းနဲ့ ရင်မောသွားတယ် အစ်မရယ်...ဒါမျိုးကတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ နာမည်ကြီးပြီးသား လူတွေက ဘာကြောင့် ပိုနာမည်ကြီးချင်နေရတာလဲ။ သူတို့ လှူတာက လူသိချင်လို့ လှူတာလား။ ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်ချင်လို့ လှူတာလား။ စေတနာပါလို့ လှူတာလား။ ဒီလိုလူတွေ အတွက် ဒီလိုပိုစ့်မျိုးတွေက ရေးသင့်ပါတယ်... ဆယ်ခါပြန်ကို ရေးသင့်ပါတယ်လေ...
ဂုဏ်ပကာသနကို ဦးစားပေးတဲ့ အလှူဒါနမှန်းအသိသာကြီးကို။ တကယ်က လှူဖြစ်သွားဖို့ အဓိကပါ။ ကိုမင်းအုပ်စိုး ရေးထားသလို ကော်မတီဝင်တွေစုပြီး တစ်ယောက်ယောက်အိမ်မှာပေးလိုက်လည်းရတာပဲ။ အရေးကြီးတာက ကလေးတွေလက်ထဲကို အလှူငွေ ရောက်သွားဖို့ပဲ မဟုတ်လား....။ ဒီလို လူသိရှင်ကြားဖော်ပြလိုက်တာ ကလေးတွေမှာဘာပဲပြောပြော အနည်းနဲ့အများ ရှက်စိတ်၊ သိမ်ငယ်စိတ်တွေဖြစ်သွားမှာပဲ။
သြော်....လူတွေ လူတွေ....ခက်ပ.... :(
ပြောမယ်ဆို အများကြီးပဲ၊ ……….
ရိုသေထိုက်သူကို ရိုသေ၊ ပူဇော်ထိုက်သူကို ပူဇော် ဆိုပေမဲ့
လက်အုပ်ချီတဲ့ စနစ်ကိုပြန်စလိုက်တဲ့ သူတွေကို…….+/% )+×ဂ
ပြောသင့်တဲ့စကားကို အများအကျိုးအတွက် အမုန်းခံ ပြောတဲ့ စေတနာကောင်းနဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ စကားအတွက် သာဓုခေါ်ပါတယ်
ထောက်ပံ့ပေးတာ.. လိုအပ်တာကို ကူညီပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပေမယ့် ဒီစာကိုသေချာဖတ်ကြည့်ပြန်တော့ ပေးသူက popular ဖြစ်ချင်လို့ လုပ်နေတာလားလို့ သံသယ၀င်လာပါတယ်..
တစ်ယောက်ယောက်ကို တစ်ခုခုပေးလိုက်တိုင်း ပေးသူက ငါပေးထားတာကွလို့ လုပ်ပြနေစရာမလိုသလို မင်းကိုငါပေးထားတာနော်လို့ ပြောနေစရာ လိုမယ်မထင်ပါ.. အဲလိုဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း စေတနာဟာ ၁၀၀% မပြည့်ဝနိုင်တော့ပါဘူး
အလှူရှင်ဖက်က ဒီလိုနက်နက်နဲနဲ မတွေးမိလို့ဖြစ်သွားရတာလား ၊ သိရက်နဲ့ ဂုဏ်ပကာသနကျော်ကြားလိုမှုကြောင့်ဖြစ်သွားရတာလား ဆိုတာ ကာယကံရှင် အလှူရှင်နှစ်ဦးသာလျှင် သိပါလိမ့်မယ် ။
ဒါပေမဲ့ ခုလို လူငယ်လူရွယ်တွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကိုသေးသိမ်သွားအောင်မပြုသင့်ပါဘူး။
ဒီစာစုကို စေတနာသန့်သန့်နဲ့ ရေးသားလိုက်တဲ့ ကိုမင်းအုပ်စိုးကိုလည်း လေးစားပါတယ် ။
ပြန်လည်ဖေါ်ပြပေးတဲ့ မရွှေစင်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..
မှန်တယ်ဗျာ...ကိုမင်းအုပ်စိုးပြောသွားတာတွေကိုထောက်ခံပါတယ်...ကိုပြေတီဦးတို့ အနေနဲ့လည်း သတိမထားမိတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်...
ဒီလိုချရေးမယ့်အစား အနုပညာလုပ်နေကြသူ ရင်းနှီးသူ အချင်းချင်း ဆုံပြီးပြောပြလို့ရော ရနိုင်တာပဲနော်..။
ဟား တကယ်ထောက်ခံတယ် ကျနော်လဲအဲလိုအတွေးရှိတယ်
ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူကပေးနိုင်ကမ်းနိုင်ရင် ပိုက်ဆံမရှိတဲ့သူက ထိုင်ကန်တော့ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကြီးပဲ
မင်းအုပ်စိုးရေးလိုက်တာ ကောင်းပါတယ် နောက်နာမည်လိုချင်သူတွေသတိထားလို့ရတာပေါ့
ဒီအကြောင်းအရာတွေကို စာတစ်စောင်ပေတစ်ဖွဲ့ မရေးဘဲ သူတို့တစ်ယောက် ချင်းစီကို သွားပြီး စကားတွေပြော ဆွေးနွေးငြင်းခုံနေကြမယ်ဆိုရင် သူတို့ရောကျွန်တော်ပါ အချိန် ကုန် အလုပ်ပျက် ပါတယ်။ (မင်းအုပ်စိုး)
မရှိတဲ့သူတွေကို ပညာဆက်လက်သင်စေနိုင်ဘို့ ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ ပြေတီဦး+အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့အစည်းလေးဖြစ်လာတာ ကျွန်မကတော့ အရမ်းဝမ်းသာ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
ဒီပို့စ်ဖတ်ပြီးတော့လည်း စာရေးသူကိုရော သူတို့အပေါ်မှာပါ ဘယ်လိုမှ စိတ်မကွက်မိပါဘူး။
ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုရင် စာရေးသူကလည်း ဒီကိစ္စကို အဆိုးမြင်မိတဲ့အတွက် ကောင်းစေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ရေးတာ ဖြစ်သလို၊ပြေတီဦး+အိန္ဒြာကျော်ဇင် တို့မှလည်း သူတို့ ပေးကမ်းထောက်ပံ့ဘို့ အခွင့်အရေးရလာချိန်မှာ ကိုယ့်အတ္တကိုသာ ကြည့်သူတွေအတွက် ဥပေက္ခာပြုချင်ရင် ပြုထားလို့ရပေမယ့် နိုင်ငံကျော်မင်းသား၊မင်းသမီးများဖြစ်ကြတဲ့သူတို့နှစ်ဦးမှာ မော်ကြွားလိုစိတ်မရှိကြပါပဲ၊ သူတစ်ပါးကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခွင့်ကြုံချိန်မှာ ထောက်ပံ့ပေးရတဲ့ ပီတိတွေနဲ့စိတ်ထဲမှာ ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ စင်မြင့်ပေါ်ကို တက်လာခဲ့တဲ့ ခံစားချက်ကို ကျွန်မကတော့ ကိုယ်ချင်းစာခံစားမိပါတယ်။
ကိုယ်တောင်သူတို့လို မလှူနိုင်လို့ပါ ၊လှူနိုင်ရင် အရမ်းလှူဒါန်းချင်တာမို့ သူများတွေလှူဒါန်းတာကို ပီတိဖြစ်စွာနဲ့ ဘယ်လိုမှ အပြစ်မမြင်မိပါဘူး။
ကိုမင်းအုပ်စိုးရေးသလို ကလေးတွေက ပြေတီဦးတို့ကို ထိုင်ကန်တော့တာ သူတို့လေးတွေရဲ့ဆန္ဒလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါ။
ပြေတီဦးတို့ကတော့ "ငါတို့ကထောက်ပံ့တာမို့ ငါတို့ကို ကန်တော့ကြဟေ့" လို့ပြောမယ်မထင်ပါဘူး။
တချို့ကလေးတွေဆိုရင် ဒီလိုထောက်ပံ့ကြေးရနိုင်ဘို့ အခွင့်အရေးသာ သူတို့မှာ မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် ဆေးကျောင်းတက်ဖို့ ဝေးသွားပြီး တခြားကြုံရာအလုပ်ခွင်ကို ၀င်လုပ်ကြရရင် သူတို့မှာ ဆေးကျောင်းတက်ချင်ပေမယ့် ကိုယ့်မိဘက မထောက်ပံ့နိုင်လို့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုမျိုသိပ်ခံစားရင်းနဲ့ ဘ၀ကို စိတ်အားငယ်စွာနဲ့ ဖြတ်သန်းသွားကြရပါလိမ့်မယ်။
ယခု ပြေတီဦးဖောင်ဒေးရှင်းက ဆေးကျောင်းတက်ခွင့်ရအောင် မိမိတို့ဆန္ဒတွေကို ဖြည့်ပေးတဲ့အခါ လက်ခံရရှိသူတွေအနေနဲ့ ၀မ်းသာပီတိဖြစ်စွာနဲ့ ကျေးဇူးတင်စွာ ထိုင်ကန်တော့ချင်တဲ့စိတ်တွေ ပေါ်လာနိုင်တာမို့ ကျောင်းသား အယောက် ၃၀ မှာ ၃၀ စလုံးမဟုတ်တောင်မှ ၁၀ယောက်ကျော်လောက်က ထိုင်ကန်တော့ဘို့ ဆန္ဒရှိနေကြရင် အားလုံးတိုင်ပင်ကာ ထိုင်ကန်တော့ ဖြစ်ကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
ကျွန်မအနေနဲ့ သူတို့နေရာမှာ ၀င်ရောက်ခံစားကြည့်တဲ့အခါ မိဘက မထောက်ပံ့နိုင်လို့ ဆေးကျောင်းမတက်နိုင်မှာကို စိုးရိမ်အားငယ်နေရချိန်မှာ အထောက်အပံ့ပေးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာတဲ့အခါ ထိုင်ရှစ်ခိုးချင်လောက်အောင် ကျေးဇူးတင်ဝမ်းသာမိမှာ အမှန်ပါပဲ။
ူကို ကျေးဇူးတင်စွာ ကန်တော့ ကြတာ အပြစ်မဟုတ်ဖူးထင်ပါတယ်ရှင်။
ကျွန်မရဲ့မိတ်ဆွေ ဆရာဝန်တစ်ယောက်က သူ့တပည့်တွေနဲ့ မိတ်ဆွေတွေအားလုံးလိုလိုကို အမြဲပြောပြတတ်တဲ့စကားလေးက "ငါက ဘုန်းကြီးကျောင်းသားကွ ၊ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာနေပြီး ဆေးကျောင်းကိုတက်လာခဲ့တာ၊ငါ့ဘ၀ကို ငါဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူး၊အဲဒါကြောင့် ကိုယ်ချင်းစာစွာနဲ့ ငါအခုကူညီလို့ရချိန်မှာ အားလုံးကို တတ်နိုင်သလောက် ကူညီမယ်"လို့ပြောကာ တကယ်လည်း ပိုက်ဆံမရှိတဲ့သူတွေကို ကိုယ်ချင်းစာစွာနဲ့ ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေ ပြုနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုပဲ ကိုယ့်မိဘက မထောက်ပံ့နိုင်လို့ ဆေးကျောင်းမတက်ရတာထက်စာရင် ဒီလိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်ဖောင်ဒေးရှင်းလေးတွေပေါ်လာလို့ ကိုယ့်ဆန္ဒတွေပြည့်ဝနိုင်တာမို့ ကိုယ်ဆရာကြီးဖြစ်ချိန်မှာ"ငါက ပြေတီဦးဖောင်ဒေးရှင်း အထောက်အပံ့နဲ့ ဆေးကျောင်းတက်လာခဲ့တာကွ"လို့ တခြားသူတွေကို ပြောပြဘို့ ရှက်စရာမဟုတ်ဖူးလို့ ကျွန်မကတော့ ထင်မြင်မိပါတယ်ရှင်။
ဒီပို့စ်ကို ပြေတီဦးတို့ကသာဖတ်ရရင် ကိုယ်ကောင်းတာလုပ်ခဲ့ပေမယ့် အပြစ်ပြောခံရတာမို့ စိတ်မထားတတ်ရင် အလှူရှင်အနေနဲ့ ငြိုငြင်မိသွားနိုင်ပါတယ်။သူတို့ မလုပ်လည်းရ၊လုပ်ရင်လည်းရတဲ့ အစီအစဉ်မို့ သူတို့ စိတ်ငြိုငြင်ပြီး ဒီအစီအစဉ်သာ ပျက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင် နှစ်စဉ် ကျောင်းသား အယောက် ၃၀ ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဘို့ ဝေးသွားမှာ သေခြာပါတယ်။
ကိုယ်မလှူနိုင်ပေမယ့် ဒီလိုဖောင်ဒေးရှင်းတွေ ပေါ်လာတာ လှိုက်လှဲစွာဖြင့် ကြိုဆိုစရာ အလွန်ကောင်းပါတယ်။သတင်းတွေကို ဂျာနယ်သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြပေးတော့ မသိတဲ့သူတွေ ဖတ်ရ၊သိရပြီး ဖောင်ဒေးရှင်းကို အလွယ်တကူ အဆက်အသွယ် လုပ်နိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။
တချို့ဆို ဆေးကျောင်းတက်ချင်ပေမယ့် ဒီလို အခွင့်အရေးမျိုးရှိတာ မသိလိုက်ဖူးဆိုတာ ရှိနိုင်တာမို့ TV၊ ဂျာနယ်တွေမှာ သတင်းဝေဆာစွာဖော်ပြပေးတာကို ကျွန်မအနေနဲ့တော့ လုပ်သင့်၊လုပ်ထိုက်တယ်ဟု ယူဆမိပါကြောင်း နဲ့ ကျောင်းသားတွေအပေါ်မှာထားတဲ့ စာရေးသူဆရာ မင်းအုပ်စိုး၏ စေတနာကိုလည်း အပြစ်မမြင်ပါပဲ ကျွန်မ၏အမြင်ကလေးကို ရေးသားဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
ဆောင်းပါးရှင် ပြောချင်တာကို နားလည်မိတယ်။
ကိုမင်းအုပ်စိုးကဒါရိုက်တာ-ထုတ်လုပ်သူ-သရုပ်ဆောင်မင်းသားဆိုရင်တော့-ပြောချင်တာလေးတွေရှိနေပါတယ်-ကိုမင်းအုပ်စိုးကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ရိုက်ကူးတဲ့ကားတွေမှာအသက်ကြီးဝါရင့်အနုပညာရှင်ကြီးတွေကိုမနက်အစောကြီးကတည်းကရှုတင်ကိုအရောက်လာဖို့ခေါ်ပြီးဆင်းတစ်ခုကိုညစောင်းမှရိုက်ခိုင်းတာမျိုးတွေ ကိုယ်နဲ့လက်သင့်ရာကိုဦးစားပေးပြီးအရင်ဆုံးရိုက်ကူးပေးတာတွေ ပြောရရင်တော့အများကြီးပါ
ကျွန်မအထင်တော့ ဆရာဝန်လောင်း၊ ဆရာမလောင်းတွေ ဖြစ်ပါစေ
ကျေှးဇူးရှင်ကို ကန်တော့တာဟာ ဂုဏ်မငယ်ပါဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ လူတွေကြားထဲ ဇာနယ်ဇင်းတွေထဲ ပါတာ၊ မပါတာကိုတော့ မဆိုလိုပါဘူး။ သာမန်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ကျေးဇူးရှင်တွေကို ကန်တော့တာဟာ လျော်ကန်သင့်မြတ်တဲ့ ဂါရဝတရားလို့ ယူဆပါတယ်။ မရှိနွမ်းပါးတာဟာ ရှက်စရာမှ မဟုတ်တာ။ မရှိတဲ့ကြားထဲက ထူးချွန်လာတဲ့ သူတို့တွေကို ကျန်တဲ့သူတွေကတောင် အားကျ အတုယူကြရဦးမှာ။
ပြေတီဦးတို့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ ခုလို လှူတယ်ဆိုရင် သူများတွေ မြင်တော့ ပိုပြီး သဒ္ဓါပေါက်ပြီး အလှူငွေတွေ ဝိုင်းထည့်ကြရင် ကလေးတွေကို ပိုပြီး ထောက်ပံ့နိုင်တာပေါ့နော်။
အဓိကကတော့ စေတနာ မှန်ကန်ဖို့ပါဘဲ။ မရှိနွမ်းပါးတဲ့ ကလေးတွေအတွက် ခုလို ဖောင်ဒေးရှင်းမျိုး အများကြီး အများကြီး လိုအပ်ပါတယ်။ စေတနာ ထက်ထက် သန်သန်နဲ့ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ဒီဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်လည်း ပီတိဖြစ်စရာ ဝမ်းမြောက်စရာ ကောင်းပါတယ်။ ဆောင်းပါးရှင်ဘက်က ကြည့်ရင် မှန်သလို အလှူရှင်တွေဘက်မှာလည်း ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းလေးတွေ ရှိမှာပါဘဲ။ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရှုမြင် သုံးသပ်ပုံချင်းတော့ ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘက် ၂ဖက်ကနေ မျှမျှတတ ကြည့်နိုင်ရင်တော့ ပိုအဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်။
ဟုတ်တယ် မရီတာပြောသလိုပဲ ဆောင်းပါးရှင်ပြောတာကိုနားလည်မိတယ်..
ကျွန်မအထင်တော့ ကလေးတွေအနေနဲ့လည်း မိမိထက် အသက်ဝါကြီးတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်။ မိမိကျေးဇူးရှင်တွေလည်း ဖြစ်တဲ့သူတွေကို ထိုင်ကန်တော့တာ (လူရှေ့ဖြစ်စေ၊ လူကွယ်ရာဖြစ်စေပေါ့)... မင်္ဂလာတောင် ရှိပါသေးတယ်။ ဒါဟာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှူတစ်ခုပဲ မဟုတ်လား။
ဒီလို အခမ်းအနား၊ ဒီလိုလူတွေနဲ့ စိမ်းနေတာကြောင့် ကလေးတွေ မပြုံးနိူင်ကြတာလို့ ထင်ပါတယ်။ သိမ်ငယ်စရာလို့ ကျွန်မတော့ မမြင်မိဘူး။
တစ်ခုပဲ ခုလို တခမ်းတနားနဲ့ လုပ်မဲ့အစား ကုန်ကျငွေကို လိုအပ်နေတဲ့ တစ်နေရာရာမှာ လှူလိုက်ရင် ပိုကောင်းပါမယ်။
ရေးသူအနေနဲ့ကလည်း သူခံစားမိတဲ့ ရှုထောင့်ကနေ ရေးတာမို့ ဘာမှ ပြောစရာ မရှိပါဘူး။
မင်းအုပ်စိုးက သူတို.ဘ၀အတွက်ဆက်လက် ပျိုးထောင်ပေးမှာလား
ဒီအကြောင်းအရာတွေကို စာတစ်စောင်ပေတစ်ဖွဲ့ မရေးဘဲ သူတို့တစ်ယောက်ချင်းစီကို သွားပြီး စကားတွေပြော ဆွေးနွေးငြင်းခုံနေကြမယ်ဆိုရင် သူတို့ရော ကျွန်တော်ပါ အချိန်ကုန် အလုပ်ပျက် ပါတယ်။ (မင်းအုပ်စိုး)
ဆက်သွယ်ရေး ဒီလောက်ကောင်းမွန်တဲ့ ဒီခေတ်ကြီးမှာ မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆွေးနွေးမှ အရာရောက်တယ်လို့ မထင်မိပါဘူး။ အခုလို ဂျာနယ်မှာတောင် ထည့်နိုင်သေးရင်၊ ပြေတီဦးနဲ့ သူငယ်ချင်းအရင်းခေါက်ခေါက်ကြီးဆိုရင်၊ သူငယ်ချင်းစိတ်ရင်းနဲ့ လှမ်းပြောလို့၊ အကြံပေးလို့တောင် ရတယ်လို့ပဲ ရိုးရိုးလေး မြင်မိပါတယ်။ စာနယ်ဇင်းတွေ၊ ဒါရိုက်တာတွေကလည်း မင်းအုပ်စိုးနဲ့ ပတ်သက်ခဲ့ဖူးသမျှသူတွေပါပဲ။ ဘယ်လိုမဆို တွေ့ဆုံ ပြောပြရင် လက်ခံစဉ်းစားပေးကြမှာပါ။ ကံကောင်းရင် မင်းအုပ်စိုးကို ကျေးဇူးများတောင် တင်ကြဦးမှာပါ။
အကြောင်းအရာတစ်ခုမှာ မတူညီတဲ့ ရှုထောင့်၊
ကွဲလွဲတဲ့ အမြင်တွေ ရှိတာကို လက်ခံပါတယ်။
ဘာလို့ အခုလို ပွအောင် ဖွလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ရင် မြင်သာပါတယ်။ အောင်မြင်မှုဆိုတာအမှန်တကယ် စေတနာထား ကြိုးစားတဲ့ အပေါ်မှာမှ ရလာတတ်တာမျိုးပါ။ ဒီလိုနည်းနဲ့ နာမည်ကြီးအောင် စေတနာအပေါ်ယံ နှမ်းဖြူးပြီး လုပ်ကြံတာမျိုးကတော့ မင်းအုပ်စိုးရေ..
စစ်မှန်တဲ့ မုဒိတာ ထားတတ်ဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်...၊
အနုပညာလောကမှာ နာမည်ကြီးဖို့ အရည်အသွေးစစ်စစ်နဲ့ ကြိုးစားလိုက်ဦးလို့သာ ပြောလိုက်ချင်ပါတော့တယ်။
စာလေးကို သေသေချာချာဖတ်ပြီး မှ ထပ်ဆွေးနွေးကြပါအုံး။ စာရေးသူရဲ့ ဆိုလိုရင်းကို သဘောပေါက်နားလည်နိုင်ကြပါစေ.....
ိထိုင်ကန်တော့ခိုင်းတာကြီးက မလုပ်သင့်တဲ့ ကိစ္စပါ။ ကျောင်းသားတွေက သူတို့သဘောဆန္ဒနဲ့ ကန်တော့တာ မဖြစ်နိုင်ဘဲ ပိုက်ဆံပေးပြီးတာနဲ့ ကန်တော့ဖို့ အစီအစဉ် လုပ်ထားပြီး ကဲ ကန်တော့ကြရအောင်.ကန်တော့ကြ ဆိုလို့ ကန်တော့ကြတာ ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ရဟန်းသံဃာမဟုတ်၊ ဆရာသမားမဟုတ်ဘဲ ကန်တော့ခံတယ်ဆိုတာက မလုပ်သင့်တဲ့ ကိစ္စပဲ။ ကိုမင်းအုပ်စိုးပြောတာ မှန်တယ်။
စာရေးသူရဲ့ စေတနာကိုနားလည်ပေးချင်ပေမယ့် ဘယ့်နှယ့်သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးကို တိုက်ရိုက်မပြောပဲ ဒီလိုရေးရသလဲလို့ တွေးနေမိတယ်။ သူတို့ လူမသိအောင်လှူလို့ရတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံပေမယ့် ဘလိုင်းကြီး ၀ိုင်းအပြစ်တင်နေကြတဲ့လူတွေကိုလဲအံ့သြပါရဲ့။ သူတို့လုပ်ခိုင်းတာဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာတောင် မတွေးကြပဲ စွတ်တင်နေကြတော့တာပဲ။ နောက်စာမျက်မှာတွေမှာပါတယ်ဆိုတာရော သူတို့ကြိုသိသလားပါပြီးမှသိတာလား ဆိုတာရော မသိချင်ကြတော့ဘူးလား။ ဘယ်အရာဖြစ်ဖြစ်၂ဘက်တော့ကြည့်စေချင်မိတယ်။ သူတို့တကယ်စေတနာမမှန်ပဲ ပေါ်ပျူလာဖြစ်ချင်လို့လုပ်တာဆိုရင်တော့ သူတို့စေတနာသူတို့အကျိုးပေးသွားမှာပါ။ စိတ်ပူပြီး အကုသိုလ်တွေဝင်ယူမနေကြပါနဲ့။ နောက် ဘာတဲ့ ရတနာသုံးပါး မိဘ ဆရာမဟုတ်ဘဲ မကန်တော့ရဘူးတဲ့လား။ တော်တော် အောက်တဲ့အတွေးအခေါ်ပါပဲ။ ကိုယ့်အပေါ်ကျေးဇူးရှိတဲ့လူဘယ်သူ့ကိုမဆို လေးစားမှုနဲ့ ဂါရ၀ပြုတတ်တာ ဗုဒဘာသာ မြန်မာတွေရဲ့ ဓလေ့ဆိုတာများမေ့နေလေရော့သလား။
မှန်ကန်သော စေတနာ၊ မြင့်မြတ်သောစိတ်ဓာတ်များကို သေးသိမ်ယုတ်ညံ့သော စိတ်ဓာတ်များက မည်သည့်အခါတွင်မှ ကျော်လွှားနိုင်မည် မဟုတ်ပါ
ကျေးဇူးရှင်ကို ကန်တော့တာ သိမ်ငယ်စရာ မဟုတ်တာ မှန်ပါတယ်။
သို့သော် လုပ်ပုံလုပ်နည်း လွဲမှားနေတယ်လို့ ခံစားရတယ်။
သူတို့ကိုယ်တိုင် စိတ်ပါလက်ပါ ကန်တော့တာလား၊ အခမ်းအနား အစီအစဉ် တရပ်အနေနဲ့ လိုအပ်ချက်အရ ကန်တော့တာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဒါဟာ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တယ်လို့ အများက သတ်မှတ်တဲ့အတွက် ကန်တော့ကြတာလား။
ကန်တော့တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အလွန်နှိမ့်ချရတဲ့ အပြုအမူ တရပ်ပါ။ ကျမတို့ ဘုရားတရား သံဃာ ရတနာ သုံးပါးနဲ့ မိဘ ဆရာသမားတွေကို နေ့စဉ် ကန်တော့ကြတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကိုယ့်ထက် မြင့်မြတ်သူတွေမို့ ရိုသေ မြတ်နိုး လက်စုံမိုးပြီး မာန်ကိုလျှော့ကာ ကန်တော့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အခု နွမ်းပါးတဲ့ကလေးတွေရဲ့ ကျေးဇူးရှင် မင်းသားမင်းသမီးစုံတွဲကို ထိုင်ကန်တော့ရတယ်ဆိုတာ ဖတ်ရတော့ သတင်းစာတွေ ရုပ်သံသတင်းတွေမှာ မြင်ခဲ့ရဖူးတဲ့ လက်အုပ်တချီချီ သတင်းတွေကို သွားအမှတ်ရမိတယ်။ လက်အုပ်ချီချင်လို့ ချီကြရတာလား အကြောက်တရား တခုခုကြောင့် လက်အုပ်ချီကြရတာလား။ အားလုံးလဲသိမှာပါ။
မိမိကိုယ်ကိုယ် နှိမ့်ချခြင်းဟာ ကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အဲဒီရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ သိမ်ငယ်စိတ် ဖြစ်မလာဘူးလို့ မပြောနိုင်ပါဘူး။ နောက်တခုက အကယ်၍ ဒီလိုနွမ်းပါးတဲ့ ကလေးတွေထဲမှာ ဘာသာခြားတွေ ပါလာမယ်ဆိုရင် … သူတို့ကိုရော ထိုင်ကန်တော့ ခိုင်းမှာလား။ ထိုင်ကန်တော့ရမှာလား။ ဒါမှမဟုတ် ဘာသာခြားဆိုရင် မလှူဘူးလား။ နွမ်းပါးပြီး ပညာတော်တဲ့ ဘာသာခြား ကလေးငယ်တွေအနေနဲ့ ဒီပုံတွေမြင်ရင် ဘယ်လိုတွေးမိမလဲ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူမျိုး ဘာသာ များစွာရှိပါတယ်။ ခပ်ကျဉ်းကျဉ်းပဲ ကြည့်ပြီး တွေးလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ အားလုံးအတွက် မျှတစွာ ကြည့်ပြီး စဉ်းစားပေးသင့်တယ်လို့ ကျမကတော့ ထင်ပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်နဲ့ ဥပမာပေးရရင် ကျမကို ပညာရေးအတွက် ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ ဦးလေးကို မနက်ဘုရားရှိခိုးတိုင်း (မိဘနှစ်ပါးကို ကန်တော့ပြီးတဲ့အခါ) ကန်တော့ပါတယ်။ ခရီးထွက်ခါနီးတိုင်းလဲ ကန်တော့ပါတယ်။ အဲဒါ ကိုယ့်အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ ကိုယ် ကန်တော့တာဖြစ်သလို ဘယ်သူကမှလဲ ကန်တော့ဖို့ မတိုက်တွန်းပါဘူး။ ဦးလေးကလဲ ငါသူ့ကိုထောက်ပံ့နေရတာလေ ဆိုပြီး မဏ္ဍာပ်တိုင် မတက်ပါဘူး။ ဒါတောင် ကျမစိတ်ထဲ ဦးလေးအထောက်အပံ့နဲ့ နေနေရတာပါလားလို့ တခါတလေ သိမ်ငယ်စိတ်ဝင်မိသေးတယ်။ လူ့ရဲ့ စိတ်သဘာဝကို အားလုံး နားလည်ကြစေချင်ပါတယ်။
ဒီကိစ္စကို ဘက်နှစ်ဘက် ကနေ ဘယ်ဘက်ကမှန်တယ်မှားတယ်ဆိုပြီးဘက်တဘက်ဘက်ကနေရပ်တည်ပြီးပြောဆိုနေကြတာထက်
- နောင်အလှုအခန်းအနားတွေ မှာ အလှုခံတွေရဲ့အကျိုးကို လိုလားရင်းစွဲစေတနာကို အားပြု သတိထားပြီး - ပြုပြင်သင့်တဲ့ ကိစ္စတွေကိုပြုပြင်ပြီး တော့ဆက်လက် ပြီး ဖောင်ေးဒရှင်းကို ကောင်းသထက်ကောင်အောင်ဆောင်ရွက်ကျစေချင်ပါတယ် ဒါဆိုရင်ပြေတီဦး ဖောင်ဒေးရှင်း- ဝေဘန်အကြံပြုသူများ- အလှုခံကျောင်းသား/သူ များ အားလုံးအကျိုးရှိကြမှာပါ
ကျနော်ကတော့ လူအထင်ကြီးအောင် တခမ်းတနားတွေနဲ့ လုပ်တာလောက် စိတ်ပျက်တာ မရှိဘူး။ ကျနော် လှူတာဆိုလည်း လူမသိရဘူး။ လူသိအောင် လှူတာမှ မဟုတ်တာပဲ။ မြန်မာမှာက လူသိချင် ထင်ပေါ်ချင်တဲ့ စိတ်က ပိုများနေတာပါပဲဗျာ။ စိတ်ပျက်မိပါတယ်။
like this post ....
နန်းဝါဝါမောင်နဲ့ ချော အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်တို့ရဲ့ ကော်မန့်တွေကို နှစ်သက်ပါတယ် သူတို့ပြောတာကို ရာနှုန်းပြည့် ထောက်ခံပါတယ်
အခုကိစ္စမှာ ပြေတီဦးတို့ ဇနီးမောင်နှံမို့သာ စာရေးသူက ဒီလို စာမျိုး ရေးဖြစ်တာပါ တကယ်လို့သာ ဒီနေရာမှာ မင်းသား မင်းသမီးတွေမဟုတ်တဲ့ သာမန် လူငယ် ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ဆို ဘယ်လိုပြောကြမလဲ...
စာရေးသူဟာ ဒီစာကိုမရေးခင် ကလေးတွေရင်ထဲ သိမ်ငယ်စိတ်ဝင် မဝင် သွားမေးကြည့်မိလား ဒီရုပ်ရှင်မင်းသား မင်းသမီး ဇနီးမောင်နှံကို ထိုင်ကန်တော့လိုက်ရလို့ မင်းတို့ အားများ ငယ်သွားသလား သိမ်ငယ်စရာများ ဖြစ်သွားသလား မေးကြည့်မိခဲ့ပါသလား... မမေးမစမ်းနဲ့ ကိုယ်ထင်ရာ ရေးတာတော့ မကောင်းပါဘူး...
အခုလိုရေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ကလေးတွေမှာ မရှိသေးတဲ့ သိမ်ငယ်စိတ်တို့ အားငယ်စိတ်တို့ကို သွင်းပေးရာတောင် ရောက်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်... ဒီစာကို ဖတ်လိုက်မိကာမှ အော်... ငါတို့အဖြစ်ဟာ သိမ်ငယ်စရာကောင်းနေပါပေါ့လားလို့ သူတို့ အတွေးဝင်သွားနိုင်ပါတယ်...
ကျွန်မတော့ ကလေးတွေ နေရာက ခံစားကြည့်တာ သိမ်ငယ်နေမယ်လို့ မထင်မိပါဘူး။ အခက်အခဲဖြစ်နေချိန် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးရတာ ထီပေါက်သလို ပျော်နေလိမ့်မယ်၊ ပြီးတော့ နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ ထောက်ပံ့ကြေးဆိုတော့ ပိုတောင် ပျော်နေလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ သူတို့နဲ့အတူ ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံရရင်လည်း ပျော်နေမှာပဲလို့ ထင်ပါတယ်။
ကိုယ့်အခက်အခဲဖြစ်နေချိန် ကိုယ်ထိလက်ရောက် လာကူညီသူရှိရင် ဘယ်သူမဆို ရင်ထဲကနေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ကြတာပါ (လို့ ထင်ပါတယ်)။ အဲဒီတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင်က ၀မ်းသာလွန်းလို့ ထိုင်ကန်တော့တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တမင်တကာ စီစဉ်ပြီး ကန်တော့ခိုင်းတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ကန်တော့လိုက်ရတာ သိမ်ငယ်စရာလို့ မထင်မိပါဘူး။ ကိုယ်အခက်အခဲဖြစ်ချိန် လူတိုင်းက ကူညီနိုင်တာမှ မဟုတ်တာ။ ကူညီဖို့ စေတနာ ရှိဦးမှ၊ စေတနာ ရှိလည်း အခြေအနေပေးဦးမှ၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြင်ရတာ ကြည်နှုးစရာပါ။
သူတို့မျက်နှာလေးတွေ တည်တည်လေးတွေ ဖြစ်နေတာကတော့ ဗွီဒီယိုကင်မရာတွေနဲ့ချိန်ထားတော့ မျက်နှာမထားတတ်တာ နေမှာပါ။
နောက်ပြီး အဲ့ဓါတ်ပုံတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ရင် အားလုံးက အမှတ်တရအဖြစ် အိမ်တွေမှာ သေချာအကြီးချဲထားလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဂျာနယ်ထဲပါလည်း သိမ်ငယ်မယ်မထငိပါဘူး။ ဒါ ရှက်စရာမှ မဟုတ်တာ။
နန်းဝါ၀ါမောင်ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးက သူလှူတိုင်း ဘလောက်ပေါ်တင်ပြီး ကြွားနေကျဆိုတော့ ကြွားကြွားဝါ၀ါ လှူတာကို အားပေးတာပေါ့ :))
တခြားသူတွေလဲ လှူတာပါပဲ။ ပခုက္ကူဦးအုန်းဖေတို့ ဘာတို့၊ ပြေတီဦး ဘိုးအေလောက်ရှိတဲ့ အရွယ်တွေ၊ သူတို့ကို ထိုင်ကန်တော့ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ခံတာမျိုး ဘယ်သတင်းစာထဲမှ မပါပေါင်။ ကွာတာကို ပြောပါတယ်။ မင်းအုပ်စိုးရဲ့ ခေါင်းစဉ်ကိုလဲ သေချာပြန်ဖတ်ကြအုံး။ လှူဒါန်းတတ်ကြပါစေ လို့ရေးထားတယ်မဟုတ်လား။ ဘယ်သူ့အတွက်လှူတာလဲ၊ ကိုယ့်အတွက်လား၊ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လား။ စဉ်းစားကြည့်ကြပေါ့။
သူပေးချင်တဲ့ Message ကို ကျနော် ရလိုက်တယ်။ အတော်ကို မွန်မြတ်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် ပုံစံလေးကို နည်းနည်း ပြင်လိုက်ရင် ကြည့်ရလည်း သင့်တော်မယ် ကလေးတွေ အတွက်လည်း အဆင်ပြေပြေ နဲ့သက်တောင့် သက်သာ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ လို့ထင်ပါတယ်။
ဘာ ပကာသနမှ မလိုပါဘူး
လူတွေသိစရာလဲမလိုပါဘူး-- ညာလက်ကပေးဝေတာ ဘယ်လက်က မသိစေနဲ့ဆိုတာပဲကြားဖူးပါတယ်
မဟုတ်မတရား မလုပ်ရင် သိမ်ငယ်စရာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုး အားလုံးက တွေးတတ်ရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့။ ကလေးတိုင်းက အဲဒီလိုမျိုး ဘယ်တွေးတတ်မှာလဲ။ အပေါ်မှာ မမေဓာဝီ ရေးသလိုမျိုး ဘာသာခြားတွေဆိုရင် မလှူဘူးလား။ အလှူမှာ အဖြူအမဲ လူမျိုး ဘာသာ ကန့်သတ်ချက်ရှိလား။ ဒေါ်လာ သိန်းပေါင်းများစွာလှူနေတဲ့ ဘေလ်ဂိတ်တို့များ ဘယ်သူမှ ထိုင်ကန်တော့တာ မမြင်ဖူးပေါင်ဗျာ။
ပခုက္ကူ ဦးအုန်းဖေတို့ ထွန်းဖောင်ဒေးရှင်းတို့လဲ ဒီထက်မက လုပ်နေတာပါပဲ။ ဘယ်သူမှ ထိုင်ကန်တော့ရတယ်လို့မရှိပါဘူး။ သတင်းလောက်ပဲ ပါကြတာပါ။
ပြေတီဦးဖောင်ဒေးရှင်းက ဒီထက်မက တိုးချဲ့ပြီး စာပေဆုတွေဘာတွေပေးလာရင် ဆုရတြ့ စာရေးဆရာကြီးတွေက ထိုင်ကန်တော့ရမှာပဲလား။ အင်း ခက်တယ်။
ဂုဏ်ပကာသနကို ဦးစားပေးတဲ့ အလှူဒါနမှန်း
ပြည်တွင်းကမြန်မာတွေ ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေပါသိပါတယ် ဒါကြောင့်လဲဘာဘာညာညာ ပြောစရာသိပ်မရှိပါ
ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ နွမ်းပါးပါတယ်။ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ဟာ ပြေတီဦးပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းက ထောက်ပံ့တဲ့ငွေနဲ့ ကျောင်းတက်နေရတဲ့ သူတွေပါ ဆိုတာကို လူတွေသိသွားအောင် လူတွေမြင်သွားအောင် အလုပ်ခံလိုက်ရ တာနဲ့ အတူတူပါပဲ၊
ဆင်းရဲတာရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ ထိုင်ကန်တော့တာလည်း ဂုဏ်ငယ်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ အမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ရင်ထဲကစေတနာမှန်ဖို့ ရင်ထဲပါဖို့တော့လိုပါတယ်။ မြန်မာဓလေ့အရ သူတို့အပေါ်ကျေးဇူးပြုလို့ ကန်တော့ရတဲ့အတွက် ဘယ်သူမှစိတ်ကွက်မယ်လို့မထင်ပါဘူး။
”ဆင်းရဲနွမ်းပါးပါတယ် လို့ တိုင်းသိပြည်သိ ဂျာနယ်တွေထဲ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့တွဲလို့ထည့်ရင်
မိမိသာအဲလိုနေရာဆို ထည့်ခံရရင်ပျော်မှာတဲ့လား။ အနည်းနဲ့အများစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားရမှာအမှန်ပါ။ ပြေတီဦးတို့ရဲ့လှူဒါန်းတဲ့စိတ်ထားနဲ့လုပ်ရပ်ဟာလည်း ကောင်းမွန်မြင့်မြတ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ အဲလိုလူသိခံလှူရတန်းရတာကိုက ဓလေ့စွဲနေတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေအများကြီးတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဥပမာရပ်ကွက်တွေထဲ၊ဈေးတွေသွားလို့ အလှူခံမဏပ်တွေမှာဆိုရင် နာမည်မေးပြီး နာမည်နဲကဘယ်သူကဘယ်လောက်ဆိုတာတို့လိုမျိုးကို ဓလေ့လိုမြင်နေရတတ်ပါတယ်။
ွှTO: Anonymous said...
မ၀ါဝါခိုင်းမင်း ကို ဗလိုင်းကြီးမဖဲ့ ပါနဲ့ Anonymous သူငယ်ချင်းဏ္ဍJanuary 10, 2012 3:50 AM မ၀ါ က အလှူတွေ ဖြစ်မြောက်အောင် စေတနာနဲ့ သူ့ အချိန်တွေထဲ ကဖဲ့ ပြီး organizeလုပ်ပေးနေ့ ရတာ သူ့အလှူ တွေ ဦးဆောင် စီစဉ်ပေးနိုင်လို့စစ်ခိုင်းချောင် က ကိုရင် မယ်သီလတွေ ဦးဇင်းတွေ ဆွမ်းကွမ်း အလုံ အလောက် နဲ့စာသင်နိုင်တာတွေ ပြန်ဖတ်လိုက်ပါအုံး သူငယ်ချင်း ကြွားတယ်လို့ ဆိုချင် ၇င်တော့မင်း မနာလို့ဝန်တို လို့ ပဲ ကိုယ်ကိုကိုယ့် ပြန်ဆန်းစစ်လိုက်လိုက်ပါအုံး ဒီကိစ်စ က ကျွန်တော်ထင်တာတော့ မင်းအုပ်စိုး နာမည်ကြီးချင်လို့ဖွတာပါ သူများလို့သူကကော ဘာမို့ လို့ လဲ ပြေတီဦးတို့တ၀က်တောင်လှူနိုင်ပါဘူး ယောကျားပိုင်းလုံး လင်၇ှိ တဲ့သူ့sponsor ရဲ့ကမာအေးဘုရားလမ်း ပေါ်က စိန်ဆိုင်ကို သူ့ ပိုင်သလို လိုနဲ့ချိုင်ချင်တဲ့ မောင်ပိုင်းလုံး ကများ လူကြားကောင်းအောင်ဟစ်နေသေး တယ် ပြေတီဦးတို့ လှူတာမဟုတ်ရင်လည်း မောင်မင်းကြီးသား လှူပြပါအုံး သူများဆီ က ဘတ် ထား ချိုင်ထားတာတွေနဲ့ ကြောင်သူတော်ကြက်သူခိုး မက်စိတွေ ရှိုင်းသွားရင်ခွေးလွတ်ပါ မကြီးရွှေစင်ခင်ဗျာ
ရှစ်ခိုးနှိမ့်ချကန်တော့ခြင်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး မမေဓါဝီရေးသွားတာ အထူးကောင်းမွန်ပြည့်စုံတာမို့ ကျွန်မအနေနှင့် ထပ်မံပြောစရာမရှိပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ကျေးဇူးခံ ကျေးဇူးစား အဖြစ်မှာ သိမ်ငယ်စရာရှိ၊မရှိ ကိစ္စလေးကိုတော့ ထပ်မံဖြည့်သွင်းပြောပါရစေ။
သူများကျေးဇူးကိုယူပြီး စိတ်ထဲမှာ ရှင်းလင်းဝံ့ကြွားနေတဲ့ ဘယ်သူများရှိပါသလဲ သိပါရစေရှင်။
သူများကျေးဇူးယူပြီး သိမ်ငယ်စရာမလိုဘူးလို့ ပြောတဲ့သူများဟာ ကျေးဇူးကြွေးနဲ့ ကင်းလွတ်ခဲ့သူများ၊ ဘဝအကျိုးပေးကောင်းသူများလို့ ကျွန်မထင်ပါတယ်။
ကျွန်မကတော့ ငယ်စဉ်ကတည်းက ဘဝအကျိုးပေးမကောင်းခဲ့သူမို့ ဆွေမျိုးတွေစောင့်ရှောက်မှုအောက်မှာ ကြီးပြင်းခဲ့ရတာမို့ အဲဒီကျေးဇူးကြောင့် သိမ်ငယ်ခဲ့ရ၊ ဦးကျိုးနိမ့်ခဲ့သူမို့ ကျေးဇူးဆို ကြောက်လှပါတယ်။
ဒါကြောင့် တခြားရွယ်တူဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေ သဘာဝအတိုင်း သူတို့ကိုလည်း ဘယ်သူ့ကိုမှ ရှစ်ခိုးနှိမ့်ချစရာမလိုဘဲ ပညာမာနလေးတလွင့်လွင့်နဲ့ အပြစ်ကင်းပြုံးရွင်စေချင်မိပါတယ်။
ပြီးတော့ ကျွန်မလည်း နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းအလွန်တက်ချင်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံလည်း မတတ်နိုင်လို့ ရုန်းကန်နေဆဲပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မကို နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းစရိတ်ငြိမ်းထားပေးမယ်။ အဲဒီအတွက် ကျေးဇူးရှင်ကို ရှစ်ခိုးနှိမ့်ချကန်တော့ရမယ် ။ အဲဒီကန်တော့နေတဲ့ ပုံတွေ သတင်းအဖြစ်ပါလာမယ်ဆိုရင် ကျွန်မကျောင်းတက်ခွင့် စွန့်လွှတ်လိုက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကိုယ်ချင်းစာမိပြီး မနေနိုင်လွန်းလို့ ထပ်မံဝင်ရေးမိတာပါ။ အလှုရှင်များဆထက်တက်ပိုး လှုဒါန်းနိုင်တာ မုဒိတာပွား ကြည်ညိုလျက်…
ပေါ်ပြူလာ ဖောင်ဒေးရှင်းများ ဖြစ်အောင်လုပ်နေသလား ကိုပြေတီဦးနဲ့ မအူဝဲရေ..
I like "မယ်ကိုး said...".
အထက်က ပြောခဲ့ ကြသလိုပါပဲ..။
လှုရင် ပြတ်ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ ဘာသာ
မှာ အဆိုရှိပါတယ်။ အကျိုးကို မမျှော်ကိုးတာပါ။
သူတို့ လို၊ သူတို့ လောက် မလှုနိုင်တာကြောင့် 
အရမ်းမဲ့ လဲ မဝေဖန်ရဲပါဘူး။
အခု ငွေကို ဦးကပ်စေးကာတွန်းထဲကလို
ထားသလို ချမ်းသာနေပြီး ဘာအကျိုးပြု
လုပ်ငန်းကိုမှ ကူညီထည့် ဝင်ခြင်း မရှိသေး
တဲ့သူတွေထက်စာရင်တော့သူတို့ နှစ်ဦး
က အများကြီးမြင့် မြတ်နေပါတယ်နော်။
ရည်ရွယ်ချက်ကလေး ကောင်းခဲ့ ပေမယ့် 
ဒိထက် ဆက်လက်ပြီး လှုနိုင်တန်းနီုင်ကြပါစေဗျာ...။
မယ်ကိုးမှားနေပြီး။ မယ်ကိုး ဆိုက်ကိုဝင်နေတာ။ ကျေးဇူးဆို ကြောက်လှပါတယ် ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ကိုယ့် ကျေးဇူးရှင်ကို ကိုယ်တိုင် တန်ဖိုးထားသင့် မထားသင့်နဲ့ ထားတတ် မထားတတ်ဖို့ပဲ လိုပါတာ။
စွန့်လွှတ်တိုင်းမှာ တခုခုနဲ့ ညိစွန်းနေဦးမှာပဲ။
ဒါက မမယ်ကိုးကို သိတဲ့သူက မမယ်ကိုး အတွက် ရေးသွားတာပါ။
အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သူ့ထက်ကြီးတဲ့ အမေအိုတွေ အဖေအိုတွေ ထိုင်ကန်တော့ နေတာကြတော့ ဘာမှ မဝေဖန်ဘူးလား။ ဒါကြတော့ ကြည်ညိုလွန်းလွန်လွန်းလို့ တဲ့လား။
ကျေးဇူးဆို ကြောက်လှပါတယ် ဆိုတဲ့ ကျွန်မကို မှားတယ်လို့ ပြောတဲ့ Anonymous ရှင် ...
ကျွန်မက ကျေးဇူးကို ကြောက်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကျေးဇူးရှင်ကို တန်ဖိုးမထားဘူးလို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ဘုရား၊ရဟန္တာကပေးတဲ့ အနန္တကျေးဇူးကလွဲလို့ ဘယ်သူ့ကျေးဇူးကြွေးဖြစ်ဖြစ် သံသရာကမလွတ်မချင်း ဆပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မိဘက ဖြူဖြူစင်စင်နဲ့ ပေးတဲ့ကျေးဇူးတောင် ကျေးဇူးကြွေးဆိုပြီး ပြန်ဆပ်ရပါသေးတယ်။
ကျေးဇူးကြွေးဆိုတာ ဒီဘဝမဆပ်ရလည်း နောက်ဘဝဆပ်ရမှာပါပဲ။ ဒါကတော့ ကျွန်မရဲ့ ဘဝရှုထောင့်အမြင်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မကို ဆိုက်ကိုဝင်တယ်လို့ ပြောတာ၊ ကျွန်မကို သိတယ်လို့ ပြောတာကတော့ ရယ်စရာအလွန်ကောင်းပါတယ်။ Anonymous ဟာ ကျွန်မအစ်မ သို့ ကျွန်မ ကိုယ်တိုင်ဖြစ်မှပဲ ကျွန်မကို ဘယ်သူဆိုတာ သိပါလိမ့်မယ်ရှင် .
ဒီစာတစ်ပုဒ်အတွက်နဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်းတည်ထောင်သူ စေတနာရှင် ပြေတီဦး၊ မအိန္ဒြာတို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး ဖောင်ဒေးရှင်း ရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့ရင် ဘယ်သူ့မှာ အကျိုးရှိမလဲဘဲ မေးချင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ မှတ်ချက်၊ ကိုယ်ရဲ့စာတစ်ကြောင်းဟာ သူတစ်ပါးရဲ့ စေတနာ သဒ္ဓါတရားကို ထိခိုက်သွားစေနိုင်တယ်ဆိုတာ မတွေးမိကြလေရော့သလား လို့သာ တွေးမိပါတယ်။ ကလေးတွေအတွက် အကျိုးရှိနေတဲ့ကိစ္စကို မယောင်ရာ ဆီလူးနေတဲ့သူတွေကိုဘဲ အံ့သြမိပါတယ်
ကိုယ်လဲ မလှူ သူတစ်ပါးအလှူကိုလဲ ကဲ့ရဲ့လိုကြတဲ့ သူတစ်ချို့ကိုတော့ဖြင့် ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေနဲ့ လူတွေလဲလို့ မေးကြည့်ချင်ပါသေးတယ်။ အလှူရှင်နဲ့ အလှူခံယူသူ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူမျှလို့ အဆင်ချောနေတာကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်မိနေပါလားလို့ မိမိကိုယ်ကို အတ္တလေးတွေ ဖယ်ခွာပြီး တစ်ချက်လောက်များ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ကြပါလား ခင်ဗျာ။
ဒီလိုဝေဖန်လို့ သူတို့အလှူ ရပ်ဆိုင်းမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ စေတနာ မမှန်လို့ဘဲ။ တကယ်စေတနာမှန်ရင် ဘယ်လို ဝေဖန်မှုမျိုးဖြစ်ပါစေ ကိုယ့်လမ်းကိုယ် ဆက်လျှောက်ရမယ်။ အခု မင်းအုပ်စိုး အပါအ၀င် ၀ိုင်းပြောနေကြသူတွေဟာ မယောင်ရာဆီလူးတာမဟုတ်ဘူး။ ဖျက်လို ဖျက်ဆီးလုပ်တာလဲ မဟုတ်ဘူး။ ကဲ့ရဲ့တာလဲ မဟုတ်ဘူး။ လမ်းကြောင်းတည့်ပေးနေကြတာပါ။ ဒါ့အပြင် နောက်လာမယ့် ဖောင်ဒေးရှင်းတွေ အလှူရှင်တွေ အကျိုးရှိစွာ လှူတတ်အောင်နဲ့ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဘက်ကလဲ ဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးနဲ့မှာ စိတ်ဒဏ်ရာ မရအောင်၊ မနစ်နာရအောင်၊ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးရှိစေရေး အမုန်းခံပြီး ခုလိုပြောနေကြတာပါ။ တကယ်တမ်း အတ္တကို ဖယ်ခွါသင့်တာက အလှူရှင်တွေပါ။ ငါ့အတွက် လှူတာလား သူ့ အတွက် လှူတာလား ငါ အောင်မြင် ကျော်ကြားဖို့လား၊ သူ ကြီးပွါးချမ်းသာဖို့လား၊ သေချာလဲ စဉ်းစားကြပါအုံး။
ကောင်းစေချင်တဲ့စေတနာနဲ့ ဖွဲ့စည်းပြီးလုပ်နေတဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်းတခုကို မမှားသင့်တဲ့အမှားမျိုးတွေ မမှားအောင်လို့ ထောက်ပြရေးသားတယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်။ အဲ့လိုရေးလိုက်တဲ့အတွက် ဒီဖောင်ဒေးရှင်းကြီးက စိတ်ပျက်ပြီးရပ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာ စဉ်းစားပြီး ကြောက်နေစရာမလိုပါဘူးဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ့လူအဖွဲ့အစည်းကိုက အမြင်မတော်ရင် ဝေဖန်လို့ရပါတယ် ။ ကိုယ်မလုပ်နိုင်လို့မဝေဖန်ရဘူးဆိုတာမျိုးကလဲ မဖြစ်သင့်ပါဘူး ၊ သူကကောင်းတာလုပ်နေတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်က ကြည့်ပြီးအားပေးနေတယ် ၊ အဲ့ဒီအချိန်မှာ သူလုပ်တာလွဲသွားရင်တော့ ဘေးကလူအနေနဲ့ ဝေဖန်ရမှာပါပဲ ၊ ဒါမှလဲ ပြင်သင့်တာတွေကိုပြင်လို့ရမှာပေါ့ ၊ ဝေဖန်တဲ့လူအနေနဲ့ စေတနာမှန်ဖို့ပဲလိုတာပါ ၊ အခုရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးကတော့ ကျွန်တော်ဥာဏ်မှီသလောက် စေတနာမှန်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်၊ စေတနာမှန်တဲ့ ဝေဖန်ရေးမျိုးကို ကြိုဆိုနိုင်ကြပါစေ။
Feel bad and sad about it after reading this article. But I don;t know what to say because this is how we see things in different ways. :) Positive or negative point of view? I learn that love makes us see things in positive way :P
Actually the writer hasagood point for this kind of donation photos. This is called "ethical consideration" not to show the pictures of the kids especially their faces, if the young infants (the children in vulnerable) are the content of the photos. It is for an adult in vulnerable too (such as refugee, patients, etc.)
However, if the informed consent was done before taking/showing the pictures in public, it is ok. The kids and the parents/guardians must agree to be made first.
တကယ်တော့ အလှူဆိုတာ မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် အင်မတန်မှ မွန်မြတ်လှပါတယ်။ ဖောင်ဒေးရှင်းအလှူဆိုတာ ဟာလည်း တကယ်တော့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲကြောင့် ရပ်တည် ဖြစ်ပေါ်လာတယ်မျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကိုယ်လုပ်ချင်တာ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပေါ်ပြူလာဖြစ်ချင်တဲ့ စိတ်တွေနဲ့ လျှောက်လုပ်နေမယ် ဆိုရင်တော့ မွန်မြတ်တဲ့ အလှူတစ်ခု ဖြစ်လား မဖြစ်ဘူးဆိုတာတော့ ကာယကံရှင်တွေကပဲ သိမှာပါ။ မင်္ဂလာဆောင်လို ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစတွေမှာ ပေါ်ပြူလာလုပ်လို့ ကောင်းပေမယ့် ဒီလို ဖောင်ဒေးရှင်းအလှူမျိုးတွေမှာတော့ ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေတဲ့ စိတ်လေးတွေကို မထားပဲ လုပ်ကိုင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ အင်မတန်မှ မွန်မြတ်သန့်စင်ပြီး လေးစားဖို့ ကောင်းတဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်းလေး တစ်ခု ဖြစ်လာမှာ မလွဲပါဘူး။
မင်းသား မင်းသမီးတွေ ဒီနေ.ခေတ်မှာ လူမှုရေးတွေ လုပ်လာကြတာ ဝမ်းသာစရာပါ.. ပြည်သူတွေဆီက ရတဲ.ငွေနဲ. ပြည်သူကို ကျေးဇူးဆပ်တယ်ပေါ. ပြေတီဦးဖောင်ဒေးရှင်းမှာ ကျမအမြင်ကတော. တနှစ်ထက်တနှစ် အခမ်းအနားချဲ.ထွင်လာသလိုပဲ.. သူတို.နှစ်ယောက်ရဲ.ဆန္ဒမဆိုလိုပါဘူး.. အခမ်းအနားစီစဉ်သူတွေပေါ.လေ အဓိက. . ဒီနှစ် ကန်တော.ခံတဲ.ကိစ္စပါလာတယ် .. အင်တာနက်ကတဆင်. ပုံတွေ သတင်းတွေ တွေ.တွေ.ချင်း ကန်တော.တဲ.ကိစ္စ သိပ်သဘောမတွေ.ပါဘူး.. "ငါတို့ကထောက်ပံ့တာမို့ ငါတို့ကို ကန်တော့ကြဟေ့" လို.သူတို.က မပြောသော်ငြား အခမ်းအနား အစီအစဉ်ထဲမှာပါတာမို. သူတို.သိကိုသိရပါမယ်.. ကလေးတွေက သိတတ်လို. နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်လိုပဲကန်တော.ကန်တော. ဒီလို အခမ်းအနားကြီးနဲ. မကန်တော.သင်.ပါဘူး ဒါကျတော. ကိုယ်.ကိုယ်ကို ဖော်နေသလိုပါပဲ.. ပြီးတော. ဖောင်ဒေးရှင်းဆိုကထဲက သူတို.ချည်းပဲလှူတာမဟုတ်ပါဘူး နောက်နှစ်တွေမှာ ဒီလောက်မချဲ.ထွင်ဘဲ ရိုးရှင်းစွာ လှူဒါန်းနိုင်ပါစေ
တကယ်ဆို ဒီကိစ္စဟာ မီဒီယာတွေ စည်းမရှိလို့ဖြစ်ရတာပါ
ပြည်ပမှာ HIV ဝေဒနာရှင်တွေ စာနာထောက်ထားရမယ့် အားနည်းသူ လူတန်းစားတွေကို အလှူငွေ ပေးတဲ့အခါ သူတို့ တွေကို တိုက်ရိုက် မျက်နှာတွေ ပေါ်အောင် ရိုက်ပြလေ့မရှိပါဘူး Human Right တို့Ethic တို့ ကို မြန်မာပြည်က မီဒီယာတွေ လုံးဝ နားမလည်ကြပါဘူး
ဂျာနယ် ရောင်းရရင်ပြီးရော သူ့ ထက်ငါ အပြိုင်အဆိုင် ရေးနေကြတာ
ကျောင်းသားတွေ ကျောင်းတက်ဖို့၊ လူမမာတွေ ဆေးကုဖို့ ထောက်ပံ့ပေးနေသူတွေ မြန်မာပြည်မှာ အများကြီး။ ဘယ်သူကမှ ဒီလို ထိုင်မကန်တော့ခိုင်းဘူး။ ပိုက်ဆံပေးပြီး ပေးခအဖြစ် ကိုယ့်ကို ထိုင်ကန်တော့ခိုင်းတာတော့ မှားတယ်။
ရုပိရှင်မင်းသားမင်းသမီးဆိုတော့ မလုံ့တလုံတွေ အတိုအကပ်အပြတ်အကွဲတွေ စင်ပေါ်မှာ ပိတ်ကားပေါ်မှာ ၀တ်ပြရတာလဲ ရှိမယ်။ ကျောင်းဆရာမတစ်ယောက်နဲ့တော့ မတူနိုင်ဘူး။ ကိုယ်က sexy အ၀တ်အစားတွေ ၀တ်ပြီး ခါးလှုပ်တင်လှုပ် performance လုပ်ပြတာကို ကိုယ့်ကို ကန်တော့ခဲ့ရတဲ့ ကလေးတွေ မြင်တဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လောက် စိတ်ဆင်းရဲမလဲ။
ကိုမင်းအုပ်စိုးက မနေနိုင်လို့ ပြောတာ ပြောထိုက်ပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေက ဒီလို သူတို့အတွက် ပြောဖော်ရလို့ ကျေးဇူးတင်နေမှာပါ။
`မင်းအုပ်စိုး´ ပြောတာကို ကျနော် အပြည့်အ၀ ထောက်ခံပါတယ်၊ တွေ့သမျှ လက်အုပ်ချီနေရတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကိုလည်း ကျနော်တော့ လုံးဝ လက်မခံပါ၊ လက်အုပ်ချီ ကန်တော့နေရတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာကိုလည်း ပြင်ဆင်သင့်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်၊ ဒါဟာ ယဉ်ကျေးမှု မဖြစ်သင့်ပါဘူး၊ နားမလည်မှုနဲ့ အကြောက်တရားကို ချီးမြှင့်တဲ့ သဘောတရားက ပိုများနေပါတယ်၊ မြန်မာပြည်က ပညာရေး စနစ်အရ ကျောင်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး ငွေကြေး မလုံလောက် ဖြစ်နေသူတွေ ဒုက္ခတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့ စနစ်ပုံစံ မှားယွင်းမှုကိုလည်း ပြင်ဆင်သင့်ပါပြီ၊ နိုင်ငံတကာမှာ တက္ကသိုလ်တက်ခွင့်ရတဲ့ ကျောင်းသားများဟာ သူတို့ရဲ့ ကျောင်းစရိတ်နဲ့ ကျောင်းတက်စဉ် စားစရိတ် လမ်းစရိတ် အစရှိတဲ့ အထွေထွေစရိတ်တွေကို ဘဏ်ကနေ အတိုးနှုန်း သက်သက်သာသာ ချေးယူလို့ရတဲ့ စနစ်တွေ ရှိပါတယ်၊ ဘယ်သူ့ဆီမှာမှ ဒူးသွားထောက်ဖို့ မလိုပါဘူး၊ နိုင်ငံကျော် မင်းသား မင်းသမီးတွေလည်း ၀င်ငွေများရင် များသလို အခွန်ဆောင် ... ရတဲ့ အခွန်ကို အစိုးရက ပညာရေး ကျန်းမာရေးအတွက် စီမံခန့်ခွဲရပါတယ်၊ အခုလို ဆေးကျောင်းတက်ဖို့ ပိုက်ဆံမလုံလောက်လို့ ဂရုဏာဖောင်းဒေးရှင်းမှာ ဒူးထောက်ရတာမျိုးဆိုတာ မရှိပါဘူး၊ ဒါကြောင့် အလှူငွေအတွက် ဂုဏ်သိက္ခာကို ဘေးချိန်ပြီး ဒူးထောက်နေရတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေ အဆုံးသတ်သင့်ပါပြီ၊ ၀င်ငွေ ကောင်းရင် ကောင်းသလို နိုင်ငံတော်ထံ မှန်မှန်ကန်ကန် အခွန်ဆောင်ပြီး နိုင်ငံတော်ကလည်း ကျောင်းသားတေကို ခေတ်နဲ့ လျှော်ညီတဲ့ ပညာသင်ထောက်ပံ့ငွေ (ကျောင်းစရိတ်၊စားစရိတ်နှင့် အထွေထွေ အသုံးစရိတ်) စီစဉ်ပေးသင့်ပါတယ်၊ NGO တွေ မှိုလိုဖောင်ပွပြီး နာမည်ကြီးလိုမှုအတွက် ဓါတ်ပုံပြစားခံရတဲ့ ဖြစ်စဉ်ဟာ အနာဂတ်မှာ အရှက်ရစရာပဲ ရှိမှာပါ ...
အဲဒီ ပွဲလုပ် တဲ.စရိတ်နဲ. ကျောင်းသားဘယ်နှယောက်လောက်ထောက်ပံ.ရင်ရမလဲ ?အလှု ထက် ဆိုင်းဘုတ် ပိုကြီးနေ လားလို့ပါ ?ကိုယ့်မာနကို ထိပါးမယ်ဆိုရင် ကျေးဇူးတော့ အတင်မခံနိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ မမယ်ကိုးရဲ့စကားကို ထောက်ခံတယ်ဗျာ။အလှူပေးတာယူမိလိုဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကျေးဇူးရှင် လို့ခံယူတဲ့ အလှူရှင်ဆိုရင်တော့ တကယ်အံ့သြမိပါတယ်။
ကိုကိုယ် အလှူရှင်ပါဆိုပြီး မဏ္ဏပ်တိုင်တက်ပြတဲ့လူတွေက ပကာသန ကင်းရဲ့လား
မင်းအုပ်စိုးကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဆဲသွားတဲ့ anonymous ၁ယောက်ရဲ့ ကွန်မန့်က မိုက်ရိုင်းလွန်းပါတယ်.. သူပြောတာတွေ တစ်ခါမှလဲ မကြားဖူးဘူး...
မင်းအုပ်စိုးပြောတာ ဟုတ်မဟုတ်၊ တရားမတရား မပြောဘဲ ဒီလို အောက်တန်းကျကျ ဆဲသွားတာ၊ ပေါက်ကရတွေ လာသတင်းလွှင့်သွားတာ မရိုင်းလွန်းဘူးလား
ဂဟဋ္ဌဝန္ဒနာသုတ်- (ဂဟဋ္ဌ= အိမ်ရာတည်ထောင်သူ + ဝန္ဒနာ= ရှိခိုးခြင်း)
ရဟန်းတို့ ရှေးကဖြစ်ဖူးသည်ကား နတ်တို့အရှင် သိကြားမင်းသည် အကူအညီဖြစ် သော မာတလိနတ်သားအား ''အချင်းမာတလိ အာဇာနည်မြင်းတစ်ထောင်က သော ရထားကို ပြင်လော့၊ မြေကောင်းရာအရပ်ကို ကြည့်ရှုခြင်းငှါ ဥယျာဉ် မြေသို့ သွားကုန်အံ့'' ဟု ဆို၏၊ ''အရှင်သိကြားမင်း ကောင်းပါပြီ'' ဟု မာတလိနတ်သား သည် နတ်တို့အရှင် သိကြားမင်းအား ဝန်ခံ၍ အာဇာနည်မြင်းတစ်ထောင်ကသော ရထားကို ပြင်ဆင်ပြီးလျှင် နတ်တို့အရှင် သိကြားမင်းအား လျှောက်၏-
''အရှင်သိကြားမင်း အရှင်၏ အာဇာနည်မြင်းတစ်ထောင် ကသော ရထားကို ပြင်ဆင် ပြီးပါပြီ၊ သွားရန်အချိန်ကို အရှင်သိကြားမင်း သိပါ၏၊
(သွားရန်မှာ အရှင်သိကြားမင်း အလိုအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်)'' ဟု ဆို၏၊
ရဟန်းတို့ နတ်တို့အရှင် သိကြားမင်းသည် ဝေဇယန္တာပြာသာဒ်မှ ဆင်းသက်သည် ရှိသော် လက်အုပ်ချီ၍ အရပ်လေးမျက်နှာတို့ကို ရှိခိုး၏၊ ရဟန်းတို့ ထိုအခါ၌ အကူ အညီဖြစ်သော မာတလိသည် နတ်တို့အရှင် သိကြားမင်းကို ဂါထာဖြင့် ရွတ်ဆို၏-
''သိကြားမင်း ဗေဒင်သုံးပုံတတ်သူ ဗြာဟ္မဏတို့သည်လည်းကောင်း၊ မြေ၌နေသူ တို့သည်လည်းကောင်း၊ မင်းတို့သည်လည်းကောင်း၊ နတ်မင်းကြီးလေးယောက် တို့သည် လည်းကောင်း၊ များသော အခြံအရံရှိသော တာဝတိံသာနတ်တို့သည် လည်းကောင်း အရှင်သိကြားမင်းကို ရှိခိုးကုန်၏။ သိကြားမင်း ထိုသို့ ဖြစ်ပါလျက် အရှင်သိကြားမင်း ရှိခိုးသော နတ်မင်းကြီးသည်ကား အဘယ်မည်သော နတ်မင်းပါ နည်း'' ဟု (ရွတ်ဆို၏)။
''မာတလိ ဗေဒင်သုံးပုံတတ်သူ ဗြာဟ္မဏတို့သည် လည်းကောင်း၊ မြေ၌နေသူ အားလုံးတို့သည် လည်းကောင်း၊ မင်းတို့သည် လည်းကောင်း၊ နတ်မင်းကြီးလေး ယောက်တို့သည် လည်းကောင်း၊ များသော အခြံအရံ ရှိကုန်သော တာဝတိံသာ နတ်တို့သည် လည်းကောင်း ငါ့ကို ရှိခိုးကြကုန်၏။
ငါသည်ကား သီလနှင့် ပြည့်စုံကုန်သော၊ ရှည်စွာသော ညဉ့်တို့ပတ်လုံး တည်ကြည် ခြင်းရှိကုန်သော၊ မြတ်သောအကျင့်လျှင် လဲလျောင်းရာရှိကုန်သော ရဟန်းတော် တို့ကို ကောင်းစွာ ရှိခိုး၏။
မာတလိ အကြင်သူတို့သည် အိမ်၌ တည်ကုန်၍ ကောင်းမှုကို ပြုကုန်၏၊ သီလရှိ ကုန်၏၊ ရတနာသုံးပါးကို ဆည်းကပ်ကုန်၏၊ တရားနှင့်အညီ သားမယားကို မွေးမြူ ကုန်၏၊ ထိုသူတို့ကို (ငါသည်) ရှိခိုး၏'' ဟု (မိန့်ဆို၏)။
''သိကြားမင်း အရှင်သိကြားမင်းသည် အကြင်သူတို့ကို ရှိခိုး၏၊ ထိုသူတို့သည် လောက၌ မြတ်ကုန်သတတ်။ သိကြားမင်း(အရှင်သိကြားမင်းသည်) အကြင်သူတို့ ကို ရှိခိုး၏၊ ထိုအရှင်သိကြားမင်း ရှိခိုးသူတို့ကို အကျွန်ုပ်သည်လည်း ရှိခိုးပါ၏'' ဟု ပြောဆို၏။
''မဃလုလင် ဖြစ်ဖူးသော၊ သုဇာ၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သော၊ အကြီးအမှူးဖြစ်သော သိကြားမင်းသည် ဤစကားကို ဆိုပြီး၍ အရပ်လေးမျက်နှာတို့ကို ရှိခိုးပြီးလျှင် ရထားထက်သို့ တက်စီးလေ၏''။
၈ - ဂဟဋ္ဌဝန္ဒနာသုတ်၊ ဒုတိယဝဂ်၊ သဂါထာဝဂ္ဂသံယုတ်ပါဠိတော်။
ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့က သိပ်မြင့်မြတ်နေလို့လားမှ မသိတာ။ သိကြားမင်းတောင် ရှိခိုးချင် ရှိခိုးနေရအုံးမယ်။ :))
တစ်ချို့ က လှူတဲ့အခါ စေတနာနဲ့လှူတယ်။ လူသိတာ မသိတာ သူတို့ အတွက် အရေးမကြီးဘူး။
တစ်ချို့ က လှူတဲ့အခါ စေတနာ နဲ့ လှူတယ်။ သူတို့အလှူကို လူမသိစေချင်ဘူး။
တစ်ချို့ က လှူတဲ့အခါ စေတနာ နဲ့ လှူတယ်။ သူတို့အလှူကို လူသိစေချင်တယ်။
တစ်ချို့ က လှူတဲ့အခါ စေတနာ ထက် ထင်ပေါ်ချင်လို့(သို့ ) လှူဒါန်းမှု့ ကြောင့် ရလာတဲ့ အကျိုးကို မက်လို့ / မျှော်ကိုးလို့ လှူကြပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့်လည်း ညောင်ပင်ကြီးလောက်လှူပေမဲ့ ညောင်စေ့လောက်ဘဲ ကုသိုလ် ရတတ်တယ်။
ညောင်စေ့လောက် လှူပေမဲ့ ညောင်ပင်ကြီးလောက် ကုသိုလ် ရတတ်တယ် ဆိုတာ ဖြစ်လာတာပါဘဲ။
အဲ့ဒီ့တော့ ကိုယ့်အလှူက ဘယ်ထဲမှာပါသလဲ ဆိုတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သာ အသိဆုံးပါ။
လှူဒါန်းတယ် ဆိုတာ စွန့် ကြဲခြင်းပါ။ အဲ့ဒီ့အတွက် တစ်ခုခုကို ပြန်ပြီး လိုချင်တပ်မက်မှု့ ကို မထားသင့်ပါဘူး။
လှူတဲ့အခါ အလှူရှင်က စေတနာရဲ့ ပံ့ပိုးမှု့ ကြောင့် မနေနိင်စွာနဲ့လှူမဲ့ အရာအပေါ် တွယ်တာစိတ်ကိုပါ စွန့် လွှတ်လိုက်သင့်ပါတယ်။ ဘာမှ အကျိုးကို ပြန်မမျှော်သင့်ပါဘူး။
အပေါ်က ဘုရားစာ ရေးသွားတဲ့ အမည်မဖော်ရဲတဲ့ အနောနီမတ်စ်ရေ ... `ရှိခိုးခြင်း´ ကို ဘာသာရေး ရှုထောင့်ကနေ ကောင်းသလိုလို လည်ပတ်ပြီး မတင်ပြပါနဲ့၊ ခေတ်နဲ့ မလျှော်ညီတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကြောင့် လူငယ် ပညာတတ်တွေ အဆိပ်သင့်နေပါမယ် ...
အခမ်းအနားလုပ်ပြီး ပေးတာကို လက်ခံလို့ ရပါသေးတယ်
ထိုင်ရှိခိုးခိုင်းတာကတော့ လုံးဝမှားတယ်..မြန်မာယဉ်ကျေးမှုမှာလဲ မရှိဘူး..လူတွေ့တိုင်း လွယ်လွယ်ရှိခိုးတဲ့အကျင့်။
သီတင်းကျွတ်မှာတောင် လူကြီးသူမတွေ (သက်ကြီးရွယ်ကြီးတွေ)ကို ကန်တော့တယ်ပဲ ထုံးစံရှိတယ်.. ကိုယ်က ကန်တော့ခံအရွယ် မဟုတ်သေးဘဲ ဒါမျိုး မသာယာသင့်ဘူး
ကိုအောင်( ပျူနိုင်ငံ) သို့ 
ကျွန်မကို ရည်ညွှန်းတယ်လို့ ထင်လို့ ကွန်မန့် ကို ထပ်ရေးပါတယ်ရှင်။
ကျွန်မရဲ့ အရေးအသားညံ့ဖျင်းမှု့ ကြောင့် အဲ့ဒီ့လို အထင်မှားခြင်းဖြစ်သွားပါတယ်။
ကျွန်မရဲ့ အယူအဆ ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါမယ်။
ိမင်းအုပ်စိုး ရေးထားတာကို ကျွန်မ လုံးဝသဘောတူ ပါတယ်။
လှူပြီးတဲ့နောက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောင် ကျွန်မက ပြန်လိုချင်သူမဟုတ်ပါဘူး။ သူတစ်ပါးဆီက အောက်ကျို့ ပြီးမှ ဆိုရင် ဘယ်လိုအရာမျိုးကိုမှ မလိုချင်မရချင်ပါဘူး။ အခုလို ရှစ်ခိုးတာကို လုံးဝအားမပေးပါဘူး။ ကျွန်မက ရှစ်ခိုးခံတဲ့နေရာကနေ ပြောရမယ်ဆိုရင်တောင် ရှက်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ကျွန်မ ဆိုလိုရင်းကို သဘောပေါက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်ရှင်။
ူအပေါ်ခံယူချက်တချို.ကို ပြောချင်ရုံသက်သက်ပါ ...ဘယ်သူ.ကိုသာစေလိုနာစေလိုရည်ရွယ်ချက်မျိုးမရှိပါဘူး..ကျွန်မနားလည်ခံယူထားတဲ.အလှူဆိုတာ လူတချို.ရဲ.ကွက်လပ် တချို.ကို ကိုယ်ကတတ်နိုင်သလောက်ကူညီဖြည်.ဆည်းပေးခြင်းပါ ကိုယ်ကျိုးမကြည်.တဲ.ဖြည်.ဆည်းပေးခြင်းမျိုးပါသူတို.လိုအပ်ချက်တချို. ပြည်.စုံသွားလို.ပျော်ရွှင်တာကိုကြည်.ရင်းတောင်အပျော်ကူးပါတယ်...ကျွန်မလှူတိုင်းဒီလိုမျိုးဘဲလှူပါတယ် ရှေ.ဆက်ပြီးလဲဒီလိုမျိုးဘဲလှူမှာပါ အနောက်နိုင်ငံသားတွေရဲ.အလှူပုံစံမျိုးကိုတော်တော်သဘောကျပါတယ် လေးလဲလေးစားပါတယ် ဘာအခမ်းအနားအဆောင်အယောင်မှမပါဘဲအရိုးရှင်းဆုံးလှူကြတာပါကမ္ဘာတဖက်ခြမ်းမှာရှိတဲ. မီးဘးရေဘေးငလျင်ဘေးစတဲ.ဒုက္ခရောက်နေတဲ.သူတွေကိုကိုယ်.အကျိုးဘာမှမပါဘဲလှူနေကြတာတကယ်သာဓုခေါ်စရာကောင်းတဲ.မြင်.မြတ်တဲ.အလှူမျိုးတွေပါ အမည်နာမ တောင်မဖော်ဘဲလှူတဲ.သူတွေတောင်ရှိတယ် ..ဒီလိုပြောတော.ကျွန်မဖေဖေကပြောဘူးပါတယ် နတ်လူသာဓုခေါ်စေဆိုတာရှိတယ်တဲ.ဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်အနေနဲ.ဒါတွေကိုနားလည်ပေမယ်.အတ္တဆန်တဲ.အလှူမျိုးကိုတော.ဘဝင်မကျပါဘူးခုသူတို.ဒီလိုပွဲလုပ်လို.ကုန်ကျသွားတဲ.စရိတ်ကိုပွဲမလုပ်ဘဲနောက်လိုအပ်နေတဲ.နေရာတချို.မှာထပ်လှူလို.ရပါသေးတယ် မလိုအပ်တဲ.နေရာတွေမှာ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ.အကျယ်ချဲ.မှုကိုစိတ်ပျက်မိပါတယ်
ကျနော် မြင်လိုက် ဖတ်လိုက်တဲ့ ကော်မန့်က ခင်ဗျာ ကော်မန့် မဟုတ်ဘူးဗျ၊ ဘုရားစာတွေ အရှည်ကြီး ရေးထားတဲ့ ကော်မန့် .. ကျနော်လည်း မန့်ပြီးရော အဲဒီကော်မန့် မတွေ့ရတော့ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လည်း မပြောတတ်ဘူး၊ ကျနော့်ကို ပြန်ပြောတဲ့သူ ခင်ဗျာ ... ကျနော် ပြောတာ ခင်ဗျာ မဟုတ်ပါဘူး ... ပျောက်သွားတဲ့ ကော်မန့်တစ်ခုပါ ...
ဘီလ်ဂိတ်များ သူ လှူတာ ခံရတဲ့ တတိယကမ္ဘာနိုင်ငံက လူတွေကို အဲဒီလို သူ့ကို ရှိခိုးခိုင်းမယ်ဆို တစ်ကမ္ဘာလုံးတော့ ဒုက္ခပဲ... ဘုရားမလို့ ဘီလ်ဂိတ်ကြီး အဲဒီလို မပျက်စီးပါစေနဲ့
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ အဲ့ဒီ့လို မှားယွင်းတတ်ပါတယ်။ ကျွန်မလည်း ရှာကြည့်တော့ ကျွန်မဘဲတွေ့ တာနဲ့ ရေးလိုက်တာပါ။ အခုလို ကျွန်မသဘောထားကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရေးဖြစ်သွားစေတဲ့အတွက် ကျွန်မက ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ စိတ်မရှိပါနဲ့ ။
Good Night ပါ။
မြတ်စွာဘုရားက ကိုယ့်ကို ပေး၇င် ပေးသူကို ပြန်ရှိခိုးမယ်လို့ လုံးဝ (လုံးဝ) မဟောခဲ့ဘူး... ဒီလိုသာဆို သံဃာတွေက ဆွမ်းလောင်းတဲ့ ဒကာဒကာမတွေကို ကျေးဇူးရှင်ကြီးတွေဆိုပြီး ထိုင်ရှိခိုးနေရမှာပေါ့..
ဗုဒ္ဓဘာသာ ယဉ်ကျေးမှုလို့ သုံးနှုန်းတာ လုံးဝမှားယွင်းပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလဲ စော်ကားလိုက်သလိုပါပဲ...ရတနာသုံးပါးကို ရှိခိုးတာသာ ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုပါ။ မိဘဆရာကို ရှိခိုးတာတော့ ရှိပါတယ်...ကျန်တာကတော့ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်ပဲ... ရှိခိုးရမယ်လို့ လုံးဝ တိုက်တွန်းမထားပါဘူး
နန်းဝါ၀ါမောင်၊ချောနဲ့ လလ တို့ ကို တစ်ခုမေးချင်ပါတယ်... ကလေးတွေနေရာမှာ ခင်ဗျားတို့ ကလေးတွေ ဆိုရင်ကော ဘယ်လိုခံစားရမလဲ... လလ ပြောတဲ့ "သူတို့မျက်နှာလေးတွေ တည်တည်လေးတွေ ဖြစ်နေတာကတော့ ဗွီဒီယိုကင်မရာတွေနဲ့ချိန်ထားတော့ မျက်နှာမထားတတ်တာ နေမှာပါ။ "
လူတိုင်းဓာတ်ပုံရိုက်ရင် ပြုံးတတ်ကြပါတယ်... ကင်မရာနဲ့ စိမ်းနေလို့ ထားပါတော့ အကုန်လုံးတပုံစံထဲ ဖြစ်နေမလား...သူတို့ လုပ်တဲ့ ပွဲရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ကို ဘဏ်ထဲထားပြီး နောက်ထပ်ကျောင်းသားတွေတောင် လှူဒါန်းနိုင်ပါသေးတယ်... သူတို့ သူငယ်ချင်းတွေ ကြားထဲမှာကော ... သုခရိပ်မြုံမှာ ပိုက်ဆံသွားလှူတော့ သူတို့ ကို ဓာတ်ပုံမရိုက်ရလို့ စာကပ်ထားပါတယ်... လူ့ အခွင့်အရေးအရပါ... သူတို့ စိတ်ထဲမှာ မင်းသားမင်းသမီးနဲ့ ရိုက်ရလို့ လဲ ပျော်မယ်မထင်ပါဘူး... ဒီလိုမှန်း သိရင် ငါ့ဖာသာ ပိုက်ဆံရှာပြီး ကျောင်းဆက်တက်ဖို့ ကြိုးစားမယ်လို့ တွေးခဲ့ မိကြမှာပါ... ကျွန်တော်သာ အဲဒီနေရာမှာဆိုရင်..... ကျွန်တော့်ပုံဂျာနယ်ထဲပါနေလို့ ဝမ်းမသာပါဘူး...ကျွန်တော့်ကျေးဇူးရှင်တွေကို ကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာနဲ့ ဆက်မှာပါ... ကျွန်တော့်ကို လူတွေ ၀ိုင်းကြည့်မယ့် အဖြစ်မျိုး မဖြစ်ချင်ပါဘူး...
အဲ့ဒီလို ခွဲခြားမှုတွေကို မသိစိတ်က အမှတ်တမဲ့မလုပ်မိသေးပေမယ့်၊ သိစိတ်ကပါ ရှောင်ကြဉ်ရမယ်ဆိုတာ လူတိုင်းကို အမုန်းခံပြီး သတိပေးတဲ့ မင်းအုပ်စိုးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူ့ဟာသူ အလုပ်ပျက် အချိန်ကုန်မှာစိုးလို့ လူအချင်းချင်းကျိတ်မပြောဘဲ၊ စာတစ်တန် ပေတစ်တန် ရေးဖွဲ့လို့ပြောပြော အားလုံးသိရှိသတိထားမိသွားကြတာကတော့ ကောင်းသောရလာဒ်ပါ ခင်ဗျား... :D
မင်းအုပ်စိုးက လှူဒါန်းတတ်ကြဖို့ဘဲ ရေးပါတယ်။ အောက်ကလူတွေက ပိုဆိုးနေပါတယ်။ ကလေးတွေကလည်း မင်းအုပ်စိုးပြောသလို ပညာဂုဏ်နဲ့လင်းလက်ခဲ့ကြသူတွေချည်းပါပဲ။ အထူးသဖြင့် နွမ်းပါးသူတွေအဖို့ ဒီတစ်ခုဟာ လွန်စွာတန်ဖိုးထားခြင်းခံရတဲ့ ဂုဏ်ပါ။ ပြေတီဦးတို့လှူတာဟာလည်း အလွန်ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မင်းအုပ်စိုးပြောသလိုပါပဲ... လှူပုံလွဲနေတယ်လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်နေတဲ့ Online Donation ဆိုတဲ့အဖွဲ့က Organizer တစ်ယောက်ပါ။ လူလူချင်း တန်းတူ ရည်တူရှိတယ် ဆိုတာသိစေဖို့ နဲ့ လူတောမတိုးရဲတဲ့ ကြောက်စိတ်တွေမဝင်စေဖို့အတွက် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း ဆိုတာကို ကလေးများအပေါ်မှာ မလုပ်မိအောင်နေဖို့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။
ကလေးတွေဟာ မဟုတ်တာမလုပ်တာ မှန်ပေမဲ့ သူတို့မိဘတွေမဟုတ်တာ လုပ်ခဲ့လို့၊ အသုံးမကျလို့ ဆင်းရဲတွင်းကမလွတ်နိုင်ဖြစ်နေတာဆိုရင်ကော...မရှက်ကြဘူးတဲ့လား...
ကလေးတွေကို ပိုက်ဆံပေးထောက်ပံ့ရုံနဲ့ အရာအားလုံးအဆင်ပြေပြီး ဝမ်းသာသွားကြသတဲ့လား...
မိဘတွေကကော သူတို့မထောက်ပံ့နိုင်လို့ သားသမီးတွေ သူတစ်ပါးကိုအောက်ကျို့ ရှိခိုးပြီး အကူအညီတောင်းနေရတာကို ကြည့်ပြီး ပျော်ကြမတဲ့လား...ဖြစ်နိုင်မယ်ဆို သူတို့သာအောက်ကျို့ပြီး အကူအညီတောင်းလာမယ်၊ သားသမီးများကို သိစေချင်မှာမဟုတ်ပါ။
ပြေတီဦးတို့ဘက်ကတော့ ဒီလိုနှိမ့်ချစေ ဆိုပြီးလုပ်မယ်မထင်ပါ။ တကယ်ဆို ဖောင်ဒေးရှင်းကလူတွေတောင် ငယ်ငယ်က ဒီကလေးတွေလောက်တော်မယ်မထင်ပါ။
ပြီးတော့ အလှူအကြောင်း ကျယ်ပြန့်စေဖို့၊ အလှူရှင်များများရဖို့ လှုံ့ဆော်ကြော်ငြာရေးနဲ့ လုပ်ရှားမှုဓါတ်ပုံ၊ သတင်းဖြန့်ချိရေးကလည်း မလုပ်လို့ မဖြစ်ပါ။ ဒါပေမယ့် တန်းတူရည်တူ ရှိစေဖို့နဲ့ ကလေးတွေစိတ်မှာ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြစေဖို့အတွက် သူတို့နဲ့တန်းတူနေထိုင်ပြီး အရည်အချင်းရှိလို့သာ ဒီလိုထောက်ပံ့မှုမျိုးရရှိကြောင်းပြောင်းလဲ ပြသကြော်ငြာပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဖြင့် ကလေးများလည်း နွမ်းပါးပေမယ့် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူ၊ လူကြီးများ၊ အလှူရှင်များလည်း ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓုခေါ်နိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား...
ဟေ့ကောင် Tz ...
မင်းတို့လို NGO အလှူခံတွေကြောင့် မြန်မာပြည် အကျင့်ပျက်လာတာကိုလည်း ထည့်ပြောအုံး ....
ဦးလှထွန်းကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းကို ထောင်သွားတဲ့ သွားလေးသူ ဦးလှထွန်းက ဝေဒနာသည်တွေ အများကြီးကို ကျေးဇူးပြုသွားတယ်။ ဒီလို သူ့ကို မရှိခိုးခိုင်းဘူး
အများသူငါအတွက် သောက်ရေအိုးစင်လေးတွေ၊ ရေသန့်စက်တွေ လှူဒါန်းတဲ့လူတွေ ရှိတယ်။ ရေရှားတဲ့နေရာမှာ ရေတွင်းရေကန်လှူသူတွေ ရှိတယ်။ရေဆိုတာ အသက်ရှင်ဖို့ နေ့စဉ် လိုအပ်ချက်ပဲ-ဒီအလှူရှင်တွေက ဒီရေ သောက်ချင်သုံးချင်ရင် ကျုပ်ကိုရှိခိုးလို့ ပြောဖူးလား။
ရဟန်းခံရှင်ပြု အလှူတွေမှာရော ကဲကဲ-စားပြီးတဲ့လူတွေ အလှူရှင်ကို ရှိခိုးပြီးမှပြန်ကြနော်ဆိုရင် မုဒိတာပွားနေတာတွေ ပျောက်ပြီး ဘယ်လောက် ခံပြင်းကြမလဲ..
ခု ဒီလိုရှိခိုးခိုင်းတာကြီးက အထူးအဆန်ြး့ဖစ်နေလို့ လူတွေ ဒီလောက် အုတ်အော်သောင်းသင်း ဖြစ်ပြီး မထွင်ပါနဲ့၊ ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ ဖြစ်လာတာ-
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုလို့ ပြောရအောင် အရင်က ထုံးစံမှမရှိတာ-ရှိရင် ဒီလိုအထူးအဆန်းဖြစ်နေမှာ မဟုတ်ဘူး
လှူတဲ့နေရာမှာစိတ်ထားစင်ကြယ်ရင် အကျိုးပေး ပိုကြီးပါတယ်..အများပရိသတ်ရှေ့မှာ အလှူခံကိုနှိမ့်ပြီး မိမိကိုယ်ကို မြှင့်ပြချင်နေရင်၊ ဒါနအတွက် ကြည်နူးရမယ့်အချိန်မှာ အခမ်းအနားရဲ့ ပြောင်ရောင်စည်ကားပုံတွေဆီသာ စိတ်ထွေပြားဂုဏ်ယူနေရင် ဒါတွေက ပုဗ မုဉ္စ ပရ စေတနာတွေကို အားနည်းသွားစေနိုင်တာမို့ ရှောင်နိုင်ရင် ကိုယ့်မှာ အကျိုးပေး ပိုအားကြီးပါတယ်..
January 10, 2012 11:22 AM Anonymous သို့-
ဒီနေရာမှာ ကျွန်မကအလွန်ဆင်းရဲလို့ စာတော်တဲ့ ကျွန်မသား၊သမီးကို ပညာဆက်လက်မသင်ပေးနိုင်ပဲရှိနေချိန်မှာ ကျွန်မရဲ့သားသမီးကို ထောက်ပံ့ပေးမယ့် ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းသာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရင် ကျွန်မရဲ့သားသမီးတင်မကပါဘူး ကျွန်မပါ ၀င်ထိုင်ပြီး ကန်တော့မိသွားလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
မာနဆိုတာ ထားသင့်တဲ့နေရာမှာသာထားရတာပါ။မထားသင့်တဲ့နေရာမှာ မာနထားပြီး သူ့ကိုကန်တော့ရမှာမို့ ငါပညာဆက်မသင်နိုင်ဘူးဆိုရင် ကိုယ်ရမယ့်အခွင့်အရေးဟာ မထားသင့်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့မာနကြောင့် လက်လွတ်ဆုံးရှုံးရမှာပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ဘ၀ပေးကုသိုလ်ကြောင့် ဒီအချိန်မှာ ဆင်းရဲရပေမယ့် ကုသိုလ်ကံရဲ့မျက်နှာသာပေးမှုလေးကြောင့် ကိုယ့်အပေါ် ကူညီထောက်ပံ့မယ့်သူပေါ်လာတုန်း ကိုယ့်ဘ၀ကို အားငယ်စိတ်ကင်းစွာနဲ့ အထက်ကိုတက်လှမ်းနိုင်အောင် ကြိုးစားနိုင်ကြပါတယ်။
ကိုယ်ရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့် အဆင့်အတန်းတစ်ခုရလာပြီဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးတုန့်ပြန်မှုကို မမျှော်လင့်ပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ဘ၀ကို အထောက်အပံ့ပြုခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးရှင်ကို အဲဒီအချိန်မှာ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်နဲ့ ရိုသေ၀ပ်တွား ကန်တော့သင့်သေးတာပါပဲ။
မြန်မာလူမျိုးတွေဖြစ်ပြီး ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူကို ကန်တော့တာ ဘာဖြစ်လို့ လက်မခံနိုင်ကြတာပါလိမ့်။ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူကို ကန်တော့တာက ဘေးလူကတိုက်တွန်းလို့မဟုတ်ပါပဲ ကိုယ့်စိတ်ထဲက လိုလိုလားလားနဲ့ လုပ်ရမယ့် အလုပ်ပါ။လက်အုပ်မချီသင့်တဲ့သူကို လက်အုပ်ချီပြီး ကန်တော့တာက ဖားတာမို့ အနှစ်သာရချင်း လုံးဝမတူပါဘူးရှင်။
ကျွန်မသမီးကိုလည်း ကန်တော့သင့်တဲ့သူကို ကန်တော့ခိုင်းပါတယ်။ကျွန်မတို့ ဂျပန်မှာနေစဉ် ကူညီစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတွေအားလုံးကို ကျွန်မတို့ မိသားစု လက်အုပ်ချီမိုး ကန်တော့ခဲ့ကြလို့ သူတို့အနေနဲ့ အထူး အဆန်း ဖြစ်ကြပါတယ်။
စာသင်ပေးတဲ့ဆရာတွေ မဟုတ်ပေမယ့် တစ်နှစ်ကို ထမင်း ၂ နပ်လောက် ဖိတ်ခေါ်ကျွေးပြီး သူတို့တတ်နိုင်သလောက် စောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့သူတွေကလည်း ကျွန်မတို့ ကျေးဇူးရှင်ပါပဲ။ကျွန်မ အမျိုးသားကျောင်းပြီးတဲ့အထိ ကူညီလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့ ဆရာသမားတွေရော၊ကျွန်မတို့ကို တတ်နိုင်သလောက် ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့သူတွေကိုပါ ကျွန်မတို့မိသားစု စိတ်ထဲက လိုလိုလားလား ကန်တော့ခဲ့ကြတာမို့ ကန်တော့ရခြင်းကို လုံးဝသိမ်ငယ်စိတ်မရှိပါပဲ မိမိကိုစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့သူတွေကို ကန်တော့ခွင့်ရလို့ ပီတိဝေကာ မျက်ရည်လည်မိပါသေးတယ်။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လူချင်းမတူနိုင်သလို စိတ်သဘောထားချင်းကွာနိုင်ကြတာမို့ ကျွန်မကတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်မပြောလိုပါဘူးရှင်။
ကိုယ်လှူနိုင်တာက ပြေတီဦး+မအူဝဲတို့အလှူုတွေရဲ့ မြူတစ်မှုန်စာလောက်သာရှိတာမို့ သူများလှူဒါန်းနိုင်တာကို လေးစား အားကျမိပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားတောင်မှ အကဲ့ရဲ့မလွတ်တာမို့ ကိုယ်ကောင်းတာလုပ်နေပေမယ့် ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးမှ ပစ်တင်ဝေဖန်သူများကို ဥပက္ခာပြု လျစ်လျုရှုကာ ကိုပြေတီဦး နဲ့ မအူဝဲတို့သည် မရှိဆင်ရဲသူများကို ဒီထက်မက အထောက်အပံ့ပြု လှူဒါန်းနိုင်ပါစေကြောင်းလည်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။
ဒီကွန်မန့်ရေးလို့ အမုန်းပွားသူတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ကျွန်မလည်း စာရေးသူ ကိုမင်းအုပ်စိုး လိုပါပဲ လူမုန်းမယ်မှန်း သိသိကြီးနဲ့ ရေးလိုက်မိပါတယ်။
အားလုံးပဲ ငါစွဲ အတ္တကို လျှော့ချနိုင်ကာ ဖားခြင်းမဟုတ်သော ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူကို ကျေးဇူးတင်ကာ ရိုသေလေးစားနိုင်ကြပါစေ။
ဒီကွန်မန့်လေး ပြန်ရေးဖြစ်တာက Anonymous တစ်ယောက်က ဒီလိုရေးထားလို့ ပြန်ရေးဖြစ်တာပါ - January 10, 2012 10:42 AM
နန်းဝါ၀ါမောင်၊ချောနဲ့ လလ တို့ ကို တစ်ခုမေးချင်ပါတယ်... ကလေးတွေနေရာမှာ ခင်ဗျားတို့ ကလေးတွေ ဆိုရင်ကော ဘယ်လိုခံစားရမလဲ...
Very humble and obedient, you are come along with thirty eight articles of Mingala Sutta.
ပြောသင့်တဲ့စကားကို အများအကျိုးအတွက် အမုန်းခံ ပြောတဲ့ စေတနာကောင်းနဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ စကားအတွက် သာဓုခေါ်ပါတယ်.......
ဒီဆောင်းပါးကိုရေးတဲ့ မင်းအုပ်စိုး ဘယ်လိုလူဆိုတာသိရင် သာဓု ဆက်ခေါ် နိုင်မယ် ထင်ဘူး....
ကာမေသုကံ ကျူးလွန်ပြီး ရလာတဲ့ ...ရလာနေဆဲ...ပိုက်င်္ဆတွေနဲ့ ..နွမ်းပါးတဲ့ ရုပ်ရှင်လောကသား အချင်းချင်းကို အနိုင်ကျင့် တတ်သူ...အရာရာမှာကျော်တတ်ခွတတ်သူ...
ငယ်သူငယ်ချင်းတွေ အပေါ်မှာတောင် တပြားမှ မကျန်အောင် လိမ်စားတတ်သူ..ဂုဏ်ပုပ်တွေ မှ တလှေကြီး....နီးစပ်ရာ အသိုင်းအ၀ိုင်း က လူတိုင်းသိ ကြပါတယ်....
..သူများ တွေက မလှုတတ်ဘူးဆိုရင်လည်း GE ကတော်ကြီး ။အဆိုတော် ကောင်လေး(နေရဲမာန်နဲ့ Billboard တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့သူယလောလောဆယ်3ယောက်အတွဲခွေ ထွက်ထားသူ)) ရဲ့ အမေ ဆီက
ချစ်ဓမြ တိုက်ထားတာတေါနဲ့ စံပြ အလှုလေး လှုပြပါလား လို့ တိုက်တွန်း ကြည့်ကြပါလား.....
I totally agree yr post(ko min oak soe).you are right.
ဒါရိုက်တာဝိုင်းလို နာမည်ကြီးအောင် ဖြတ်လမ်းက လိုက်တုတာ ထင်ပါရဲ့.... ဟိုက အဆင့်မြင့်မြင့်နဲ့ နာမည်ရတာ... မင်းအုပ်စိုးကတော့.... သူ့အကြောင်းသိတွေမို့... ဟာသတွေ ဖြစ်နေရတယ်...
အကယ်ဒမီနီးပြီဆိုတော့ မုဒိတာတွေ မပွားနိုင်ပဲ.. မရိုးမရွနဲ့ ရေးလိုက်ပုံရတယ်...ဟဟား...
ကိုပြေတီနဲ့မအူဝဲတို့ရေ ဘယ်လိုဘဲလှူလှူ လှူသာလှူပရိတ်သတ်အများစုကအားပေးနေဆဲပါနော်
မင်းအုပ်စိုး ရေးတဲ့အထဲမှာ ပြေတီဦးဟာ သူ့သူငယ်ချင်းပါဆိုတာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ဘာမှလဲ သူတို့ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်ချိုးဖဲ့ထားတာ မပါဘူး- မင်းအုပ်စိုးကို လာဆဲတဲ့ ကွန်မန့်တွေကတော့ အောက်တန်းကျနေတော့ ဆန့်ကျင်ဖက် ဖြစ်နေတယ်--
ဘာတွေ လာပြောနေမှန်းလဲ မသိဘူး.. သူတို့လာရေးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေက ဟုတ်မဟုတ် ဖတ်တဲ့လူတွေလဲ မသိဘူး... GE ကတော်ကြီးတို့၊ billboard တိုက်ပွဲတို့ဆိုတာ ဘာတွေမှန်းတောင် မသိဘူး... ရေးတဲ့လူက အတင်းအဖျင်းတွေကို စိတ်ဝင်စားပုံရတယ်..သူစိတ်ဝင်စားလို့ သိနေပေမယ့် တခြားသူတွေမှာ ဘာမှန်းမသိတာမို့ လာမပြောရင် ပိုကောင်းမယ်
မင်္ဂလသုတ်ကို မဆီမဆိုင် တစ်ယောက်က လိုရာဆွဲမုသားနဲ့ ကိုးကားသွားတာတွေ့လို့ တရားတော်ဖက်က ဖြေရှင်းပါရစေ..
မင်္ဂလသုတ္တန်မှာ ဂါရဝေါစ နိဝါတောစ မင်္ဂလံ ဆိုတာ ရိုသေထိုက်သူကို ရိုသေခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုယ် နှိမ့်ချခြင်းလို့ ဆိုလိုပါတယ်.. ရဟန်းသံဃာမဟုတ် မိဘဆရာမဟုတ်ပါဘဲ ဒီလို အကန်တော့ခံခြင်းဟာ မိမိကိုယ့်ကိုယ် နှိမ့်ချခြင်းဆိုတဲ့ နိဝါတောစမင်္ဂလာ ချို့တဲ့ရာတောင် ရောက်ပါတယ်..ဒါ မင်္ဂလာတရားနဲ့ မညီပါဘူး..
ဒီလိုဝင်ပြောရတာ ပြေတီဦးတို့ကို ထိခိုက်စေချင်လို့ မဟုတ်ဘဲ မင်္ဂလသုတ်ကို လိမ်ညာလှည့်စား အသုံးချသွားတဲ့ ကွန်မန့်တစ်ခုကို မသိသူတွေ အမှန်ထင်သွားရင် တရားတော် သိက္ခာကျဖွယ်ရှိလို့ တရားဓမ္မဖက်က ဖြေရှင်းရတာ ဖြစ်ပါတယ်...
ဖားချင်လို့ပဲဖြစ်စေ.. ကိုယ်လဲ နည်းနည်းလှူ များများကြွားတတ်သူမို့ မလုံမလဲစိတ်နဲ့ ကိုယ့်ထိသလိုနာနေလို့ဖြစ်စေ ..ဘာကြောင့်ပဲဝင်ပြောပြော တရားတော်ကို မမှန်မကန် အလွဲသုံးစားတော့ မလုပ်အပ်ပါဘူး.. ဒါ အပြစ်ရှိပါတယ်
ဘယ်သူတွေလဲ ဆိုတော့ ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်ပါ...ဆိုတဲ့ စာသားကို လက်မခံနိုင်ပါ...
ဒီမှာရွေးချယ်ခံရတဲ့ ကလေးတွေ က အများအလယ်မှာစံပြ ဖြစ်ပါတယ်... ကလေးတီုင်းရနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးလည်းမဟုတ်ပါ...
ဒီကိစ္စကို တနိုင်ငံလုံးဖြန့်ချီတဲ့ မဂ္ဂဇင်းလိုမျီုးနေရာက ရေးလိုက်တာ အပြုသဘောလို့မယူဆမိပါ....ဒီကလေးတွေကို ဒီလိုအတွေးမျိုးတွေးလို့ရတယ်လို့ လမ်းပြသလိုတောင်မြင်မိပါတယ်....
စေတနာတကယ်သန့်ရင် ဒီစာရေးစရာ မလိုပါ...
တကယ်တော့ ပြေတီဦးနဲ့ကျွန်တော်ဟာ အင်မတန်မှ ချစ်ခင်ရင်နှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းအရင်း ကြီးတွေပါပဲ။ သုညအောက် ရောက်နေတဲ့ ဘသတွေကို အတူတူဖြတ်သန်းရင်း လည်ပင်းဖက် ပေါင်းလာကြတဲ့ ညီအစ်ကို သူငယ်ချင်းတွေပါတဲ့....
ဒီလိုဆို ကျ့မတို့ရဲ့ချစ်သူငယ်ချင်းတွေက ကျမတိုရဲ့ အားနည်းချက်တစ်ခုကို ဒိလိုပုံစံနဲ့ အုတ်သြော်သောင်းနင်း ထောက်ပြနေမယ်ဆို စေတနာသန့်တယ်လို့ အပြုသဘောဆောင်ပြီးဝေဖန်တယ်လို့ တွေးနိုင်ကြပါ့မလား... ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်မေးကြည့်ဖို့မေးခွန်းလေးတွေပါ....
မတရားတာ၊ မလျော်ကန်တာတွေ့လို့ မနေနိုင်သူက ကြားဝင်ပြောမိရင် တိုးတိုးကျိတ်ပြောပါလား၊ လူသိအောင် ဘာလို့ ပြောရလဲလို့ ရန်လုပ်ခံရတာ သဘာဝပဲ-မမှန်တာကို လုပ်တုံးကတော့ လူများများသိအောင် မောင်းခတ်လုပ်ပေမယ့် ဒါမကောင်းဘူး ပြောလာရင်တာ့ လူသိအောင် ပြောရလားလို့ စိတ်ဆိုးတတ်တယ်-
လူမသိအောင် ကျိတ်ပြောရင် ဘာမှ အကြောင်းမထူး အရေးမစိုက် နောက်လဲ ဆက်လုပ်မြဲလုပ်နေမှာမို့ လူသိအောင် ပြောရကန့်ကွက်တာ လုပ်ထိုက်ပြောထိုက်ပါတယ်။။။
ကွန်မန့်တွေကိုဖတ်ပြီး လေးစားနေမိခဲ့တဲ့ ဘလော့ဂါတချို့ကို တော်တော်စိတ်ကုန်မိတယ်။ လိုရာဆွဲတွေးတာပဲကိုး။
ဒီလိုတွေးကြည့်ရအောင်ဗျာ=အခု မြန်မာပြည်ကို နိုင်ငံတကာက အကူအညီပေးမယ်ဆိုပြီး လာကြတယ်...လာတဲ့နိုင်ငံကလူတွေကို လေဆိပ်ကဆီးပြီး ဦးချကန်တော့ရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ ဘယ်လို ခံစားရမလဲ
ဘာတွေ လာပြောနေမှန်းလဲ မသိဘူး.. သူတို့လာရေးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေက ဟုတ်မဟုတ် ဖတ်တဲ့လူတွေလဲ မသိဘူး... GE ကတော်ကြီးတို့၊ billboard တိုက်ပွဲတို့ဆိုတာ ဘာတွေမှန်းတောင် မသိဘူး... ရေးတဲ့လူက အတင်းအဖျင်းတွေကို စိတ်ဝင်စားပုံရတယ်..သူစိတ်ဝင်စားလို့ သိနေပေမယ့် တခြားသူတွေမှာ ဘာမှန်းမသိတာမို့ လာမပြောရင် ပိုကောင်းမယ်....
တုံ့ပြန်တဲ့သူကမသိတာလည်းဖြစ်နိုင်သလို...မင်းအုပ်စိုးဆိုတဲ့ကြက်ဖ ကိုယ်တိုင်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်...ဝေဖန်ေ၇းဆာင်းပါးတခုကိုဖတ်တဲ့နေရာမှာရေးသူရော...အရေးခံရသူရဲ့အကြောင်းကိုသိထားမယ်ဆိုရင်..ဘာရည်ရွယ်ချက်ဆါုတာတော်တော်ထင်ရှားပါတယ်...
ဒီလိုဆို ကျ့မတို့ရဲ့ချစ်သူငယ်ချင်းတွေက ကျမတိုရဲ့ အားနည်းချက်တစ်ခုကို ဒိလိုပုံစံနဲ့ အုတ်သြော်သောင်းနင်း ထောက်ပြနေမယ်ဆို စေတနာသန့်တယ်လို့ အပြုသဘောဆောင်ပြီးဝေဖန်တယ်လို့ တွေးနိုင်ကြပါ့မလား... ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်မေးကြည့်ဖို့မေးခွန်းလေးတွေပါ..
Anonymous Anonymous said...ဒါရိုက်တာဝိုင်းလို နာမည်ကြီးအောင် ဖြတ်လမ်းက လိုက်တုတာ ထင်ပါရဲ့.... ဟိုက အဆင့်မြင့်မြင့်နဲ့ နာမည်ရတာ... မင်းအုပ်စိုးကတော့.... သူ့အကြောင်းသိတွေမို့... ဟာသတွေ ဖြစ်နေရတယ်...
Anonymous Canday said...
....ကိုယ် defend လုပ်နေသူရဲ့အကြောင်း ကိုသေချာလေ့လာလိုက်ပါဦး
ခင်ဗျားဝါသနာပါလို့ နာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ လာလာပြောနေတဲ့ သူများမကောင်းကြောင်း ခင်ဗျားကောင်းကြောင်း အတင်းအဖျင်းတွေ စိတ်မ၀င်စားဘူးဗျာ.
မင်းအုပ်စိုးအတင်းအဖျင်းဖြစ်ဖြစ် ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင် အတင်းအဖျင်းဖြစ်ဖြစ် လာပြောနေစရာမလိုဘူး...ခု ဒီမှာ ပြောနေတာက တစ်ယောက် ငါးသောင်းရတဲ့ ကလေးတွေကို ထိုင်ကန်တော့ခိုင်းပြီး ဓာတ်ပုံရိုက် ထိုင်ကန်တော့နေရတဲ့ပုံတွေ ဂျာနယ်တွေထဲမှာ ဖော်ပြတဲ့ကိစ္စ လုပ်သင့်မလုပ်သင့်ကို ပြောနေတာ
အခု အီးယူက ပေးနေတာတွေကို မြန်မာပြည်သူပြည်သူတွေ မရအောင် ကြားကဖြတ်ခိုးမျိုဆို့ပစ်တာ နင်တို့လေ ယူနီဖောင်းဝတ် သူခိုးတွေရဲ့။ အရေးထဲ ဒီသူခိုးက မဆိုင်တာ လာစဉ်းစားခိုင်းရသေးတယ်
လှူဖို့လာတဲ့လူကို ဒီလိုသာ ထိုင်ရှိခိုးရရင် ငါတို့ ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာ ဥပမာပေးတာ သူခိုးငတုံးရဲ့...နင်တို့ကတော့ ရမယ်ဆို တရုတ်ကို ထိုင်ရှခိုးရမလား.ခြေသလုံးဖက်ရမလား အကုန်လုပ်နေတာ..ရှိခိုးရမယ့်ကိစ္စ နင်တို့ဘယ်ကြောက်မလဲ
Zara Apple's said...
မင်းအုပ်စိုးအတင်းအဖျင်းဖြစ်ဖြစ် ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင် အတင်းအဖျင်းဖြစ်ဖြစ် လာပြောနေစရာမလိုဘူး...ခု ဒီမှာ ပြောနေတာက တစ်ယောက် ငါးသောင်းရတဲ့ ကလေးတွေကို ထိုင်ကန်တော့ခိုင်းပြီး ဓာတ်ပုံရိုက် ထိုင်ကန်တော့နေရတဲ့ပုံတွေ ဂျာနယ်တွေထဲမှာ ဖော်ပြတဲ့ကိစ္စ လုပ်သင့်မလုပ်သင့်ကို ပြောနေတာ တဲ့
ဆက်စပ်စဉ်းစားတတ်တဲ့ အတွေးအမြင်မရှိတာ သနားစရာ....
ကိုယ်တိုင်လဲ ဒီလိုကြုံခဲ့ရတဲ့.ခံစားခဲ့ရတဲ့ ဘ၀တူချင်းမို့လို့..
ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာ ကြုံဖူးမှ ခါးမှန်းပိုသိတာပါ
တော်လိုက်တဲ့ မင်းအုပ်စိုး.... :D
ဒီဆောင်းပါးဟာ မင်းအုပ်စိုးက ကျောင်းသားတွေဘက်က တကယ်ကိုစာနာလို့ ရေးတာဆိုရင် ဘာမှ ပြောစရာမလိုအောင် သိပ်ကောင်းမွန်တယ်ဆိုတာ နားလည်ပေးနိုင်ပေမဲ့ ရန်ကုန် ရုပ်ရှင်အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ကြားရတဲ့ သတင်းတစ်ခုက မကြာခင်ကျင်းပမဲ့ အကယ်ဒမီပွဲ အတွက် ပြေတီဦးက ဒီနှစ်ရဖို့တစ်ပြေးနေပါတယ်။ အဲဒါကို မင်းအုပ်စိုးက ရည်ရွယ်ချက်ရှိ်ရှိ ပြေတီဦး နာမည်ပျက်အောင် ဒီဆောင်းပါးကို ရေးတာဖြစ်ကြောင်း ခိုင်ခိုင်လုံလုံ ပြောဆိုနေကြကြောင်းပါခင်ဗျား။ မှန်မမှန် စဉ်းစားကြည့်ဖို့ ထောက်ပြရမယ်ဆိုရင် ဒီစာကို စေတနာနဲ့ ရေးတာဖြစ်ရင် ဒီဘလော့မှာ တင်ထားတဲ့ ပိုစ့်အောက်မှာ ရေးကြတဲ့သူတွေနဲ့ ဝေဖန်နေတဲ့သူတွေကို မင်းအုပ်စိုးက ဘာဖြစ်လို့ တစ်ခွန်းမကျန် ပြန်ပြောနေပါသလဲ။ ဒီဘလော့ကို သူ ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ စောင့်ကြည့်နေတာပါလဲ။ အမည်မဖော်ဘဲ မင်းအုပ်စိုးဘက်က ကာကွယ်နေတဲ့ စာတွေဟာ မင်းအုပ်စိုးကိုယ်တိုင် ရေးတာ မဟုတ်ဘူးလို့ရော ဘယ်သူက သက်သေပြနိုင်ပါလဲ။ ဒီဘလော့ပေါ်မှာ တင်တာကို သေချာစောင့်ကြည့်ပြီးမှ မှတ်ချက်တွေကို ပြန်ချေပနေတဲ့ မင်းအုပ်စိုးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို စာဖတ်သူများ အနည်းအကျဉ်းဖြစ်ဖြစ် ထည့်စဉ်းစား မသင့်ဘူးလား။ သူတကယ့်ကို စေတနာနဲ့ ရေးတာဆိုရင် ဘယ်သူ ဘာပြောပြော သူစောင့်ကြည့်နေလို့ လိုအပ်ပါရဲ့လား။ လူတကာသိအောင် ဖွဖို့ရော လိုအပ်ပါရဲ့လား ။ ဒီဘလော့ပေါ်မှာတင်တာ မင်းအုပ်စိုးက ဘယ်လိုသိပါသလဲ။ ပြီးတော့ ဘာဖြစ်လို့ စောင့်ကြည့်နေပါသလဲ။။
ဒုက္ခပဲ။ ဘယ်က မင်းအုပ်စိုးမှ မဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံခြားက..ဟဲ့။ မင်းအုပ်စိုးဖြစ်ဖို့ဝေးလို့ မြန်မာပြည်မှာတောင် မနေရဘူး။။ ပြန်ချင်တာပိုက်ပိုက်မရှိလို့မပြန်ရတဲ့လူ
ကိုအဖြူလေး ပြောတဲ့ ““““အခု ငွေကို ဦးကပ်စေးကာတွန်းထဲကလို
ပါပဲ..။”””””” ဆိုတာလေး ကို လုံးဝ (လုံးဝ) ထောက်ခံပါတယ်။
Positive Thinking ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ခုပိုစ့်က Peronal တွေ လိုက်ဝေဖန်တာထက် ဘယ်လို လုပ်လိုက်ရင် ပိုသင့်တော်မယ် ဆိုတာ ထောက်ပြဖို့အတွက်ပဲ လို့ထင်ပါတယ်။ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ အနုပညာရှင် မှန်ရင် အနုပညာသည်ချင်း ဖြစ်စေ၊ ပရိတ်ဿတ်က ဖြစ်စေ ထောက်ပြ ပြင်ဆင်ပေးတာကို လက်ခံနိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။
အင်မတန်မွန်မြတ်တဲ့ အလှူဒါနတွေကို (စိတ်မငြိုငြင်သွားပဲ) ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေ။
ကျားကြီး ပြောတဲ့အတိုင်းဆို ဖောင်ဒေးရှင်းတွေ ထောင်တာနဲ့ အကယ်ဒမီရတာနဲ့က ဆိုင်နေလို့လား။ ပြောလိုက်မှ ရှုပ်သွားတယ်။ ဒီလိုရည်ရွယ်ပြီးထောင်တာတော့ မဟုတ်လောက်ဘူးထင်တယ်။
အကယ်ဒမီက သရုပ်ဆောင်တာကိုကြည့်ပြီးပေးမှာပဲ။ မင်းအုပ်စိုးပြောတာက ပြေတီဦးသရုပ်ဆောင်တာ ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ် ပြောတာမှမဟုတ်တာ။အကယ်ဒမီနဲ့ ဘာဆိုင်လဲ
ကလေးတွေ ရန်ဖြစ်နေသလိုပဲ ရီရတယ်
ကျွန်တော့်ရဲ့ သန္ဓေဗီဇကိုက မကောင်းတဲ့အတွက် ဘယ်လို မှ ထိန်းမရတော့ဘဲ ဒီစာကို ရေးဖြစ်သွားတာပါ။
ဘာမှမပြောနဲ့၊ ပါးစပ်ပိတ်ငုံ့ခံ ဆိုတဲ့ အကျင့်ဆိုးကြီးထဲမှာ ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ် ပြန်မနှစ်ကြပါနဲ့ဗျာ။ အမြင်မတော်လို့ မနေနိုင်တဲ့၁ယောက်ယောက်က ပြောမိရင် အသွင်တူတွေက မခံနိုင်ဖြစ်ပြီး ကက်ကက်လန် ၀ိုင်းရန်ထောင်တာ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ အကျိုးသင့်အကြောင့်သင့် ပြောတဲ့လူကို နောက်ဆက်မပြောရဲအောင် စွာတဲ့နည်း၊ ရန်ထောင်တဲ့နည်း၊ အတင်းပြောတဲ့နည်းတွေနဲ့ ပြည့်တန်ဆာဆန်ဆန် ရန်မတွေ့ပါနဲ့လို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
ကိုယ်အမြဲဖတ်နေကျဘလော.ဂါများ ( မယ်ကိုး၊ kiki ၊ မဒမ်ကိုး ၊ ဂျက်စမိုင်း ၊ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ)
စိတ်ပျက်မိပါတယ် လူရိုင်းတွေ နောက်ဘယ်တော.မှ
ကိုယ်တိုင်ကသာဖွတ် ၊သူများကိုကျတော.အကွက်တွေ.တာနဲ. ဟောင်လိုက်ကြတာ
ဒါတော့ မဆိုင်လဲ ၀င်ပြောရတော့မယ်။
အပေါ်က နာမည်တပ် အဆဲခံရတဲ့ ဘလော့ဂါတွေတော့ မသိဘူး။ ကျုပ်လဲ နိုင်ငံခြားနေတာပဲ။ မြန်မာစိတ်ပျောက်ပြီး ဘာဘ၀င်မှ မမြင့်ဘူး။ ဒုက္ခသုက္ခခံ၊ အောက်ကျခံကုန်းရုန်းပြီး ရလာတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ မိဘလုပ်ကျွေးတယ်။ မိဘလှူခိုင်းတဲ့နေရာတွေ အကုန်လှူတယ်။ ဒါကို မြန်မာပြည်ထဲကနေ ဖောင်ဒေးရှင်းလုပ်စားတဲ့ ငတိုတွေက ဖြတ်ခိုးတာလဲ ကိုယ်တွေ့ခံခဲ့ရတယ်။ ကိုယ့်ချွေးနဲစာ ခိုးတာ မခံနိုင်လို့ပြောမိတော့ ပြည်ပနေပြီး ပြောတယ်, သူတို့က ပြည်တွင်းမှာ ပရဟိတ ဘယ်လိုလုပ်နေရတာဆိုပြီး ကွယ်ရာကနေ အတင်းပြောတာလဲ ခံရတယ်။ ပြည်တွင်းက မရှိဆင်းရဲသားတွေအတွက် အလှူကို ကြားကဖြတ်ခိုးတာ ပြည်တွင်းက အဲဒီလိုသူခိုးတွေပဲ။ ကျုပ်တို့မဟုတ်ဘူး
လက်ဝါးနဲ့ လက်ဖမိုး လိုပါဘဲ။ ရှာကြံအထင်သေးတက်သော အချိူ့ လူများအတွက်စာရေးသူရေးသားချက်ကသတိပြုစရာပါ။
Bravo Min Oak Soe !
we also don't have such practice since beginning.
ကိုပြေတီဦးနှင့် မအူဝဲ.. ဘယ်သူ ဘယ်အရာကိုမှ ဂရုမစိုက်ပဲ ပြေတီဦးဖောင်ဒေးရှင်း ထာဝရတည်တံ့နိုင်အောင် ကြိုးစားသွားပေးစေချင်ပါတယ်။
လူသားအားလုံးလည်း မုဒိတာ ပွားနိုင်ကြပါစေ။
Dedicated to U Agga,
မင်္ဂလသုတ္တန်မှာ ဂါရဝေါစ နိဝါတောစ မင်္ဂလံ ဆိုတာ ရိုသေထိုက်သူကို ရိုသေခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုယ် နှိမ့်ချခြင်းလို့ ဆိုလိုပါတယ်.
Students are entitled with this article, do not mean to donors.
Please, kindly think both sides.
ကျနော့်ကို လူရိုင်းဟု သတ်မှတ်သူရေ ..
ကျနော်တို့က ရိုင်းကောင်း ရိုင်းပါလိမ့်မယ်၊ ကျနော်တို့က လူတွေကို ခေတ်မမှီတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေ ဗန်းပြပြီး ရှစ်ခိုးတဲ့ စကားလုံးနဲ့ ရူးအောင်တော့ မလုပ်ပါဘူးဗျာ ...း)
မြန်မာပြည်က မင်းသားမင်းသမီးများ မနာလိုစရာလို. မထင်ပေါင်.. လူဆိုတာ အယူအဆအမျိုးမျိုးရှိကြတာပဲ ကိုယ်.ရှုထောင်.နဲ.ကိုယ်ပေါ. မဝေဖန်ရဘူးဆိုရင် အားလုံးကို အမှန် ငါဟုတ်တယ် ငါမှန်တယ် ထင်နေကြမှာပေါ. ကိုယ်.ရှူထောင်.နဲ.ကိုယ်ဝင်ဆွေးနွေးကြတာပါ. စာရေးသူက ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် နောက်ခံအကြောင်းက ဘာဖြစ်ဖြစ် ဒီကိစ္စကို ရင်ခံနေသူတွေနဲ.ဆုံမိကြတော. ထောက်ခံသူ ကန်.ကွက်သူ အစုံပေါ. ကိုယ်ဆန္ဒရှိလို.ဘယ်သူ.ကို ရှိခိုးခိုး အဲဒါကိုယ်.ကိစ္စလေ အခုဟာက ကိုယ်ကအပေါ်ကြီးမှာ ထိုင်ပြီး ကလေးတွေက အောက်က . တပြေးတည်းလည်းမဟုတ် . အဲဒါက ကြည်.ရဆိုးနေတာပါ.
ကလေးတွေကို ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးပေးလို့ ချီးမွမ်းနေ၇ာကနေ ထိုင်ရှိခိုးခိုင်းတာတွေ့တော့ ဒါကြီးတော့ မလုပ်သင့်ဘူးလို့ သားသမီးချင်း စာနာစိတ်တွေနဲ့ ၀ိုင်းပြောကြတာပဲဗျာ။ မနာလို၇အောင် ပြောတဲ့သူတွေက အ၇ှိခိုးခံချင်တဲ့ေ၇ာဂါသည်တွေမှမဟုတ်တာ။
၇ူးတာကို မနာလိုစ၇ာ ဘာမှမ၇ှိပါဘူးဗျာ.xကိုယ်တောင် အဲဒီလို ၇ူးရရမှာကြောက်သေး
ကျနော်က ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတဲ့ ရုပ်ရှင်အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲကပါ ။ ကျနော့် အနေနဲ့ ကိုအုပ်စိုး အကြောင်းကို ကွန်းမက်ဝင်းရေးရန် မသင့်တော်လို့ ပြန်ဖျက်ခဲ့ပါတယ် ။ ကာယကံရှင် နှစ်ဦး စလုံးဖြစ်တဲ့ ကိုအုပ်စိုးနဲ့ရော ကိုပြေတီနဲ့ရော ကျနော်နဲ့ ခင်မင်ပါတယ် ။ ၂၀၀၇လောက်တုန်းက မြ၀တီနယ်စပ် ရွေကုက္ကိုလ် DKBA တပ်မ ၉၉၉ မှာ တစ်လတိတိ ငတ်ငတ်ပြတ်ပြတ် အတူနေခဲ့ဘူးလို့ ကိုပြေတီ့စိတ်ဓါတ်ကို ကျနော်ကောင်းကောင်း နားလည်ပါတယ် ။ ဒီနေ့ ကျနော် ကိုဝင်းကြည်နဲ့ စကားပြောဖြစ်ပါတယ် ။ ကိုဝင်းကြည်ဆိုတာ စိန်ဠေးဗီဒီယို ပိုင်ရှင် ပြေတီဦးဖောင်ဒေးရှင်းမှ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးပါ ။ ကိုပြေတီနဲ့လည်း စကားပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ သူတို့အနေနဲ့ ပြန်လည် ဖြေရှင်းချင်စိတ်မရှိကြပါဘူး ။ တော်တော်လေးလည်း စိတ်ညစ်နေကြပါတယ် ။ ကျနော်က ကြားနေသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ အမှန်တရား ပေါ်ပေါက်စေချင်သူပါ ။ ကိုအုပ်စိုးရေးထားတဲ့ အကြောင်းတွေက ဖြစ်စဉ်ရဲ့အကြောင်းကို အလုံးစုံမသိပဲ ရေးထားသလိုဖြစ်နေပါတယ် ။ ဖြစ်စဉ်က ဒီလိုပါ ။ (((((( အစီအစဉ် ပြီးဆုံးချိန်မှာ ကိုဝင်းကြည်က ကလေးတွေကို ဘုရားလိုက်ပို့ဖို့နဲ့ ဂိမ်းစီးတီးမှာ ကစားစေဖို့ အတွက် ငွေကိုင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးဖို့ လူတစ်ယောက်ထည့်ပေးလိုက်ပြီး နှုတ်ဆက်စကား ပြောဆိုကြပါတယ် ။ ဒီအချိန်မှာ အရင်နှစ်ကလည်း သူသဘောနဲ့သူ ကန်တော့ခဲ့တဲ့ ကလေးတစ်ဦးဟာ ကိုပြေတီတို့ကို ၀င်ကန်တော့ပါတယ် ။ ဒါနဲ့ပဲ ကျန်ကလေးများကလည်း ၀ိုင်းပြီးကန်တော့ ကျပါတယ် ။ အဲ့လိုကန်တော့နေချိန်မှာ ကိုဝင်းကြည်က ကိုပြေတီကို ကလေးတွေက လူကြီးမိဘကို ရှိခိုးဦးချရင် မုန်ဖိုးပေးရတယ်လို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ။ ကိုပြေတီကလည်း ပိုက်ဆံပါမလာကြောင်းပြောရ်ျ ကိုဝင်းကြည်မှ ၅ထောင်တန်တစ်အုပ် ထုတ်ပေးပြီး ကိုပြေတီက တစ်ဦးကို ၅ ထောင် မုန့်ဖိုးပေးခဲ့ပါတယ် )))) ။ ဒါကို မီဒီယာသမားကဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး ဂျာနယ်ပေါ်ရောက်လာတာပါ ။ လှုသူနဲ့ အလှုခံသူကြားမှာ အမှန်တကယ်ရိုးရိုးသားသားနဲ့ ရှိခိုးကန်တော့ခဲ့ကြတဲ့ မြန်မာဆန်ဆန် ဓလေ့စရိုက်မျိုးလေ့မို ၀မ်းသာပီတတိလည်း ဖြစ်မိပါတယ် ။ ကိုပြေတီတို့ ကိုဝင်းကြည်တို့ အနေနဲ့ စေတနာမှန် သဘောထားမှန်နဲ့ ငွေကုန်ကြေးကျခံကာ အလုပ်မအားလပ်သည့်ကြားမှ ပြုလုပ်နေသော ကောင်းမှု့ကုသိုလ်တစ်ခုကို ကိုပြေတီ့ ပရိတ်သတ်များ အထင်မလွဲကြစေရန် အမုန်းခံပြီး ၀င်ပြောမိသွားတာပါ ။
မင်းအုပ်စိုးပြောတာတွေကို ထောက်ခံပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် မိဘမဲ့ကျောင်းမှာ သူငယ်တန်းကစပြီး ထောက်ပံ့ပေးလိုက်ပါ။ ဘွဲ့ရတဲ့အချိန်ထိပေါ့။ ဒါဆိုရင် ထိုင်ကန်တော့လို့ရတယ်။ ပြေတီဦးနှင့်သူ့ဇနီးကို ပြုစုလို့ရတယ်။ ခြေဆုပ်လက်နယ်လုပ်လို့ရတယ်။ ဂျာနယ်၊ မဂဇင်းနှင့် TV တွေမှာ ကြော်ငြာထည့်လို့ရတယ်။ ဂုဏ်လိုချင်ရင် ဂုဏ်ဖော်လို့ရတယ်။ သိုသိုသိပ်သိပ်လုပ်လို့လည်းရတာပေါ့။ လှူနိုင်လေပိုကောင်းလေပေါ့။ လှူကြဖို့လည်း တိုက်တွန်းပါတယ်။ အားလုံးကတော့ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကို သွားနေကြတဲ့ ဘဝတွေပါဗျာ။ ကျေးဇူးပါ
To Ko kyaw swar, i'm so much glad to hear about the truth. From the the start, my comments never intended to offend the donors . I has just been over protecting the kids. If the kids are so obident, it's suchagreat :)
အပေါ်ကကွန်မန့်ကိုရေးသားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အားလုံးကိုသိစေချင်တာက ထိုင်ရှိခိုးတဲ့ကိစ္စဟာ လူအများရှေ့မှာ အခမ်းအနားအစီအစဉ်တရပ်အနေနဲ့ လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်သလို ဘယ်သူကမှလည်းစေခိုင်းခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိစေချင်တာပါပဲ။ အဲဒီ့အခမ်းအနားကို ကိုယ်တိုင်တက်ခဲ့တဲ့အတွက် ကလေးတွေထိုင်ရှိခိုးတာ ကျွန်မမမြင်ခဲ့ရပါဘူး။ နှုတ်ဆက်ခါနီး ခွဲခွာခါနီးကန်တော့ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်(ကျွန်မ အခမ်းအနားပြီးဆုံးချိန်ပြန်သွားပြီဖြစ်ရ်ျ ကန်တော့သည်ကိုမမြင်ပါ)။ မိမိတို့ဆန္ဒအလျောက်ကန်တော့ခြင်းကို နှစ်ဖက်သောကာယကံရှင်များဘက်မှနားလည်ခံစားပေးနိုင်ပါစေ လို့ဆုတောင်းပါတယ်။
RE- အသွင်တူတွေက မခံနိုင်ဖြစ်ပြီး မပြောရဲအောင် စွာတဲ့နည်း၊ ရန်ထောင်တဲ့နည်း၊ အတင်းပြောတဲ့နည်းတွေ, ပြည့်တန်ဆာဆန်ဆန် ရန်မတွေ့ပါနဲ...ဆိုသောစကားများကို ဖတ်ပြီး ကောက်ချက် ချချင်းဖြစ်ပါသည်.....
ပြေတီဦး ပညာသင်ဆုဆိုပြီး နာမည်ပြောင်းလိုက် ပြီးတာပဲဗျာ။ ဘယ်သူမှ မနစ်နာတော့ဘူးပေါ့။ ပေးတဲ့လူ၊ ယူတဲ့လူ ၂ဘက်စလုံး ဂုဏ်ရှိတယ်လေ။ မဟုတ်ဘူးလား။ ငဲငဲငဲ။
Kyaw Swar တစ်လကို ငွေငါးသောင်း ထောက်ပံ့ပေးမည့်အပေါ် အလှုခံသူများ ဘက်က ယုံကြည်မှု့တစ်စုံတရာ ရှိစေရန် တရားဝင် လူသိရှင်ကြားပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းပါ ။ ပါဝင်လှုဒါဏ်သူများလည်း ယုံကြည်မှု့ရှိစေရန် ကိုပြေတီ့အနေနဲ့ ခမ်းခမ်းနားနားကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ ဖောင်ဒေးရှင်းမှာ ပါဝင်လှုဒါဏ်းထားတဲ့ပုဂိုလ်တွေဟာ နိုင်ငံရပ်ခြားကရော ပြည်းတွင်ကရော များစွာရှိပါတယ် ။ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းကိုလည်း ပြေတီဦးဖောင်ဒေးရှင်း wed site မှာ တရားဝင်ကြေငြာထားပါတယ် ။
Like all discussions from both sides. We should also think of how these receivers feel too. In our B.Ed. Education Foundation, we have one discipline, i.e. , those who got our scholarship should serve in our country at least for three years, and after they finish their Education, they should work together for this foundation, i. e. to join our foundation to help all these B.Ed. students who need our help. And we call this help just "scholarship" not "stipend". In this way , those who got the scholarship won't feel inferior , 'cause they will have their chance to help others one day. Pyay Ti Oo and his colleagues also donatealot to our foundation too. Thanks so much!
မနေနိုင်လို့ရေး သည်တဲ့……… ကောင်းပါတယ်။ တွေးပုံလေးတွေ။ အားနဲနေတဲ့သူ ဘက်ကတွေးပေးတာ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ချစ်စရာစရိုက်ပေဘဲလား..ဒါပေမယ့်…ဆရာ ထဲ့ပြီးစဉ်းစားရမှာ တခုများကျန်သွားလား… ဘာသာရေးလေးနဲ့ ပါယှဉ်ပြီး စဉ်းစားမယ် ဆိုရင်…ဆရာဒီလို ရေးနိုင်ပါအုံးမလား….
ကျွန်မ က စာရေးဆရာ မဟုတ်ပါ။ ပြေတီဦးတို့နဲ့လဲ ဘာမှ မပတ်သတ်။ သူတို့ရဲ့ ပရိတ်သတ်လဲ မဟုတ်။ ဒါဆို အခုဘက်သူဘက်က ရေးမှာလဲ။ ကလေးတွေဘက်ကပါ။ ပြီးတော့ ဗုဒ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓဘာသာပီပီ ဘာသာရေးအယူနဲ့ ယှဉ်တွဲပြီးစဉ်းစားတာပါ။ ဆရာ ပြောသလို ပြေတီဦး တို့ နာမည် လိုချင်လို့ ၊ ဂုဏ်ယူချင်လို့ လုပ်တာ မှန်ချင်လဲမှန်မှာပါ။ မပြောတတ်။ ဒါကတော့ သူတို့စိတ် သူတို့ နဲ့ ဘုရား အသိဆုံး။ မကောင်းတဲ့ ဘက်က တွေးမယ်ဆိုရင်တော့ .. အလကား သက်သက် နာမည်ကြီးချင်လို့ လုပ်တာလို့ တွေးလို့ရပါတယ်။ ကောင်းတဲ့ဘက်က တွေးမယ်ဆိုရင်တော့လည်း ပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့သူ တွေ သူထက် ငါ နာမည်ကြီးအောင် လုပ်နေတဲ့ခေတ်မှာ ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးလုပ်ပြီး နာမည်ကြီးအောင် လုပ်တယ်ဆိုရင်ဘဲ ကလေးအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်သွားတဲ့ အတွက် ၀မ်းသာစရာပါ။ ထားပါ။ ဒါကအဓိကမဟုတ်။ အဓိက က.. ကိစ္စက ဆရာပြောသလောက်လဲ serious ဖြစ်မနေပါဘူး။ ကျွန်မ ကိုယ် ကျွန်မ ကလေးတွေဘက်က ၀င်ပြီးတွေးပါမယ်။
ကန်တော့တယ်…ဆိုတာ.. မြန်မာလူမျိုး ဗုဒ္ဓ္ဓ္ဓ္ဓဘာသာတွေဟာ ကိုယ့်ထက်ကြီးတဲ့ လူကြီးသူမတွေကိုတောင် ကန်တော့ရသေးတာဘဲ မဟုတ်လား ဆရာရယ်။ အခုကိုယ့်ပညာရေးကို ထောက်ပံ့ ပေးတဲ့သူ။ ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်နေပြီ။ အဲဒါကို ရှိခိုးတာ ရှက်စရာလား။ သူများပေးကမ်းတာကို ရိုးသားစွာနဲ့ လက်ခံတာ ရှက်စရာလား။
ကဲ.. ထောက်ပံ့ကြေး ရထားတဲ့ ညီမလေးတို့ မောင်လေးတို့ရေ….အဲလိုရှက်စရာလို့ တွေးနေမယ် ဆိုရင် အဲဒီအတွေးတွေကို ချက်ခြင်း ဖျက်ပြစ်လိုက်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ..ဘာသာရေးနဲ့ ယှဉ်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ရအောင်..။ ညီမလေးတို့ မောင်လေးတို့ဟာ ပြေတီဦးရဲ့ ထောက်ပံ့ကြေး ယူထားပြီးပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးရှင် ဖြစ်နေပြီနော်။ “တစ်လုပ်စားဖူး သူ့ကျေးဇူး” တဲ့။ ပြေတီဦး ရဲ့စိတ်ထဲမှာ ဂုဏ်ယူချင်လို့ ဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒါသူ့အပိုင်း။ သူ့စေတနာ သူ့ကို အကျိုးပေးမှာနော်။ ညီမလေးတို့ မောင်လေးတို့ကတော့ စိတ်နဲ့တောင် မပြစ်မှားလိုက်ပါနဲ့နော်။ ကျေးဇူးရှင်ကို ဆော်ကားသလို ဖြစ်ပြီး ညီမလေးတို့ဘဲ အပြစ်ရလိမ့်မယ်။
နောက်တစ်ခုက .. သူများထောက်ပံ့ကြေးယူတာ ရှက်စရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ညီမလေးတို့ မောင်လေးတို့ ဟာသူများပိုက်ဆံ ကိုခိုးနေတာလား? လုယူနေတာလား? မတရားလိမ်လည် ယူနေတာလား? မဟုတ်ဘူးနော်။ ရိုးသားစွာနဲ့ သူများ သဒ္ဒါလို့ ထောက်ပံ့တဲ့ ထောက်ပံ့ကြေးကို ယူတာ။ ရိုးသားမှုက ရှက်စရာ မဟုတ်ဘူးနော်။
ကိုယ့်ကို နှိမ့်ချတဲ့ မျက်လုံးနဲ့ ကြည့်လာတဲ့သူရှိရင်လဲ “ငါတို့ ရိုးသားစွာနဲ့ ထောက်ပံ့ကြေးယူတာ ရှက်စရာ မဟုတ်ဘူး ဟေ့… “ လို့ ရင်ကော့ ခေါင်းမော့ပြီး လျှောက်ပြလိုက်စမ်းပါ၊ “ကုသိုလ်ထူးလို့ ဒီလို ထောက်ပံ့မှုရတာ ၊ နက်နဲတဲ့ ပညာရပ်တွေကို ဆက်လက်လေ့လာခွင့်ရတာ” လို့ ဂုဏ်ယူလိုက်စမ်းပါ။ အဲဒီစိတ်နဲ့ မိမိတို့ရဲ့ အနာဂတ်လေးကို လှပအောင် ခြယ်မှုန်းလိုက်စမ်းပါ.. လို့။ ဘာမဟုတ်တဲ့ ဟာလေးကြောင့် ညီမလေး ၊ မောင်လေးတို့ရဲ့ ဖြူစင်တဲ့ ၊ လှပတဲ့ စိတ်လေးကို အရောင်မဆိုး လိုက်ပါနဲ့။
ထိုကိစ္စတွင် ပါဝင်သော ညီမလေး ၊ မောင်လေးများ ဒီစာကို ဖတ်ပြီး စိတ်ထားလေးတွေ ထားတတ်ပါစေ။
Like all discussions from both sides. We should also think of how these receivers feel too. In our B.Ed. Education Foundation, we have one discipline, i.e. , those who got our scholarship should serve in our country at least for three years, and after they finish their Education, they should work together for this foundation, i. e. to join our foundation to help all these B.Ed. students who need our help. And we call this help just "scholarship" not "stipend". In this way , those who got the scholarship won't feel inferior , 'cause they will have their chance to help others one day. Pyay Ti Oo and his colleagues also donatealot to our foundation too. Thanks so much
To Ko Kyaw Swar
နည်းလွန်းပြီး ကိုမင်းအုပ်စိုးကို ထောက်ခံတယ်လေးစားတယ်ဆိုတဲ.
အပေါ်က anonymous ရေ။ ခင်ဗျားပြောတာ ရိုင်းလွန်းတယ်ဗျာ။ ဆောင်းပါးရှင်ကလဲ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ခင်ဗျားလိုမပြော၊ ကျွန်တော်တို့လဲ ထောက်ခံပေမယ့် ခင်ဗျားလို ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ၀င်မဆွေးနွေးပါဘူး။ မရွှေစင်.ဒီလူ မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းလာပြောတာတော့ ဖျက်လိုက်သင့်တယ် မြင်ပါတယ်။
တို့ကတော့ foundation လည်းမလုပ်ဖူး...လှုလည်းမလှုဘူး..
နာမည်ကြီးပြီး ချီးကျုးခံရအောင် သူများအလှုတွေ လိုက်ကြည့်ပြီး ဂျာနယ်မှာ ထည့်မယ်...
အင်မတန်မှ ချစ်ခင်ရင်နှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းအရင်း ကြီးတွေလို့ ရေးလိုက်ရင်ပြီးတာပဲ....
မနာလိုလိ်ု့ မရှုစိမ့်လို့ မုဒိတာမပွားနိုင်လို့ ဘယ်သူမှ မသတ်မှတ်ဘူး..
တော်လိုက်တဲ့ ကြည်ညိုစရာ မင်းအုပ်စိုး..
မင်းအုပ်စိုးလို လုပ်ကြစို. :P
အိအိထွေးပြောတဲ့ စိတ်နဲ့တောင် မပြစ်မှားနဲ့ ဆိုတာကြီးက အဖားလွန်စကားကြီး ဖြစ်နေပြီ။ ဒီလိုကြီးတော့ ကလေးတွေခေါင်းထဲ မဟုတ်တာ ရိုက်မသွင်းလိုက်ပါနဲ့။
ဒီကိစ္စမှာ ကိုပြေတီဦးတို့နဲ့ မဆိုင်ဘဲ စဉ်းစားကြည့်စေချင်တယ်။ သူတို့ကိစ္စကို ခဏလေး ဖယ်ထုတ်ထားလိုက်ရအောင်။ ရှိခိုးတာက မရည်ရွယ်ဘဲ၊ ကြိုမစီစဉ်ထားဘဲ ကလေးတစ်ယောက်က ကန်တော့ရာကနေ စ,ဖြစ်သွားတာပါဆိုရင် ဒါ နားလည်ပေးလို့ရတဲ့ ကိစ္စပါ။ ကန်တော့ခံသူတွေဘက်က စီစဉ်ထားတာ မဟုတ်ရင် ဒါအပြစ်တင်စရာ မရှိပါဘူး။ သူ့သဘောနဲ့သူ လာကန်တော့ရင်တော့ လက်ခံရမှာပဲလေ။
ဒီပို့စ်ဖတ်ပြီး ရှိခိုးတဲ့ကိစ္စကို လာထောက်ခံနေတဲ့သူတွေ၊ဝေဖန်ရကောင်းလားလို့ ရန်လုပ်နေသူတွေက ကိုပြေတီဦးတို့ကို အားပေးချင်တာထက် သူတို့ကိုက ဖားလဲဖားချင်သူ၊ အဖားလဲခံချင်လွန်းသူတွေ ဖြစ်နေတာလို့ မြင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကိုပြေတီဦးတို့နဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘဲ အကန်တော့ခံချင်လွန်းတဲ့ ဆိုက်ကိုသမားတွေကိုပဲ ရည်ရွယ်ပြောချင်တယ်။
ကျောင်းပြီးလို့ ဆ၇ာကို လာကန်တော့တဲ့အချိန်မှာ လည်ဟိုက်အကျီင်္၊ စကပ်တိုနဲ့ ဆရာ့ဇနီးက ကန်တော့ခံနေတဲ့ သူ့ယောက်ျားဘေး သူကပါလာထိုင်ပြီး အတင်းကန်တော့ခံလို့ ကျောင်းသားတွေ ဆရာ့လဲအားနာ၊ ဒေါသလဲထွက် ဖြစ်ရတာတွေ ကြုံဖူးရင် ကြုံဖူးကြမှာပါ--
သီတင်းကျွတ်မှာ အကန်တော့ခံ အရိုသေခံချင်လွန်းတဲ့ အလုပ်ရှင်ကတော် ဆပ်စလူးစိန်က ၀န်ထမ်းတွေထဲက ၁ယောက်၂ယောက်ကို ဒလန်လုပ်ပြီး သူ့ကိုကန်တော့ဖို့ ၀န်ထမ်းအားလုံးကို လိုက်ဆွယ်ခိုင်းရင် မျက်စိထဲ ဘယ်လိုမှ လေးစားချင်စရာမရှိတဲ့ ဆပ်စလူးစိန်ကို ကန်တော့ရမှာမို့လို့ ၀န်ထမ်းတွေစိတ်ညစ်၊ ဒါ သူ့ဟာသူစ,တဲ့ အကြံမှန်းလဲသိတော့ စိတ်လဲလေရတာတွေ ကြားဖူးရင် ကြားဖူးပါလိမ့်မယ်။.
ကိုယ့်မှာ သီလသိက္ခာမရှိဘဲ အကန်တော့ခံချင်တာ၊ ကိုယ့်ကို သူများတွေက လက်အုပ်ချီတာ ခံချင်တယ်ဆိုတာ စိတ်မပြည့်ဝသူတွေရဲ့ ဆိုက်ကိုပါ။ (မရည်ရွယ်ဘဲ ဖြစ်သွားတဲ့ ကိုပြေတီဦးတို့ကို လုံးဝ မဆိုလိုဘူးနော်။ အခုပြောနေတာ သူတို့ကိစ္စနဲ့လဲ မဆိုင်ဘူး)
အကန်တော့ခံချင်လွန်းတဲ့၊ လက်အုပ်ချီခံချင်လွန်းတဲ့ စိတ်ရောဂါသည်တွေကြောင့် တစ်တိုင်းပြည်လုံးလဲ စိတ်ညစ်နေရပါပြီ။
ကျေးဇူးဆိုတာက အလုပ်ရှင်က သူက လခပေးလို့ ကျေးဇူးရှင်လို့ မြင်မယ်ဆိုရင် ၀န်ထမ်းတွေကလဲ ငါတို့က သူစီးပွားတက်အောင် လုပ်ပေးနေရတာ၊ သူ့ကျေးဇူးရှင်လို့ ပြန်ပြောလို့ရတာပဲ။။ အကန်တော့ခံချင်လွန်းတဲ့ အလုပ်ရှင်ကတော်တွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေရတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေကိုယ်စား ပြောတာပါ.
အခုကလေးတွေက အလုပ်ရှင်နဲ. ၀န်ထမ်းလည်းမဟုတ်
ဒီနေရာကနေ ဖားရင်သူတို့သိမှာ မို့လို့လား..
.မေတ္တာနဲ့ အကြိုးသင့် အကြောင်းသင့် ၀င်ရှင်းသူကို ဒီ လိုဝေဖန်ဖို့ မသင့်ပါ.....
Nyi Su said...
Delete Comment From: shwezinu
Blogger Nyi Su said...
ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့ ကိုယ့်ကိုကူညီထောက်ပံ့နေတဲ့သူကို ရှိခိုးတာ ဘာထူးဆန်းသလဲ....
ကိုယ်က မပြည့်စုံလို့ သူများအကူညီယူရတာ လူသိသွားမှာ ရှက်စရာလား... တကယ်လို့ ရှက်တတ်မယ်ဆိုရင်လည်း မရှက်တတ်အောင်ပဲသင်ပေးရမယ်။...လောကမှာ ဆင်းရဲတာဟာ ရှက်စရာမဟုတ်သလို ကိုယ်လုပ်ထားရက်နဲ့ လူသိမှာကြောက်လို့ ဖုံးကွယ်နေရတာဟာ ဘဝကိုပိုပြီးမောပန်းစေတယ်။ ဒါတွေကို ဂုဏ်တောင်ယူပြီး ငါ့ဘဝကိုကြိုးပန်းခဲ့တယ်..ဆရာဝန်ဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်း မရှက်မကြောက်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြတော့ ဘာဖြစ်လဲ...အဓိကက ကိုယ်သွားချင်တဲ့ လမ်းကိုရောက်ဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးလား...လူသိမှာကြောက်စေတဲ့ စိတ်ကို ဘာလို့ရိုက်သွင်းချင်ကြတလဲ...ဘာလို့များသိမ်ငယ်စရာပါလို့ အတင်းကို လုပ်ပြောနေကြာတာလဲ... ဒါတွေဟာ သိပ်ငယ်စရာလဲမလိုပါဘူး...။ လူတွေကကော အလကားနေ ဝင်ပြီး မုဒိတာပွားနေကြတာလဲ။
ဒီလိုပါဘဲ မြန်မာလူမျိုးတွေ ရဲ့ စရိုက်တွေက စုံပါတယ် ယဉ်ကျေးတာ အလှူရေစက် လက်နဲ့မကွာတာ အကောင်းမြင်တာ အနစ်နာခံတာ ပေးဆပ်တာ နံပါတ် ၁ ပါ တွန်းတင်တာ ချောက်ချတာ ခြေထိုးတာ ဖားတာ မနာလိုတာ မရှုဆိတ်တာ အတင်းအဖျင်းပြောတာ အလိုတော်ရိ လုပ်တာ တွေလည်း မြန်မာတွေပါဘဲ ဘယ်သူ့ဘက်မှ မလိုက်ဘဲ ပြောရရင် ဘယ်သူမပြု မိမိမှုဘဲ ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်ဖြစ်တာ ကြိုက်ရင်လုပ် မကြိုက်ရင် မလုပ်နဲ့ မှန်တယ် မှားတယ် ဆိုတာ ဘာနဲ့ တိုင်းတာသလဲ လူတိုင်းက ကိုယ်လုပ်တာ မှန်တယ်ဘဲ ထင်ကြတာ ကိုယ်မှန်တယ် ထင်တာဘဲ လုပ်ကြတာ ကိုယ်ပြောတာဘဲ မှန်တယ်ထင် ကိုယ်မှန်တယ်ထင်တာ ဘဲပြောကြ .. အဲဒီတော့ ရှိခိုးတာ မှန်တယ် ထင်ရင် ရှိခိုးပေါ့ ရှိမခိုးတာ မှန်တယ် ထင်ရင် ရှိမခိုးနဲ့ပေါ့ ဒီလောက် လွယ်တဲ့ ကိစ္စကို ခက်အောင် လုပ်နေကြတယ် အင်း .. အဲဒါလည်း မြန်မာတွေပါဘဲ လွတ်လပ်စွာ သဘောထား ကွဲလွဲခွင့် မရှိကြတော့ ဘူးလား ပြောတော့ ဒီမိုကရေစီ တဲ့ သူများပြောတာ ကန့်လိုက်တိုက် သူများလုပ်တာ အပြစ်မြင် သူများတွေ အားလုံးမကောင်း ကိုယ်ဘဲကောင်း.. အတ္တလေး တွေ တော့ လျှော့ဖို့ မသင့်ကြ ပါသလား ကလေးတွေကို ဟိုလို လုပ်ပါလား ဒီလို လုပ်ပါလား ပြောစရာ မလိုပါ သူတို့လည်း အသိစိတ် ရှိကြပါတယ် ဦးနှောက် ရှိ ကြ ပါတယ် သူတို့ ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ကြပါစေ အမြင်မတော်လို့ ပြောမိတဲ့သူက ပြောမိတယ်ဘဲထား အကြောင်းမှန်ကိုလည်း ဖော်ထုတ်တဲ့ သူက ထုတ်ပီးဘီ .. ဒါတောင် မရပ်နိုင်ကြသေးဘဲ မဆီမဆိုင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေပါ ဖော် .. ကာယကံရှင် တွေ တောင် ဘာမှ မပြောကြဘူး သဘောထား ကြီးကြပါပေ့ .. သြော် .. ကြက်တူရွေးက တော်တော် မယ်ဘော်တွေ ကဲ နေတော့ အင်း… တယ်လည်း ခက်တဲ့ လောကကြီးကိုး
မယ်ဘော်က တော်တော် သူ့အမေက ကဲကဲ......ဝင်ရှည်တာပဲမလား..ငြင်းနေတော့လဲ ဒီလောက်ဝင်မပြောချင်ရင် ရေးမနေနဲ့လေ မယ်ဘော့်အမေရေ
မင်းအုပ်စိုးနဲ့ ပြေတီဦးက ဘာမှ မဖြစ်ဘူး ကွန်မန့်ပေးတဲ့သူတွေ လက်ဝှေ့စင်ပေါ် တင်ရမလို ဖြစ်နေဘီ
လူတွေဆိုတာကလည်းနော် ဦးခင်ညွှန့်ကို လက်အုပ်ချီတော့ ပြောလိုက်ကြတာ... အဘွားကြီးတွေ ဒေါ်စုကိုလက်အုပ်ချီနေကြတော့မပြောကြဘူး... ကျော်သူကိုလက်အုပ်ချီတာ ကျတော့မပြောချင်ပဲ...ဒီမင်းသားမင်းသမီးကျမှ ထော်လော်ကန့်လန့်ဖြစ်ချင်နေကြတယ်...
တိုက်ဆိုင်လို့ပြောခဲ့ဦးမယ်...စစ်ဖိနပ်မချွတ်ပဲ ဘုန်းကြီးတွေကို စစ်တပ်က ဗိုလ်ချုပ်တွေတွေ့ခဲ့သလိုပဲ...ဒေါ်စုလဲ စီးလက်စဖိနပ်တောင် မချွတ်ပဲ ဘုန်းကြီးကို ငွေလျှူတာပဲလေ... ပြောချင်တာက အပြစ်တင်မတင်ခင် ကိုယ့်အတ္တကင်းအောင်အရင်လုပ်စေချင်တယ်..ငါချစ်တဲ့သူကျ မသိချင်ယောင်ဆောင်လိုက်မယ်..မုန်းတဲ့သူကျမှ နှိပ်ကွက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကိုရှောင်စေချင်တယ်...လူတိုင်းကို တူတူညီညီပဲ ပိုင်းခြားဝေဖန်စေချင်တယ်
“ မြန်မာ တွေဟာ ဒါကြောင့် မချမ်းသာကြ တာဗျ၊ လူတယောက် တိုးတက်ရင် သူတို့တွေက မနာလိုကြဘူး၊ နည်းမျိုးစုံနဲ့တိုက်ခိုက် နေပြီး
Nay Myoo Aung Lan said...
မင်းအုပ်စိုး ကလေးတွေဘက်က ငဲ့ညှာတွေးပေးတာမှန်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျန်တဲ့အချက်တွေ က လက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူး။
ဒီပွဲမှာ ကလေးတွေကိုချိုးနှိမ်ချချင်တဲ့စိတ်ကြောင့် မဖြစ်မနေကန်တော့ကိုကန်တော့ရမယ်ဆိုတဲ့အခန်းတော့ ထည့်ပေးမှာမဟုတ်လောက်ပါဘူး။ ကလေးတွေအတွက်တွေးပေးသလို လှူပြီးသွားတဲ့ အလှူရှင်သူငယ်ချင်းဇနမီးမောင်နှံအတွက်လည်း တွေးပေးသင့်တယ်။
ကိုယ်က မပြည့်စုံလို့ သူများအကူညီယူရတာ လူသိသွားမှာ ရှက်စရာလား..
To Stipend students,
Accept reality, poverty is no sin and be honest in everything.
We appreciate to your hard studying, everyone face
financial problems once in life time.
In return, please share to poorer when you reach good status.
ဒါဆို သူပိုင်တဲ့ ဂျာနယ်မှာ သူရေးချင်ရာရေးတဲ့ သဘောပေါ့...မှားပါတယ်.....
RE: မင်းအုပ်စိုး ဦးစီးထုတ်ဝေသည့် သရပါ မဂ္ဂဇင်း
ဘာသာရေးအရ ရှက်ရမှာ နဲ. ကြောက်ရမှာ ခွဲခြားတတ်ပြီး ရင်.ကျက်ပြည်.၀သော သူများ..သဘောထားမှန်သူများ ထွန်းကားစေရန်..ဂျာနယ်တွေ media တွေက ကူညီပေးကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊.စာရေးသူရော.. ဂျာနယ်ထုတ်ဝေသူပါ...ရင်.ကျက်မှုကို အားပေးသော စာများ ၊ အရေးအသားများသာ ထုတ်ဝေသင်.ပါတယ်.. အခုလို အရေးအသား များကို တင်ဆက်ဖြင်းအားဖြင်. စာဖတ်သူတွေကို သဘောထားမှားအောင် တွန်းပေးရာ ရောက်စေပါတယ်.. အဲဒါကြောင်. (blog ပိုင်ရှင်မပါပါ) စာရေးသူရော..ဒီလိုစာများကို ရွေးချယ်တင်ဆက်တဲ. ဂျာနယ်၊မဂ္ဂဇင်းများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန်.ကွက် ရှုတ်ချပါတယ်..
ကျော်သူ နဲ. ပြေတီဦး နှိုင်းစရာမဟုတ်ပါ
လူတစ်ဖက်သားဆီက အထောက်ပံယူတာ အသင်းဖွဲ့တခုခုဆီက အထောက်ပံ့ယူတာ ဘာ၇ှက်စရာမှ မလိုပါဘူး။
လူတွေသိသွားဖို့လည်း စိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေစရာမလိုပါဘူး။ အဲလိုစိုးရိမ်စိတ်ရှိဖို့လည်း အားမပေးသင့်ပါဘူး။ ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့အလုပ်အတွက် ဘယ်သူသိမှာမှ ရှက်စရာမဟုတ်သလို အသက်ကြီးတဲ့ သူ ကိုယ့်အပေါ်ကျေးဇူး၇ှိတဲ့သူကို ဘာမှ ပြန်မလုပ်ပေးနိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာ အရိုသေပေးတာ လူ့ဘောင်အတွက် ကောင်းသော ဓလေ့ပါ။ သိမ်ငယ်စရာမရှိပါ။ သိမ်ငယ်ရမယ်လို့ အတွေးတွေ ရီုက်သွင်းချင်နေတာလဲ မကောင်းပါ။ စိတ်ဓာတ် ခွန်အားရှိကြပါစေ။
စာရေးသူကိုမေးချင်တာရှိတယ်... တကယ်လို့ ပြေတီဦးဖောင်ဒေးရှင်းက ဒီကလေးငယ်တွေကို တာဝန်မယူတော့ဘူးဆိုရင် မင်းအုပ်စိုးတာဝန်ယူမှာလား... ကလေးတွေကန်တော့တာအပြစ်လား.... ကျွန်မဆို ညတိုင်း (တစ်ရက်၊ တစ်မနက်၊ တစ်စက္ကန့်ကြီးတဲ့လူတိုင်းကို ကန်တော့တယ်၊ တစ်လုပ်စားဖူး ကျေးဇူးရှင် နှစ်လုပ်စားဖူးကျေးဇူးရှင်တွေနဲ့ သင်ဆရာ၊ မြင်ဆရာ၊ ကြားစရာတွေကို ကန်တော့တယ်) ကျေးဇူးရှင်ကို ကန်တော့တာ ရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီခေတ်မှာ သာမာန် လူတန်းစားအနေဲ့ ဆေးကျောင်းတက်ရဖို့ မပြောနဲ့ သူငယ်တန်းတက်ရဖို့တောင် လွယ်တာမဟုတ်ဘူး။ ဆေးကျောင်းတက်မဲ့ ကျောင်းသားတွေက IQ မနိမ့်ပါဘူး။ သူတို့အနေနဲ့ ထောက်ပံ့ကျေးနဲ့ ကျောက်းတက်တာ ရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ (သူများလင်/မယား၊ သူများပစ္စည်းခိုးတာ ရှက်စရာပါ) ကလေးတွေကို မကူညီချင်နေပါ မနှောင့်ယှက်ပါနဲ့..
အထက်မှာ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လို ကွန်မန့်ပေးတယ်ဆိုတာတော့ ကျမ သေချာ မသိဘူး...ဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီးပြောချင်တာတော့ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် မျောက်ပြပြီး ဆန်တော့ မတောင်းကြနဲ့ပေါ့...ကလေးတွေကိုတော့ ကိုယ်ချင်းစာတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒါက မြန်မာပြည်ထဲမှာ အခုမှဖြစ်တဲ့ပြသနာ..အပြင်မှာဖြစ်နေတာကြာပေါ့...ဒါက ပြေတီဦးတို့က ဒိုနာတွေ ထပ်ရပါစေတော့ရယ်လို့ ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်တာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်..အပြင်မှာတော့ ဒိုနာ...ဒိုနာ...ဒိုနာ ဆိုတာကို အိပ်ရင်တောင် ယောင်နေကြတာဆိုတော့ အဲလိုလုပ်ရင် သေချာတယ်...မျောက်ပြပြီးဆန်တောင်းတာပဲ....ဒီမှာ...ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမျောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးလို့ ဒီကလေးတွေကို ကိုယ်ချင်းစာတယ်...သူများနိုင်ငံတွေမှာအဆင်မပြေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် စာတော်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် စကော်လာရှစ်တွေပေးကြပါတယ် တခြားနိုင်ငံက ကလေးတွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်တယ်..ကိုယ့်နိုင်ငံထဲက ကလေးတွေကိုလည်း တက္ကသိုလ်တွေက ပေးကြတယ် ..ဒါပေမယ့် အခုလို ဟော်တယ်ပေါ်တက်ပြီးတော့ တော့ ဘယ်သူမှ ဓါတ်ပုံရိုက်သတင်းထဲထည့်တာ တွေ့ဖူးဖူးကွယ်...ပြောချင်တာက ...မျောက်ပြပြီးဆန်တောင်းမယ်ဆိုရင် ဆင်ခြင်...အဲလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်း သာဓုခေါ်ပါတယ်...အပြင်မှာကတော့ နိုင်ငံခြားသားတွေကလည်း တခြားကိုယ့်ထက်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံက လူတွေကိုပြပြီး ဆန်တောင်းတာပဲ...သူတို့နိုင်ငံသားအချင်းချင်းလည်း ချမ်းသာသူက ဆင်းရဲတဲ့သူကိုပြပြီးဆန်တောင်းတာပဲ...လောကကြီးရေ..အားကြီးသောသူက အားငယ်သောသူကို အနိုင်ယူတာ လက်နက်မှမဟုတ်ဘူး...ဆိုတာ ပြောပြချင်တယ်....ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲံ့လည်း ကိုယ့်နိုင်ငံကိုသူများက လက်ညှိုးထိုးပြီး မျောက်ဖြစ်အောင် မလုပ်မိဖို့ တက်အားသမျှ ကူညီရမှာလေ..ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က ကိုယ့်ကလေးတွေကို မျောက်အဖြစ်တော့ အသုံးမချလိုက်ကြပါနဲ့ ရုပ်ရှင်လောက သားတွေ စာပေလောကသား မီဒီယာလောကသားတွေရေ ....ကျေးဇူးတင်တယ်။။
ကျနော်တစ်ခုထောက်ပြချင်တာက ဒီပွဲမှာစာနယ်ဇင်းလောကမှာနာမည်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့ ဦးမြတ်ခိုင်ပါဝင်နေပါတယ်..သူဟာဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာ အားလုံးသိပြီးသားပါ..အဲဒီအတွက်ဒီပွဲမှာတစ်ခုခုတော့မှားယွင်းနေပြီလို့ ထင်ပါတယ်(ကျနော့်အထင်ပါ)။ ။
ခင်ညွန့်ကိစ္စ၊ စစ်သားတွေ ဖိနပ်မချွတ်တဲ့ကိစ္စ မဆီမဆိုင်လာပြောတဲ့ anonymous သို့။ စစ်တပ်ကိုတော့ ကြည့်မရလို့၊ တွေ့တဲ့နေရာ ပါးရိုက်ချင်နေကြလို့ လူတွေက အပြစ်မြင်တာပါ။ မဆိုင်တာတွေ ဒီနေရာမှာ လာဆွဲမထည့်နဲ့လေ။ နင်တို့က မေတ္တာထားချင်စရာမရှိလို့ တွေ့တဲ့နေရာ ပါးဆွဲရိုက်ချင်တာ နင်တို့အလွန်လား ငါတို့အလွန်လား။
နင့်ကို မဒိန်းကျင့်သွားတဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုကြည့်မရတာလား သေချာပြန်စဉ်းစားဦး..
စစ်တပ်မှ မဟုတ်ဘူး လူလဲ အကျင့်မကောင်းချင်မကောင်းတာပဲ ဝါးလုံးချီးသုတ်ပြီး မယမ်းနဲ့...ယမ်းချင်ရင် အမျိုးအလျှူမှာ သွားရမ်း...အာမချောင်နဲ့ နင်တို့ကို တွေးတတ်အောင် သင်ပေးနေတာ...
လူတိုင်းမှာ အထင်ကြီးခံလိုစိတ် လူတိုင်းမှာ ရှိပါတယ်..ဆိုတာ ဒီစာက သက်သေပြလိုက်တာပါ။ စာရေးတဲ.သူက သူရေးတဲ.စာနဲ.အထင်ကြီးအောင် လုပ်ပြတယ်..
အလှူအတန်းလုပ်တဲ.သူက သူလုပ်တဲ.အလှူနဲ. အထင်ကြီးအောင် လုပ်ပြတယ်..
အဲဒါကြောင်. ဆရာတော် တစ်ပါး ဟောထားတာ.. လူတွေဟာ သူများအတွက် သူများအထင်ကြီးခံရဖို. ပဲလုပ်နေကြတာဆိုတော. သူများအတွက် ကြီးပြင်းနေတာ ပါလို. ပြောလို.ရတယ်တဲ.။
အထင်ကြီးခံချင်စိတ် အနည်းနဲ.အများပဲကွာတာပါ။ လူတိုင်းဟာ အထင်ကြီးအောင် ကြိုးစားနေကြတာချည်းပဲ..
ဥပမာ..အခု ဒီအလှူမျိုးကို နာမည်ကြီးအောင်
လုပ်နေပါတယ်လို. ကွန်.မင်.ပေးထားသော ဘလော.ဂါများ - မိမိတို. အထင်ကြီးခံရဖို.မလိုပါဘူး မိမိတို.ရေးထားတာ တော်ပါတယ်ဆိုတဲ.
လူအထင်ကြီးခံရမှု မလိုချင်ဘူး ဆိုရင်.........
မိမိ ဘလော.မှရေးထားသောစာများ ကူးယူလိုပါက.. အောက်မှာ မိမိဧ။်နာမည်နဲ. website လိပ်စာလေးကို ထည်.ဖြစ်အောင်ထည်.ပေးပါလို. ကြော်ငြာ ခိုင်းဖို.မလိုတော.ပါဘူး။ ဘလော.ရေးတာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းအတွက် ဆိုရင်လည်း password ခံထားလိုက်ရင် တခြားသူတွေ မကြည်.တော.ပါဘူး။ အခုတော. ကိုယ်ရေးထားတာကို ကြွားလည်း ကြွားချင်သေးတယ်။ ကိုယ်က ငကြွားမဟုတ်ပါဘူးလို.လည်း လက်မထောင်ပြချင်သေးတာ..ဘလော.ဂါဆိုပြီး အများအတွက် အတွေးအမြင် ဗဟုသုတတွေပေးဝေနေသော စေတနာရှင် အလှူရှင်များ လူတိုင်းမှာ ပုထုဇဉ်တိုင်းမှာ ကြွားဝါချင်စိတ် အနည်းနှင်.အများတော. ရှိပါတယ် ဆိုတာ ထောက်ပြရုံသက်သက်ပါ။
ဘလော.တွေထဲက ကူးပြီး အီးမေးနဲ. forward လုပ်ကြလို. အောက်ဆုံးမှာ ကိုယ်.နာမည်လေး မတွေ.လိုက်ရဘူးဆိုရင် ကိုယ်.နာမည်လေးထည်.ပေးဖို. တောင်းဆို
ကြတဲ.သူများကို တွေ.မိရင် စိတ်ထဲက ပြုံးနေမိပါတယ်ဗျာ။
ခင်ဗျား မှားနေပြီ။ ဒါဟာ source တစ်ခု မပျောက်အောင် ၊ Copy right တစ်ခု ဖွံ့ဖြိုး လာအောင် လေ့ကျင့်သလိုလည်း ဖြစ်တယ်။ အရင်က ဒီလိုတွေ မြန်မာတွေ ကြားမှာ အလွယ်တကူ ကူးယူ ဖော်ပြကြလို့ မြန်မာတွေမှာ သမိုင်းတွေ ပျောက်ကုန်တာ ၊ ဝေဝါးကုန်တာတွေ အများကြီးပဲလေ။ ဒါကို ခင်ဗျား နားလည်မယ် ဆိုတာ ဒါတွေကို ခင်ဗျား ပြောမှာ မဟုတ်ဘူး။ ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ ကြိုးစား အားထုတ်မှုကို ခင်ဗျား နားလည်သင့်တယ်။
အင်း . . ထင်တာ ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ ခင်ဗျားက ဒီလို လွယ်လွယ် လျှောက်ကူးနေတဲ့ လူပဲ ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ အခုလို နာမည်နဲ့ Email တွေကို ထည့်ခိုင်းတော့ ခင်ဗျား မကျေနပ်ဘူး ထင်ပါတယ်။ ဒါဆိုလည်း မကူးနဲ့ပေါ့ဗျာ။ သူ့စည်းကမ်းကိုတော့ ခင်ဗျား လေးစားသင့်တာပေါ့။
တစ်ခုပေါ့။ ခင်ဗျား . . အရင် သူတို့တို့ တစ်ခုခု အောင်မြင်အောင် ဖန်တီးပြပါလား။
အားလုံး အမှားကိုထောက်ပြတဲ့အရာတွေကို လက်ခံပါတယ်။ ပြေတီဦးတို့အနေနဲ့ မစဉ်းစားမိဘဲလုပ်လိုက်မိတဲ့အရာတစ်ခုကို ကိုမင်းအုပ်စိုးက ထောက်ပြတယ်လို့မြင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မင်းအုပ်စိုးရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေ မဆိုင်ဘဲ ထည့်ပြောနေတာကတော့ လူပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ မုန်းတီးလို့ ရေးနေတာနဲ့တူတယ်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ကိုမျှမျှတတမြင်ပြီး အကောင်းမြင်စိတ်တွေ မွေးဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်။ အခုဟာက ရေးတာမကြိုက်ရင် ရိုးရိုးသားသားနဲ့မရေးသင့်ဘူးပြောပေါ့။ ခုဟာက မဆိုင်တာတွေထည့်ပြောနေကြရအောင် နင်တို့တွေကရော ဘာကောင်တွေ ဘာကောင်မတွေမို့လဲ။ ကိုယ့်ဘာသာအရင်ပြန်စဉ်းစား။
ကိုယ့်ဘက်ကကြည့်တော့ လက်ဖဝါး သူ့ဘက်ကကြည့်တော့ လက်ဖမိုး ဆိုတာမျိုးပဲ။ ကိုယ်မှန်တယ်ထင်တိုင်းလဲ သူများမှားတယ်လို့ပြောစရာမလိုပါဘူး။ ပြေတီဦးလဲ နဲနဲတော့ ပိုတာအမှန်ပဲ။
ခုမှ ဖတ်မိတယ်။ ကိုမင်းအုပ်စိုးရယ်လို့ပဲ ရေရွတ်မိတော့တယ်။ ဟို ဘဘကြီးတွေ ကြွေးကြော်နေတဲ့ အဆိုးမြင်ဝါဒီဆိုတာ ဒါကိုပြောတာပဲနေမှာပဲနော်။ ပညာသင်ဆုချီးမြှင့်တာကိုများ မနာလိုမရှုစိမ့်ဖြစ်နေလိုက်တာဗျာ။ ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲရရ။ ပညာသင်ဆုရတယ်ဆိုတာ လူတော်လေးတွေမှရတာပါ။ ဒါဟာရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံတကာကကျောင်းတွေမှာ စကော်လာဆိုရင် လူတော်တွေလို သတ်မှတ်ထားပြီးသားပါ။ ရှက်ရင် အစကတည်းက မလျှောက်နဲ့ပေါ့ဗျာ။ တလွဲဆံပင်ကောင်းနေလိုက်တာဗျာ။
ဆင်းရဲဘူးတဲ့သူဆိုရင် ပိုနားလည်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ် သိမ်ငယ်စရာ၇ှက်စရာကိစ္စမဟုတ်ပေမယ့် ဟာ ဒီကောင်ကထောက်ပံ့ကြေးနဲ့ကျောင်းတက်နေတာပါဆိုပြီး နှိမ်မဲ့သူတွေအများကြီးပါ ပြီးတော့ ထောက်ပံ့ကြေးယူထားတဲ့သူတိုအကုန်လုံးကလဲ ဒါ၇ှက်စရာကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီး စဉ်းစားမိချင်မှစဉ်းစားမိမှာပါ့စိတ်ထဲမှာသိမ်ငယ်စိတ်လေးတော့ရှိမှာပါပဲ..နိုင်ငံတကာမှာကော အလိုဓါတ်ပုံထည့်ခွင့်ရှိလို့လား မ၇ှိဘူးထင်ပါတယ်
It is pretty sure that they are not going to stop the scholarship after receiving the comments like this.
In the future, they'll be careful for their actions. That's what this article aims for.
I'd like to suggest you to read and think about this again. Pls try to read between the lines.
From what I see, this article is not about PTO or MOS. This is about how to help others sincerely and not to offence ppl who receive help.
I am not even MOS's fan.
But I totally agree with him from the start. Not because he is talking bad about PTO but because what he wrote is totally true.
Don't read an article like you are readinganovel.
Be rational (Don't be too cautious about who wrote this but be cautious about the content). Only then you will see the truth.
Don't be rude! It is not Myanmar's spirit.
လောကမှာကိစ္စတိုင်းဟာသူ.အကြောင်းနဲ့သူရှိကြပါတယ် ။ ဒါကိုအပေါ်ယံလေးကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူး ။ ကိုယ်တွေ့တွေကိုဘဲပြန်စဉ်းစားကျပါဦး ။
အထင်လွဲခံရတယ်ဆိုတဲ့စကားဟာအလကားပေါ်လာပါ့မလား ။ မြတ်စွာဘုရားကိုတောင် မိန်းမနဲ့ခလေးကိုပစ်သွားတဲ့လူဆိုးလို့အပြောခံရသေးတာဘဲလေ
ပြေတီဦး ရဲ့ အလှူ နဲ့ ပက်သတ်လို့ ပေးထားတဲ့ကွန်မန့် တစ်ခုပါ (အွန်လိုင်း ပြတိုက် ဒေါ့ ကွန်း မှ....)
ကျနော်က ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတဲ့ ရုပ်ရှင်အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲကပါ ။ ကျနော့် အနေနဲ့ ကိုအုပ်စိုး အကြောင်းကို ကွန်းမက်ဝင်းရေးရန် မသင့်တော်လို့ ပြန်ဖျက်ခဲ့ပါတယ် ။ ကာယကံရှင် နှစ်ဦး စလုံးဖြစ်တဲ့ ကိုအုပ်စိုးနဲ့ရော ကိုပြေတီနဲ့ရော ကျနော်နဲ့ ခင်မင်ပါတယ် ။ ၂၀၀၇လောက်တုန်းက မြ၀တီနယ်စပ် ရွေကုက္ကိုလ် DKBA တပ်မ ၉၉၉ မှာ တစ်လတိတိ ငတ်ငတ်ပြတ်ပြတ် အတူနေခဲ့ဘူးလို့ ကိုပြေတီ့စိတ်ဓါတ်ကို ကျနော်ကောင်းကောင်း နားလည်ပါတယ် ။
ဒီနေ့ ကျနော် ကိုဝင်းကြည်နဲ့ စကားပြောဖြစ်ပါတယ် ။ ကိုဝင်းကြည်ဆိုတာ စိန်ဠေးဗီဒီယို ပိုင်ရှင် ပြေတီဦးဖောင်ဒေးရှင်းမှ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးပါ ။ ကိုပြေတီနဲ့လည်း စကားပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ သူတို့အနေနဲ့ ပြန်လည် ဖြေရှင်းချင်စိတ်မရှိကြပါဘူး ။ တော်တော်လေးလည်း စိတ်ညစ်နေကြပါတယ် ။
ကျနော်က ကြားနေသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ အမှန်တရား ပေါ်ပေါက်စေချင်သူပါ ။ ကိုအုပ်စိုးရေးထားတဲ့ အကြောင်းတွေက ဖြစ်စဉ်ရဲ့အကြောင်းကို အလုံးစုံမသိပဲ ရေးထားသလိုဖြစ်နေပါတယ် ။
ဖြစ်စဉ်က ဒီလိုပါ ။ ( အစီအစဉ် ပြီးဆုံးချိန်မှာ ကိုဝင်းကြည်က ကလေးတွေကို ဘုရားလိုက်ပို့ဖို့နဲ့ ဂိမ်းစီးတီးမှာ ကစားစေဖို့ အတွက် ငွေကိုင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးဖို့ လူတစ်ယောက်ထည့်ပေးလိုက်ပြီး နှုတ်ဆက်စကား ပြောဆိုကြပါတယ် ။ ဒီအချိန်မှာ အရင်နှစ်ကလည်း သူသဘောနဲ့သူ ကန်တော့ခဲ့တဲ့ ကလေးတစ်ဦးဟာ ကိုပြေတီတို့ကို ၀င်ကန်တော့ပါတယ် ။
ဒါနဲ့ပဲ ကျန်ကလေးများကလည်း ၀ိုင်းပြီးကန်တော့ ကျပါတယ် ။ အဲ့လိုကန်တော့နေချိန်မှာ ကိုဝင်းကြည်က ကိုပြေတီကို ကလေးတွေက လူကြီးမိဘကို ရှိခိုးဦးချရင် မုန်ဖိုးပေးရတယ်လို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ။ ကိုပြေတီကလည်း ပိုက်ဆံပါမလာကြောင်းပြောရ်ျ ကိုဝင်းကြည်မှ ၅ထောင်တန်တစ်အုပ် ထုတ်ပေးပြီး ကိုပြေတီက တစ်ဦးကို ၅ ထောင် မုန့်ဖိုးပေးခဲ့ပါတယ် ) ။
ဒါကို မီဒီယာသမားကဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး ဂျာနယ်ပေါ်ရောက်လာတာပါ ။ လှုသူနဲ့ အလှုခံသူကြားမှာ အမှန်တကယ်ရိုးရိုးသားသားနဲ့ ရှိခိုးကန်တော့ခဲ့ကြတဲ့ မြန်မာဆန်ဆန် ဓလေ့စရိုက်မျိုးလေ့မို ၀မ်းသာပီတတိလည်း ဖြစ်မိပါတယ် ။
ကိုပြေတီတို့ ကိုဝင်းကြည်တို့ အနေနဲ့ စေတနာမှန် သဘောထားမှန်နဲ့ ငွေကုန်ကြေးကျခံကာ အလုပ်မအားလပ်သည့်ကြားမှ ပြုလုပ်နေသော ကောင်းမှု့ကုသိုလ်တစ်ခုကို ကိုပြေတီ့ ပရိတ်သတ်များ အထင်မလွဲကြစေရန် အမုန်းခံပြီး ၀င်ပြောမိသွားတာပါ ။
ပြေတီဦးအိမ်ထောင်ရေး- နံမယ်ပျက်မရှိ ၊မိန်းမတယောက်ကိုအတည်တကျယူထားတာပါ
ပြေတီဦးလူမှုရေး - မင်္ဂလာဆောင်တုန်းကကြည့်ပါ ။
မင်းအုပ်စီုး - သူကဒီစာကိုရေးထဲကတခါထဲ သူ.ကိုယ်သူ ကာဗာလုပ်ထားတယ် ဘာတဲ့
သြော် ကိစ္စတစ်ခုကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချတိုင်းသာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်ဆိုရင်တော့ တိုင်းရေးပြည်ရာအုပ်ချုပ်နေတဲ့လူဆိုတာတွေ ပေါ်ပေါက်လာမှာတောင်မဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ ဒီ laythwaymaung ပြောပုံအရ မင်းအုပ်စိုးနဲ့ကလေးဖျက်ချခဲ့ရတဲ့မိန်းကလေးတွေထဲမှာ သူ့ညီမနဲ့ သူ့မိန်းမပါနေပုံရတယ်။ အတွင်းရေးဆိုတာ အတွင်းကပဲလာတာလေ။ မဟုတ်ဘူးလား။ ခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့် သိနိုင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားခံစားနေရတာကိုနားလည်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့လည်း အပြင်မှာတွေ့ပြီးဖြေရှင်းပေါ့။ ဘာဖြစ်လို့ ဒီကိစ္စကြီးကို ဒီပေါ်မှာ ပြောရတာလဲ။ ခင်ဗျားညီမနဲ့မိန်းမကို တာဝန်ယူပေးဖို့ သွားပြောပေါ့။ မဟုတ်ဘူးလား laythwaymaumg. ဟဲ ဟဲ
နီဂရိုးထူးပြောတာမှန်တယ်။ ထောက်ခံတယ်။ ဟုတ်သားပဲ ကိုယ့်အချင်းချင်းညှိနှိုင်းကြပေါ့။ ဒီလိုကြီးကျတော့ မကောင်းပါဘူး။ နောက်တစ်ခါဆို ဖျက်မချနဲ့ မွေးလိုက်..................................။ ဒါဆို ok ပဲ။
ဒီကိစ္စနဲပါတ်သက်လို့ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်၊ အတ္တ ၊ နဲ့ ပြောချင်တာမရှိပါဘူးကွယ် ။
ပြေတီဦး ကိုချစ်လို့ဖြေရှင်းပေးနေတာမဟုတ်သလို ၊မင်းအုပ်စီုးကိုမုန်းနေလို့ပြောတာလဲမဟုတ်ပါဘူးနော် ။
ကောင်းတာလုပ်နေတဲ့လူတွေ လမ်းကြောင်းဖြောင့်ဖြူးစွာဆက်လျှောက်နိုင်ဘို့အတွက်ခလုပ်ကန်သင်းရှင်းပေးတဲ့သဘောပါဘဲနော် ။
ငါထင်တာမှန်ရမယ်လို့တယူသန်စွဲချင်စိတ်မရှိလို့ အငြင်းသန်ဘို့ဆန္ဒမရှိပါ ။
အော်...facebook တွေ website တွေ blog တွေပေါ်လာမှဘဲ လူတွေရဲ့စိတ်ထားတွေပိုသိလာရပါကလားးးး
အကယ်ဒမီဆု ရရှိပိုင်ဆိုင်သွားတဲ့ ကိုပြေတီဦးအတွက် အများကြီး ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ပညာရေးဆိုလဲ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့၊ ကြင်ယာဆိုလဲ A list စာရင်းဝင် နိုင်ငံကျော်မင်းသမီးကို ရအောင်ယူထားတယ်။ လူမှုရေးဆိုလဲ ဖောင်ဒေးရှင်းထောင်ပြီး ပညာတော်တဲ့ကျောင်းသားလေးတွေကိုပါ ထောက်ပံ့နေတဲ့ ဒီလိုမျိုးအနုပညာရှင် စေတနာမှန်လို့ အောင်မြင်မှုတွေ အထပ်ထပ်ရရှိနေတာကို မုဒိတာပွားသွားပါတယ်။
i juz seen this post and many comments,,,,
i have no word to say,,except,,
keep going dude..(PTO)
No worry be happy,,,,everything's gonna be fine,,,eh??;)
၁၅ရက်နေ့ကဆိုထားတာပဲ၊ (ရုပ်ရှင်နှင့်ဗွီဒီယိုသရုပ်ဆောင် မင်းအုပ်စိုး အရက်သေစာမူးယစ်သောက်စားမှု
ကြောင့်တာမွေမြို့နယ် ဖိုးစိန်လမ်း Holly Day စားသောက်ဆိုင်ရှေ့လမ်းမတွင်၁၅မိနစ်ခန့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့ .
… ရုပ်ရှင်နှင့်ဗွီဒီယိုသရုပ်ဆေင်မင်းအုပ်စိုးမှ အရက်သေစာမူးယစ်သောက်စားပီး သစ်ပင်များအား မီးရှို့ခဲ့သဖြင့် လာရောက်မီးငြိမ်းသတ်ခဲ့သော မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား အော်ဟစ်ဆဲဆိုခြင်း လုံခြုံရေးလုပ်ငန်း လာရောက်လုပ်ဆောင်သော တာမွေမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှ ရဲကား ၇ခ။ ၁၇၂၄ ယာဉ်အား လက်သီးဖြင့်ထိုးသောကြောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပိုင်ယာဉ် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့သဖြင့် ပ-၇၆/၂၀၁၂ ပုဒ်မ ပပက ၆၁ ဖြင့်လည်းကောင်း ရရ/၂၀၁၂ ပုဒ်မ ၂၉၄/၃၅၃ ဖြင့် ဒုရဲအုပ် အောင်ကျော်ထွန်းတရားလိုပြုလုပ်ပြီး အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သိရှိရ/
လည်းကောင်းအနေဖြင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ရှိ ရဲစခန်းများတွင် အမှုပေါင်း ၁၁မှုကျူးလွန်ထားကြောင်း သိရှိရ)
မင်းအုပ်စိုးကိုလေးစားတဲ့ အထင်ကြီးတဲ့ ချီးကျုးတဲ့ သူများ ဖတ်စေချင်လို့ပါ.. ဖတ်ကြည့်ကြပါ။ ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်စေချင်တယ်
သြော်... အခုလို မင်းအုပ်စိုးရဲ့ နိမ့်ကျတဲ့ အပြုအမူကို ပုံတွေနဲ့တကွ တွေ့လိုက်ရတော့ သူ့အကျင့်၊ စရိုက်၊ အဆင့်အတန်းကို ပိုလို့တောင် သိလာရသေး..ဟေးဟေး
ကိုယ့်ကိုယ်ကို မြင်အောင် ကြည့်တတ်ဖို့ပဲ လိုပါလိမ့်မယ်...။
အချိန်က စကားပြောတယ်ဆိုတာ သိပ်မှန်တာပဲ... :)))
အင်း ဒီမိုကရေစီတောင်(တကယ်)မရသေးဘူး လွတ်လပ်နေလိုက်ကြတာ... ပြောကို ပြောချင်တော့ဘူး...ဟွန်း :(
အပြုသဘောနဲ့မဝေဖန်ပဲ အပျက်သဘောနဲ့ဝေဖန်နေသမျှ ကာလပတ်လုံး ဒီမိုကရေစီဆင်းရဲတွင်းနက်နေလိမ့်မည်...
၁) မင်းအုပ်စိုး ပဲမြစ်ကိစ္စ ကာဗာ လုပ်သလား ခွိခွိ
၂) ရွှေစင်ဦး ပွဲဆူအောင် လုပ်တယ်
၃) လူတွေ တော်တော် အားယားနေကြတယ်
၄) မနေနိုင်မထိုင်နိုင်သူ တီချမ်း
အဲ့ဒီ ဆောင်းပါးရေးတဲ့ အချိန်မှာ ပြေတီဦး တို့ ဘက်က အကယ်ဒမီ လိုထားပြီး ဖြစ်မယ် သို့မဟုတ် မင်းအုပ်စိုးနဲ့ ပြေတီဦး အပြိုင်လိုက်ပြီး ရှုံးပြီး ဖြစ်ရမယ်
သူရေးတာ က အမုန်းဓါတ်ခံ နဲ့ရေးတာ အသေချာကြီးပဲ သို့သော် အလှုရှင်များကလဲ အပြောခံ ရအောင် လုပ်မိသလိုဖြစ်နေတယ်
ပြောချင်တဲ့ လူကတော့ ပြောဖို့အကွက်စောင့်နေမှာပဲ
ခုတောင် အကွက်ဝင်တာနဲ့ပြောလိုက်ကြတဲ့ လူတွေဆိုတာ အမ်.......
kyaw thunaing said...
မှန်တယ်ဗျာ ဆောင်းပါးကိုအပြည့်အ၀ထောက်ခံတယ် ကမ္ဘာမှာလှူတန်းငွေအများဆုံးကိုလှူတန်းခဲ့တဲ့ Bill gate ကို ဘယ် အလှူခံတဲ့သူမှကန်တော့တာကိုမကြားဘူးမိပါဘူး Bill gate ကလဲ မာန်တက်နေတဲ့ အပြုအမူမတွေ့ဘူးပါ